Sirarch – 2माछा
घर / बाइबल / पुरानो नियमका / Sirarch
पी:1 धेरै ठूलो कुरा को ज्ञान व्यवस्था हामीलाई प्रकट गरिएको छ, र अगमवक्ताहरूलाई, र अन्य पुस्तकहरू यी पछि कि. यी कुराहरूको, इजरायल प्रशंसा गर्न पर्छ, किनभने सिद्धान्त र बुद्धि को. आवश्यक छ, मात्र ती लागि जो बताइरहेका छन्, तर पनि आउटसाइडर्स लागि, दक्ष हुन, बोल्ने र लेख्ने दुवै, धेरै सिकेका हुन्छन् त गर्न.
पी:2 मेरो हजुरबुबा येशूले, उहाँले व्यवस्थाको एक लगनशील पढाइ पूर्णतया आफूलाई दिनुभयो पछि, र अगमवक्ताहरूलाई, र हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई तल हस्तान्तरण थिए कि अन्य पुस्तकहरू, पनि केही आफूलाई लेख्न चाहन्थे, सिद्धान्त र बुद्धिलाई pertain कुराहरू बारे, त्यसैले सिक्न र थप र मनमा थप ध्यान हुनेछ यी कुरामा दक्ष बन्न चाहन्छन् जो कि भन्ने, र बाँच्न बलियो हुनेछ व्यवस्था अनुसार.
पी:3 अनि त, म उदारता साथ भेट्नुपर्छ गर्ने सल्लाह दिन्छ, र ध्यान दिएर अध्ययन संग पढाइ गर्न, हामी जस्तो लाग्न सक्छ जब यी कुरामा forbearing हुन, बुद्धि को छवि पछि लाग्दा गर्दा, शब्दहरूको संरचना मा छोटो गिर.
पी:4 हिब्रू शब्द कमी हो को लागि जब उनि अर्को भाषामा अनुवाद गरिएको छ.
पी:5 र मात्र यी शब्दहरू, तर पनि व्यवस्था नै, र अगमवक्ताहरूलाई, र पुस्तकहरू को शेष, तिनीहरूले आफ्नै भाषामा बोलेको छ जब कुनै सानो फरक छ.
पी:6 राजा टोलेमी Euergetes समयमा लागि, तीस-आठौं वर्षमा म मिश्र आइपुगेका थिए पछि, म लामो समय को लागि त्यहाँ गएको थियो पछि, मैले पाए, त्यहाँ छोडेर, एक सिद्धान्त संग पुस्तकहरू सानो न त अधम न.
पी:7 र त म यो पुस्तक अनुवाद गर्न मलाई केही महत्वपूर्ण परिश्रम र श्रम लागू गर्न को लागि राम्रो र आवश्यक दुवै मानिन्छ.
पी:8 त्यसपछि, समय को एक लम्बाइ भन्दा सिद्धान्त धेरै attentiveness पछि, म कुराहरू छलफल भइरहेको एक नजिक ल्याइएको, त्यसैले सिक्न आफ्नो मन लागू र इच्छुक निम्ति यो पुस्तक प्रदान गर्न तिनीहरूले कसरी जीवन को आफ्नो बाटो सञ्चालन गर्नुपर्छ,
पी:9 ती लागि जो प्रभुको व्यवस्था संग अनुसार आफ्नो जीवन गठन गर्ने निर्णय गरेको छ.
1:1 सबै बुद्धि प्रभु परमेश्वर हो, र सधैं उसलाई गरिएको छ, र सबै समय छ.
1:2 जो समुद्रको बालुवा संख्यात्मक छ, र वर्षा को घटेको, र संसारको दिन? जो स्वर्गमा उचाइ मापन गरेको छ, र पृथ्वीको चौडाई, र पातालमा को गहिराई?
1:3 जो परमेश्वरको बुद्धि जांच छ, जो सबै कुराहरू precedes?
1:4 बुद्धि सिर्जना गरिएको थियो सबै कुरा अघि, र प्रूडेंस को समझ सबै समय छ.
1:5 उच्च मा परमेश्वरको वचन बुद्धिको स्रोत छ, जसको कदम अनन्त आज्ञा हो.
1:6 प्रकट गरिएको जसलाई बुद्धि मूल छ गर्न, र उनको astuteness गर्ने मान्यता छ?
1:7 जसलाई बुद्धि अनुशासन छ प्रकट र प्रकट गरिएको? र उनको कदम को बाहुल्य गर्ने बुझे छ?
1:8 सबैभन्दा उच्च सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ सृष्टिकर्ता एक छ, र त्यो शक्तिशाली राजा हुनुहुन्छ, र उहाँले अति मानिसहरू डराउँदैनन् गर्न छ, आफ्नो सिंहासन मा बसिरहेका, र उहाँले सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ.
1:9 उहाँले पवित्र आत्मा मार्फत बुद्धि सिर्जना, र उहाँले तिनलाई देखे, र उनको संख्यात्मक, र उनको मापन.
1:10 र उहाँले सबै आफ्नो काम भन्दा उनको पोखे, र सबै प्राणी भन्दा, आफ्नो पक्षमा को हदसम्म, र उहाँले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई उनको प्रस्ताव गरेको छ.
1:11 प्रभुको डर महिमा छ, र आदर, र आनन्द, र exultation मुकुट.
1:12 प्रभुको डर हृदय प्रसन्न हुनेछ, र दिन को आनन्द र gladness र लम्बाइ दिनेछु.
1:13 यो राम्रो हुनेछ, धेरै अन्त मा, कसले प्रभु डर, र उहाँले टाढा बित्दै कि दिन, उहाँले दिनुभयो गरिनेछ.
1:14 परमेश्वरको प्रेम आदरणीय बुद्धि छ.
1:15 र जसलाई त्यो आफ्नो विचार को लागि देखिने ती किनभने तिनीहरूले देख्न के को उनको प्रेम र उनको ठूलो काम थाहा.
1:16 प्रभुको डर बुद्धि को शुरुवात छ, र गर्भमा विश्वासी सिर्जना भएको थियो, र चुन्नु महिलाहरु संग हिँड्छ, र बस र विश्वासी ज्ञात छ.
1:17 प्रभुको डर ज्ञान को शुद्धि छ.
1:18 शुद्धि रक्षा र हृदय सफाइ हुनेछ, र आनन्द र आनन्द मान दिनु हुनेछ.
1:19 यो प्रभु डर जो उसलाई राम्रो हुनेछ, र आफ्नो दिन को Consummation मा, उहाँले दिनुभयो गरिनेछ.
1:20 डर परमेश्वरको बुद्धिको पूर्णतामा छ, र यो आफ्नो फल देखि एक पूर्णतामा छ.
1:21 त्यो उनको सन्तान देखि उनको सम्पूर्ण घर भर्न हुनेछ, र उनको सम्पत्तिहरू देखि storehouses.
1:22 प्रभुको डर बुद्धि मुकुट छ, शान्ति पूरा, र मुक्तिको फल.
1:23 र प्रभुको डर देखेको र बुद्धि संख्यात्मक छ; तर दुवै परमेश्वरको उपहार हो.
1:24 बुद्धि ज्ञान र प्रूडेंस समझ वितरण हुनेछ; र त्यो ती महिमा उनको पकड गर्ने अप लिफ्टहरु.
1:25 बुद्धि को मूल प्रभु डर छ, र यसका हाँगाहरू लामो-बस्ने हो.
1:26 बुद्धिको सम्पत्तिहरू मा समझ र ज्ञान को शुद्धि छ. पापी तर, बुद्धि एक abomination छ.
1:27 प्रभुको डर पाप expels.
1:28 डर बिना छ जसले सक्षम छैन लागि जायज गर्न. आफ्नो आत्माको स्वभाव लागि आफ्नो अनडू गर्दै छ.
1:29 रोगी भएकाहरूलाई छोटो समयको लागि भोग्नेछन्, र त्यस पछि, आनन्द फिर्ता हुनेछ.
1:30 एक महान मन छोटो समयको लागि आफ्नो शब्द लुकाउन हुनेछ, त्यसपछि धेरै को ओठ उहाँको समझ घोषणा हुनेछ.
1:31 बुद्धिको सम्पत्तिहरू बीच अनुशासन को बाहिरी साइन छ.
1:32 तर ती जो पाप, परमेश्वरको उपासना एक abomination छ.
1:33 छोरा, तपाईं बुद्धि चाहन्छन् भने, न्याय पालन, त्यसपछि परमेश्वरले उनको तपाईं अर्पण गर्नेछ.
1:34 प्रभुको डर लागि बुद्धि र अनुशासन छ.
1:35 र के उहाँलाई प्रसन्न विश्वास र नम्रता छ. र त त्यो आफ्नो सम्पत्तिहरू पूरा गर्नेछु.
1:36 तपाईं प्रभुको डर गर्न बदगुमान हुँदैन. र तपाईं एक duplicitous हृदयले उसलाई नजिक हुँदैन.
1:37 तपाईं मानिसहरूको दृष्टि मा कपटी हुनु हुँदैन. र तपाईं आफ्नो ओठ संग scandalize हुँदैन.
1:38 यी कुराहरू उपस्थित, अन्यथा तपाईं पर्न सक्छ र आफ्नो प्राण गर्न अनादर ल्याउन.
1:39 त्यसपछि परमेश्वरले तपाईंको रहस्य लेगी सक्छ, र उहाँले तपाईं तल मण्डलीको माझमा forcefully डाली सक्छ.
1:40 तपाईं wickedly प्रभु नजिक लागि, र आफ्नो हृदय छल र falseness भरिएको थियो.
2:1 छोरा, तपाईं परमेश्वरको सेवा गर्न आफैलाई लागू गर्दा, न्याय र डर खडा, र प्रलोभनको लागि आफ्नो प्राण तयार.
2:2 नम्र आफ्नो हृदय, र गरिरहन. आफ्नो कान भ्कुकावट, र स्वीकार समझ को शब्द. र तपाईं दुःखको समयमा हतार हुँदैन टाढा.
2:3 परमेश्वरको लागि steadfastly सहन. परमेश्वरको आफैलाई सामेल, र गरिरहन, आफ्नो जीवन धेरै अन्त मा बढाउन सक्छ भनेर.
2:4 तपाईं भयो भनेर सबै स्वीकार, र आफ्नो शोक लागिरहने, र आफ्नो अपमान मा धैर्य छ.
2:5 सुन र चाँदीको लागि आगो मा परीक्षण गर्दै, अझै साँच्चै, स्वीकार्य मानिसहरू अपमान को आगोको भट्टी मा परीक्षण गर्दै.
2:6 परमेश्वरको विश्वास, र उहाँले स्वास्थ्य तपाईं बहाल गर्नेछ. र आफ्नो बाटो सीधा, र उहाँमा आशा. डर पालन, र यो पुराना बढ्न.
2:7 तपाईंले प्रभु गर्ने डर, उहाँको दया लागि प्रतीक्षा. र उसलाई त्यागेर छैन, लड्नुभयो नत्र.
2:8 तपाईंले प्रभु गर्ने डर, उहाँलाई विश्वास. र आफ्नो इनाम टाढा छैन लगिनेछ.
2:9 तपाईंले प्रभु गर्ने डर, उहाँमा आशा. र कृपा तपाईं भेट्नुपर्छ हुनेछ, तपाईंको आनन्द गर्न.
2:10 तपाईंले प्रभु गर्ने डर, उहाँलाई प्रेम. र आफ्नो हृदय उज्यालो हुनेछ.
2:11 मेरो छोरा, मानिसहरूको राष्ट्रका विचार, र तिनीहरूलाई मध्ये एक प्रभु आशा राखेको र हैरान भएको थियो भनेर थाहा.
2:12 कसले आफ्नो आज्ञा अझै बाँकी छ र त्यागेर गरिएको? वा उहाँमाथि गर्ने भनिन्छ छ, र अझै उहाँलाई अवहेलना?
2:13 परमेश्वरको लागि इमान्दार र दयालु छ, र उहाँले कष्ट दिन मा पाप क्षमा हुनेछ. र उहाँले सत्य मा उहाँको खोजी गर्ने सबैलाई संरक्षक हुनुहुन्छ.
2:14 को duplicitous हृदय धिक्कार, र दुष्ट ओठ गर्न, र दुष्ट भनेर हातमा गर्न, र दुई तरिकामा द्वारा पृथ्वी हिँड्छ गर्ने पापी गर्न!
2:15 हृदय मा dissolute धिक्कार, परमेश्वरको विश्वास नगर्ने! लागि, फलस्वरूप, तिनीहरूले उहाँलाई द्वारा सुरक्षित गरिनेछ.
2:16 धीरज गुमाएका गर्नेहरूलाई धिक्कार, र ठीक तरिकामा गर्ने त्यागेर छ, र जो पतित तरिकामा फर्काए छ!
2:17 र के तिनीहरूले गर्नेछन् प्रभु तिनीहरूलाई जाँच्न सुरु गर्दा?
2:18 डर जो प्रभु उहाँको वचन तिर छैन बेग्लै धर्म मान्ने गरिनेछ ती. र उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई आफ्नो बाटो राख्न हुनेछ.
2:19 प्रभु डर गर्नेहरूलाई उहाँलाई राम्ररी खुसी छन् कि कुरा खोज्न हुनेछ. र उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई आफ्नो व्यवस्था भरिएको हुनेछ.
2:20 प्रभु डर गर्नेहरूलाई तिनीहरूको हृदय तयार हुनेछ, र तिनीहरूले आफ्नो दृष्टि मा आफ्नो प्राण पवित्र हुनेछ.
2:21 प्रभु डर गर्नेहरूले उहाँको आज्ञा पालन, र तिनीहरूले पनि आफ्नो परीक्षा सम्म धैर्य हुनेछ,
2:22 यसो: "यदि हामी Penance के छैन, त्यसपछि हामी प्रभुको हातमा पतन हुनेछ, र मानिसहरूको हातमा छैन। "
2:23 आफ्नो महानता अनुसार लागि, त्यसैले पनि उहाँलाई आफ्नो कृपा छ.
3:1 बुद्धिको छोराहरूले बस को चर्च हो: र आफ्नो पुस्ता आज्ञाकारी र प्रेम छ.
3:2 छोराहरू, आफ्नो बुबाको न्याय सुन्न, र तदनुसार कार्य, तपाईं सुरक्षित हुन सक्छ भनेर.
3:3 परमेश्वरको लागि छोराहरू मा पिता सम्मान गरेको छ, र, जब आमा को न्याय खोजिरहेका, उहाँले छोराछोरीको यसलाई पुष्टि गरेको.
3:4 उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ परमेश्वरको पाप तर्फबाट उहाँलाई निवेदन हुनेछ, र आफूलाई पाप टाढा राख्न हुनेछ, र आफ्नो दिन को प्रार्थनामा पालन गरिनेछ.
3:5 र, माथि धन भण्डारण गर्दछ जसले जस्तो, त्यसैले पनि आफ्नो आमा आदर गर्ने छ.
3:6 आफ्ना पिता आदर गर्ने आफ्नै छोराछोरीको आनन्द पाउनुहुनेछ, र उहाँले आफ्नो प्रार्थनाको दिनमा पालन गरिनेछ.
3:7 आफ्ना पिता आदर गर्ने उहाँले लामो जीवन बिताउन हुनेछ. र आफ्नो पिता obeys जसले आफ्नो आमा एक स्फूर्ति हुनेछ.
3:8 प्रभु डर जसले आफ्नो आमाबाबु सम्मान, र उहाँले तिनीहरूलाई मालिकको रूपमा सेवा गर्नेछन्, तिनीहरूले यो छ लागि जो उसलाई गर्भवती.
3:9 शब्द र काम मा, र सबै कुरामा, धैर्य आफ्नो बुबा आदर,
3:10 आशिष् उहाँलाई तपाईंले आउन सक्छ भनेर, र यति उहाँको आशिष् धेरै अन्त गर्न बाँकी सक्छ.
3:11 पिताको आशिष् छोराहरू घरहरू बलियो; तर आमा को श्राप पनि यसको जग uproots.
3:12 आफ्नो बुबाको निरादर मा घमण्ड छैन; आफ्नो लाज लागि आफ्नो महिमा छैन.
3:13 मानिसको महिमा लागि आफ्नो बुबाको आदर हो, र सम्मान बिना बुबा छोरा एक बदनाम छ.
3:14 छोरा, आफ्नो बुढेसकालमा आफ्नो बुबा समर्थन, र आफ्नो जीवन उहाँलाई सन्ताप छैन.
3:15 र यदि आफ्नो मन असफल गर्नुपर्छ, दया देखाउन; तपाईं आफ्नो बल मा हुँदा र उहाँलाई spurn छैन. पिता गर्न almsgiving लागि कहिल्यै भूल हुनेछ.
3:16 आमा पापको लागि पनि फिर्ती लागि, राम्रो तपाईं उपकारको साटो तिरे हुनेछ.
3:17 र तपाईं न्याय मा निर्मित गरिनेछ, र तपाईं कष्ट दिनमा सम्झना गरिनेछ. र आफ्नो पाप न्यानो मौसम मा बरफ जस्तै भंग हुनेछ.
3:18 दुष्ट फारम उहाँले के छ जो आफ्नो बुबा त्याग्नुहुन्न! र परमेश्वरले जसले आफ्नो आमा exasperates श्रापित छ.
3:19 छोरा, नम्रता आफ्नो काम, र तिमी मानिसहरू महिमा परे प्रेम गरिनेछ.
3:20 तर ठूलो तपाईं हुन सक्छ, सबै कुरामा आफूलाई नम्र, र तपाईं परमेश्वरको उपस्थितिमा अनुग्रह पाउनुहुनेछ.
3:21 परमेश्वरको मात्र शक्ति लागि ठूलो छ, र उहाँले नम्र द्वारा सम्मान गरिएको छ.
3:22 के तपाईं लागि पनि उच्च छन् भन्ने कुरा खोज्न हुँदैन, र तपाईं आफ्नो क्षमता परे छन् कि कुरा जाँच्न हुँदैन. तर परमेश्वरले तिमीहरूलाई सुम्पनुभएको छ भनेर कुराहरू लागि रूपमा, सधैं यी विचार. तर तपाईं आफ्नो काम धेरै मा उत्सुक हुनु हुँदैन.
3:23 यो आवश्यक छैन लागि लुकेका छन् भन्ने कुरा आफ्नो आफ्नै आँखाले हेर्न को लागि.
3:24 अनावश्यक विषयमा, विभिन्न कुराहरू एक परीक्षक हुन चयन छैन, र तपाईं आफ्नो काम धेरै बारे उत्सुक हुनु हुँदैन.
3:25 धेरै कुराहरू लागि प्रकट गरिएको छ, मानिसहरूको बुझाइ परे.
3:26 अहिलेसम्म यी कुरामा अनिश्चितता पनि धेरै व्यक्ति फितलो बनाइदिएको छ र व्यर्थ आफ्नो मन detained छ.
3:27 एक कठोर हृदय धेरै अन्त मा दुष्ट हुनेछ, र उहाँले गर्ने प्रेम peril यसलाई मा नष्ट हुनेछ.
3:28 दुई दिशामा अग्रिम मनले सफलता छैन, र पतित हृदय यसरी scandalized गरिनेछ.
3:29 दुष्ट हृदय दुःखको साथ बोझ हुनेछ, र पापी थप पाप थप्नेछ.
3:30 को घमण्डी को सभाघरमा छैन निको हुनेछ. लागि पापले को बाला तिनीहरूलाई मा मूल हुनेछ, र यो बुझे गरिनेछ.
3:31 बुद्धिमानको को हृदय बुद्धि बुझेका छ, र एक राम्रो कान आफ्नो सबै इच्छा संग बुद्धि सुन्न हुनेछ.
3:32 बुद्धिमान् र समझ हृदय पाप छुँदै हुनेछ, र न्यायको काम मा सफलता हुनेछ.
3:33 पानी एक बलिरहेको आगो extinguishes, र almsgiving पाप withstands.
3:34 र परमेश्वरले दया repays जो लागि पहरादारले. उहाँले त्यस पछि उसलाई सम्झना, र पतन को समय मा, उहाँले एक दृढ समर्थन पाउनुहुनेछ.
4:1 छोरा, तपाईं alms को गरिब बाहिर धोखा हुँदैन, न त एक गरिब मानिस आफ्नो आँखा हटाउनु पर्छ.
4:2 तपाईं भोक प्राण नाइँनास्ति हुँदैन, र तपाईं आफ्नो आवश्यकता मा एक गरिब मानिस बढन हुँदैन.
4:3 तपाईं खाँचोमा परेका को हृदय दुर्व्यवहार र अन्याय सहनु हुँदैन, र तपाईं वेदनामा कसैले गर्न एउटा प्रस्ताव ढिलाइ गर्नु हुँदैन.
4:4 तपाईं निकै परेशान छ जो एक को अनुरोध गर्नु हुँदैन, र तपाईं indigent आफ्नो अनुहार हटाउनु हुँदैन.
4:5 तपाईं रिस को खाँचोमा परेका बाहिर आफ्नो आँखा हटाउनु हुँदैन. र तपाईं मदत खोज्नेहरूलाई त्याग्न हुँदैन, तिनीहरूले आफ्नो फिर्ता पछि curses बोल्न भनेर.
4:6 उहाँलाई को pleadings लागि जसले तपाईंलाई को curses बोल्छ, आफ्नो प्राण को तीता मा, पालन ​​गरिनेछ. उहाँलाई उहाँलाई पालन गर्नेछ गरे जो एक लागि.
4:7 गरिब मण्डलीलाई आफैलाई एक मित्र बनाउन, र प्राचीन अघि आफ्नो प्राण नम्र, र ठूलो अघि आफ्नो टाउको नम्र.
4:8 गरिब तिर दुःख बिना आफ्नो कान बन्द, र आफ्नो ऋण चुक्ता, र नम्रता मा शान्तिमा उहाँलाई प्रतिक्रिया.
4:9 को घमण्डी को हात मा चोट पीडित जो उसलाई मुक्त, र आफ्नो प्राण मा घृणा छैन बोक्न गर्छन्.
4:10 न्याय मा, यस अनाथ गर्न दयालु हुन, बुबा जस्तै, र आफ्नो आमा दयालु हुन, पतिले जस्तै.
4:11 र त तपाईं सबैभन्दा उच्च एक आज्ञाकारी छोरा जस्तै हुनेछ, र उसले धेरै आमा भन्दा तपाईंले दया हुनेछ हुनेछ.
4:12 बुद्धि उनको छोरा मा जीवन breathes, र त्यो उनको खोजिरहेका छन् गर्नेहरूलाई अप लिफ्टहरु, र त्यो न्यायको बाटो तिनीहरूलाई लिनुअघि हुनेछ.
4:13 र उनको प्रेम जसले जीवन प्रेम. र उनको लागि हेर्न गर्नेहरूलाई उनको Delights अँगालेको पर्छ.
4:14 उनको पकड गर्नेहरूलाई जीवन पाउनेछन्. र जो ठाँउ त्यो प्रवेश, भगवान दिनुहुनेछ.
4:15 पवित्र छ के उनको सेवा गर्नेहरूलाई उपज हुनेछ. र बुद्धि प्रेम गर्नेहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ.
4:16 उनको सुन्नुहुन्छ जसले राष्ट्रहरूले न्याय. र उनको मा gazes जसले सुरक्षित रहनेछ.
4:17 उहाँले उनको विश्वास भने, उहाँले उनको अधिकार पाउनेछन्, र उसलाई पुष्टि हुनेछ देखि जो खडा.
4:18 त्यो लागि प्रलोभन मार्फत उसलाई हिँड्छ, र त्यो सुरुदेखि उसलाई छनोट.
4:19 त्यो डर नेतृत्व र भय र उसलाई परीक्षा हुनेछ, र त्यो उनको सिद्धान्त को कष्ट उहाँलाई क्रुसमा टाँग्नुहोस् हुनेछ, त्यो आफ्नो विचार उहाँलाई परीक्षण र नभएसम्म त्यो आफ्नो प्राण भरोसा गर्न सक्छौं.
4:20 त्यसपछि तिनले उहाँलाई बलियो हुनेछ, र एक सीधा मार्गमा साथ उहाँलाई नेतृत्व, र उहाँलाई आनन्दित.
4:21 र त्यो उहाँलाई उनको रहस्य खुलासा हुनेछ, र त्यो धन माथि भण्डारण, ज्ञान र न्यायको समझ को, उहाँमा.
4:22 तर उहाँले हराउनु अलमलिएको छ भने, तिनले उसलाई पछि छोड्न हुनेछ, र त्यो आफ्नो शत्रु को हातमा उहाँलाई बचाउनुहुनेछ.
4:23 छोरा, निरन्तर सावधान हुन, र दुष्ट टाढा राख्न.
4:24 आफ्नो प्राण को खातिर, तपाईं सत्य बोल्न लाज हुँदैन.
4:25 पाप दिन्छ लाजमर्दो छ, र महिमा र अनुग्रह दिन्छ लाजमर्दो छ.
4:26 तपाईं आफ्नो अनुहार एउटा अनुहार विपरीत स्वीकार गर्नुपर्छ, न त तपाईं आफ्नो प्राण गर्न झूट विपरीत स्वीकार गर्नुपर्छ.
4:27 तपाईं आफ्नो छिमेकीलाई को गिरावट आनन्द हुँदैन.
4:28 न त तपाईं मुक्तिको लागि मौका मा शब्द चढाउनसमेत गर्नुपर्छ. तपाईं उनको सौन्दर्य आफ्नो बुद्धि ढाकछोप हुँदैन.
4:29 बुद्धिको लागि बोली भित्र बुझ्नुभयो छ. र समझ र ज्ञान र सिद्धान्त जो बुझ्न ती शब्दहरू र न्याय को काम मा आफ्नो steadfastness द्वारा बुझ्नुभयो छन्.
4:30 तपाईं कुनै पनि तरिकामा सत्यको शब्द काट्न हुँदैन. अन्यथा, अज्ञानता को जन्म एक falsehood द्वारा, तपाईं अलमल्ल गरिनेछ.
4:31 तपाईं आफ्नो पाप स्वीकार गर्न लाज हुँदैन, तर किनभने पापको कुनै पनि मानिस आफूलाई अधीनमा छैन.
4:32 शक्तिशाली को अनुहार विरुद्ध खडा गर्न छनौट छैन, लागि नदी को हालको विरुद्ध प्रयास गर्नु हुँदैन.
4:33 न्याय लागि ग्रस्त, आफ्नो प्राण तर्फबाट, र संघर्ष, पनि मृत्यु निम्ति, न्याय तर्फबाट, र परमेश्वरले तपाईंको शत्रुहरू विरुद्ध आफ्नो तर्फबाट लड्न हुनेछ.
4:34 तपाईंको शब्द संग द्रुत हुन चयन छैन, अनुपजाऊ वा आफ्नो काम मा neglectful न त.
4:35 आफ्नो घरमा सिंह जस्तै हुन चयन छैन, आफ्नो घर को ती कठिनाइ, र तपाईं विषय भएकाहरूलाई oppressing.
4:36 छैन प्राप्त गर्दा आफ्नो हात खुला हुन गरौं गर्छन्, तर दिंदा बन्द.
5:1 iniquitous सरसम्पत्ति खोज्न चयन छैन, र तपाईं भन्न हुँदैन: "म सबै म जीवनमा आवश्यक छ।" लागि यो प्रतिकार र अन्धकारको समयमा तपाईं कुनै लाभ हुनेछ.
5:2 तपाईं पछि लाग्न हुँदैन, आफ्नो बल मा, आफ्नो हृदयको इच्छा.
5:3 र तपाईं भन्न हुँदैन: "कसरी शक्तिशाली छु म?"वा, "कसले मेरो कामहरू को तल मलाई डाली हुनेछ?"परमेश्वरको लागि बदला संग उचित वा न्यायर्सगत सिद्घ गर्नु हुनेछ.
5:4 तपाईं भन्न हुँदैन, "मैले पाप, र के शोक मलाई befallen छ?"सबैभन्दा उच्च लागि एक विरामी recompensor छ.
5:5 एक क्षमा पाप विषयमा डर बिना हुन इच्छुक छैन, र तपाईं पाप मा पाप थप्न हुँदैन.
5:6 र तपाईं भन्न हुँदैन: "प्रभुको दया ठूलो छ; उहाँले मेरो पाप को भीड मा दया हुनेछ। "
5:7 कृपा र क्रोध दुवै लागि निस्कने उहाँलाई चाँडै जाने, र आफ्नो क्रोध पापी मा यसको Gaze सेट.
5:8 तपाईं प्रभु रूपान्तरित भइरहेको ढिलाइ गर्नु हुँदैन, र तपाईं दिनको दिन देखि अलग सेट हुँदैन.
5:9 आफ्नो क्रोध अचानक भेट्नुपर्छ गर्नेछ, र vindication समयमा, उहाँले तपाईंलाई नाश.
5:10 अन्यायपूर्ण धन लागि चिन्तित हुन चयन छैन. यी कुराहरू लागि अन्धकार र प्रतिकार दिनमा तपाईं लाभ उठाउन छैन.
5:11 तपाईं हरेक हावामा winnow हुँदैन, र तपाईं हरेक बाटो मा अगाडी जाने हुँदैन. त्यसैले आफ्नो duplicitous जिब्रो द्वारा सिद्ध हरेक पापी छ.
5:12 प्रभुको बाटो र आफ्नो समझ र ज्ञान को सत्य मा स्थिर हुन, र शान्ति र न्याय को शब्द तपाईं लाग्नेछन् गरौं.
5:13 शब्द सुनेर गर्दा नम्र हुन, तपाईं बुझ्न सक्छ भनेर. र बुद्धि मा एक साँचो प्रतिक्रिया प्रस्ताव.
5:14 तपाईं बुझ्न भने, त्यसपछि आफ्नो छिमेकीलाई जवाफ. तर तपाईं छैन भने, त्यसपछि आफ्नो हात मुख भन्दा गरौं, ताकि तपाईं एक inept शब्द समातिएको छैन, र त्यसपछि हैरान.
5:15 सम्मान र महिमा गर्ने बुझ्न ती शब्दहरू छन्, अझै साँच्चै, को imprudent मानिसको जिब्रो आफ्नो अनडू गर्दै छ.
5:16 तपाईं एक Whisperer छैन भनिन्छ गर्नुपर्छ, र तपाईं आफ्नो जिब्रो द्वारा पक्रेको हुनुपर्छ, र त्यसपछि हैरान.
5:17 भ्रम र पछुतो लागि चोर मा छ, र एक दुष्ट चिन्ह डबल-tongued मा छ; तर Whisperer लागि, त्यहाँ घृणा र घृणा र निरादर छ.
5:18 सानो र त्यस्तै ठूलो सफाइ.
6:1 आफ्नो छिमेकीलाई एक मित्र को सट्टा शत्रु बन्न इच्छुक छैन. लागि दुष्ट मानिस निन्दाले र निरादर अधिकार पाउनेछन्, ईर्ष्या र डबल tongued छ कसले हरेक पापीको रूपमा.
6:2 तपाईं आफैलाई महिमा हुँदैन, एक साँढेको जस्तै, आफ्नो प्राण को विचार मा, सायद नत्र आफ्नो बल मूर्खता मार्फत तल फ्याँकिएको हुन सक्छ,
6:3 जो आफ्नो पात उपभोग थियो, र आफ्नो फल नष्ट, र तपाईं मरुभूमिमा सुक्खा रूख जस्तै पछि छोड्न.
6:4 एक दुष्ट प्राणी एक नष्ट गर्नेछ जसले यो छ. यसलाई खुसीसाथ उहाँलाई शत्रुहरू प्रदान, र यो impious को भाग्य उसलाई नेतृत्व गर्नेछन्.
6:5 एक मिठाई शब्द साथीहरू र mitigates शत्रुहरू वृद्धि गर्छ. र आभारी शब्दहरू राम्रो मानिस मा प्रशस्त.
6:6 तपाईं शान्ति हुन अनुमति दिनुहोस् धेरै, तर एक हजार एक बाहिर आफ्नो सल्लाहकार गर्न अनुमति.
6:7 तपाईं एक मित्र प्राप्त हुनेछ भने, तपाईं उसलाई स्वीकार अघि उहाँलाई परीक्षण, र सजिलै उसलाई विश्वास छैन.
6:8 त्यहाँ आफ्नै समय अनुसार एक मित्र छ, तर उहाँले कष्ट दिन मा रहने छैन.
6:9 र त्यहाँ घृणा गर्न बन्द गर्न सकिन्छ जो एक मित्र छ. र त्यहाँ घृणा र गिल्ला र अपमान प्रकट गर्ने एक मित्र छ.
6:10 र तालिका मा एक साथी छ जो एक मित्र छ, तर उहाँले आवश्यकता को एक दिन मा रहने छैन.
6:11 एउटा साथी, उहाँले स्थिर रहन्छ भने, तपाईं आफैलाई छन् रूपमा हुनेछ, र उहाँले आफ्नो घर को गर्नेहरूमध्ये विश्वसनीयता संग कार्य गर्नेछ.
6:12 उहाँले तपाईंलाई अघि आफूलाई humbles र आफ्नो अनुहार देखि आफूलाई लुकाउँछ भने, तपाईं एक महान र सुरिलो मित्रता हुनेछ.
6:13 आफ्ना शत्रुहरूलाई आफूलाई दूरी, र तपाईंको साथी ध्यान.
6:14 विश्वासी मित्र बलियो आश्रय छ, र जसले फेला छ एक खजाना फेला छ.
6:15 केही विश्वासी मित्र तुलना छ, र चाँदी वा सुन को कुनै वजन आफ्नो निष्ठा को भलाइ भन्दा लायक थप छ.
6:16 विश्वासी मित्र जीवन र अमरता लागि चिकित्सा छ; र प्रभु डर गर्नेहरूलाई एक पाउनुहुनेछ.
6:17 उहाँले परमेश्वर समान राम्रो मित्रता हुनेछ डर जो, किनभने आफ्नो मित्र उहाँलाई जस्तै हुनेछ.
6:18 छोरा, आफ्नो युवा देखि निर्देशन प्राप्त, र त तपाईं बुद्धि पाउनुहुनेछ, तपाईँको खैरो hairs गर्न.
6:19 plows गर्ने एक र sows जस्तै दृष्टिकोण बुद्धि, त्यसपछि उनको राम्रो फल लागि प्रतीक्षा.
6:20 लागि उनको काम, तपाईं श्रम अलि हुनेछ, तर चाँडै नै उनको उत्पादन देखि खान हुनेछ.
6:21 unlearned मानिसहरूलाई बुद्धि कसरी अति कठोर छ! अनि त, को witless उनको साथ रहने छैन.
6:22 त्यो परीक्षण को एक महान पत्थर जस्तै तिनीहरूलाई हुनेछ, र तिनीहरूले उनको ढिलाइ बिना टाढा डाली हुनेछ.
6:23 सिद्धान्तलाई बुद्धिको लागि उनको नाम संग अनुसार छ, र त्यो छैन धेरै प्रकट छ. तर त्यो जसलाई त्यो पहिचान छ द्वारा ती संग जारी, पनि परमेश्वरको दृष्टि मा.
6:24 सुन्नुहोस्, छोरा, र समझ सल्लाह स्वीकार, लागि मेरो सल्लाह छोड्न हुँदैन.
6:25 उनको चेन उनको fetters मा आफ्नो खुट्टा र आफ्नो घाँटी सेट.
6:26 आफ्नो काँध भ्कुकावट, र उनको बोक्न, तपाईं लागि उनको बाइन्डिङ द्वारा दुःखित गरिनेछ.
6:27 आफ्नो सबै प्राण संग उनको दृष्टिकोण, र आफ्नो सबै शक्ति उनको तरिका सेवा.
6:28 उनको जाँच्न, र त्यो तपाईं प्रकट हुनेछ, र जब तपाईं उनको प्राप्त गरेका छन्, तपाईं उनको त्याग्न हुँदैन.
6:29 लागि, धेरै अन्त मा, तपाईंलाई आराम पाउनुहुनेछ उनको, र त्यो आफ्नो आनन्द परिणत हुनेछ.
6:30 त्यसपछि उनको fetters बलियो सुरक्षा र तपाईं को लागि एक दृढ जग हुनेछ, र उनको चेन महिमा को एक ओढ्ने हुनेछ.
6:31 उनको लागि जीवनको सौन्दर्य हो, र उनको बाइन्डिङ एक निको पट्टी हो.
6:32 तपाईं महिमा को एक ओढ्ने संग रूपमा उनको साथ ढाकिएको गरिनेछ, र तपाईं आनन्दित मुकुट जस्तै आफ्नो शिरमा उनको सेट गर्नेछ.
6:33 छोरा, तिमी मलाई पालन यदि, तपाईं सिक्न हुनेछ. र तपाईं आफ्नो मन अनुकूल यदि, बुद्धिमानी हुनेछ.
6:34 तपाईं आफ्नो कान भ्कुकावट भने, तपाईं सिद्धान्त प्राप्त हुनेछ. र यदि तपाईं सुन्न प्रेम, बुद्धिमानी हुनेछ.
6:35 चतुर एल्डरहरूको भीड बीचमा खडा, र हृदय देखि आफ्नो बुद्धि आफैलाई सामेल, तपाईं परमेश्वरको बारेमा हरेक भाषणले सुन्न सक्षम हुन सक्छ भनेर, र भनेर प्रशंसा को हितोपदेश तिमीहरूबाट भाग्नेछ सक्छ.
6:36 र तपाईं समझ को एक मानिस हेर्न भने, उहाँलाई लागि हेर्ने खडा, र आफ्नो खुट्टा आफ्नो ढोका को कदम तल लगाउने गरौं.
6:37 परमेश्वरको आदेशहरू मा आफ्नो विचार सेट, र सम्पूर्ण उहाँका आज्ञाहरूमा स्थिर हुन. र उहाँले तँलाई एउटा हृदय दिनेछु, र बुद्धि को इच्छा तपाईं दिइनेछ.
7:1 दुष्ट गर्न छनौट छैन, र दुष्ट तपाईं को पकड लिन छैन.
7:2 को iniquitous देखि निकासी, र दुष्ट तपाईंबाट फिर्ता हुनेछ.
7:3 छोरा, अन्याय को furrows मा दुष्ट छर्न छैन, र तपाईं तिनीहरूलाई sevenfold कटनी छैन.
7:4 प्रभु देखि नेतृत्वको भूमिका खोज्न छैन, र राजा देखि सम्मान को एक सीट खोजी छैन.
7:5 के तपाईं परमेश्वरको सामु आफूलाई सफाइ हुँदैन, लागि उहाँले हृदय Knower छ. र कुनै हालतमा तिमी राजाको अघि बुद्धिमानी देखिन्छ गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुपर्छ.
7:6 एक न्यायाधीश बन्न खोज्नु छैन, तपाईं iniquities चकनाचूर हुनु पर्याप्त बल जबसम्म. अन्यथा, तपाईं शक्तिशाली को अनुहार डर सक्छ, र यति एक घोटाले आफ्नो निष्ठा भित्र स्थापना.
7:7 तपाईंले शहर को भीड विरुद्ध पाप हुँदैन, न त मान्छे विरुद्ध आफैलाई डाली गर्नुपर्छ.
7:8 र तपाईं सँगै दुई पाप बाँध्न हुँदैन. मा पनि एक पापको लागि, तपाईं unpunished छैन जानेछ.
7:9 आफ्नो प्राण मा कायर हुन छैन.
7:10 तपाईं माग्छु गर्न अनिच्छुक हुनु हुँदैन, न त alms दिन.
7:11 तपाईं भन्न हुँदैन: "परमेश्वरले मेरो उपहार को भीड मा अनुमोदन संग हेर्नेछौं, र जब म सबैभन्दा उच्च परमेश्वरको एक भेटी बनाउन, उहाँले मेरो उपहार स्वीकार गर्नेछ। "
7:12 तपाईं प्राण को तीता मा एक मानिस खिसी हुँदैन. त्यहाँ एक छ लागि जो humbles र जो exalts: सबै-देखेर परमेश्वर.
7:13 आफ्नो भाइ विरुद्ध झूट प्रेम छैन, न त आफ्नो मित्र तिर नै कार्य गर्नुपर्छ.
7:14 कुनै पनि प्रकारको झूट चिंतन गर्न इच्छुक छैन. झूट को अभ्यास लागि राम्रो छैन.
7:15 प्राचीन एक भीड बीच वाचाल गर्न छनौट छैन, र तपाईं आफ्नो प्रार्थनाको शब्दहरू बारम्बार हुँदैन.
7:16 तपाईं laborious काम घृणा गर्नु हुँदैन, न त देहाती जीवन द्वारा सबैभन्दा उच्च सिर्जना.
7:17 तपाईं आफैलाई undisciplined को भीड बीच हुन विचार हुँदैन.
7:18 क्रोध सम्झना. लागि यो ढिलाइ गरिने.
7:19 नम्र आफ्नो आत्मा निकै. को impious को शरीर विरुद्ध प्रतिकार लागि आगो र कीडे छ.
7:20 पैसा को खातिर आफ्नो मित्र धोका छैन, र तपाईं सुन खातिर आफ्नो Dearest भाइ spurn हुँदैन.
7:21 राम्रो र समझ पत्नी देखि प्रस्थान गर्न छनौट छैन, तपाईं प्रभुको डरले छुट्याइयो गरिएको छ जसलाई. उनको नम्रता अनुग्रह लागि सुन माथि छ.
7:22 तपाईं सेवक जसको काम इमानदार छन् हानि हुँदैन, न त आफ्नो जीवन entrusts गर्ने ज्यालादारी कामदारको.
7:23 द्वारा तपाईं आफ्नो प्राण मन समझ सेवक प्रेम होस्. तपाईं स्वतन्त्रता बाहिर उहाँलाई धोखा हुँदैन, न त destitution उसलाई त्याग्न.
7:24 गाई तपाइँको छन्? तिनीहरूलाई गर्छन. र तिनीहरूले उपयोगी छन् भने, तिनीहरूलाई तपाईं संग रहने गरौं.
7:25 छोराहरू तपाइँको छन्? तिनीहरूलाई निर्देशन, र आफ्नो बाल्यकाल देखि तिनीहरूलाई दण्डवत्.
7:26 छोरी तपाइँको छन्? आफ्नो शरीर माथि हेर्न. र तपाईं तिनीहरूलाई तिर उज्यालो-hearted मनोवृत्ति प्रदर्शन गर्नुपर्छ.
7:27 विवाहमा आफ्नो छोरी दिन, र समझ मानिस उनको दिन, र तपाईं एउटा ठूलो काम गरिरहेको हुनेछ.
7:28 आफ्नो प्राण संग अनुसार एक पत्नी तपाईंको हो भने, तपाईं उनको अस्वीकार गर्नु हुँदैन. तर उनको आफैलाई सुम्पिन्छु छैन जो घृणित छ.
7:29 आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो बुबा आदर. र तपाईं आफ्नो आमा को उजुरी बिर्सनु हुँदैन.
7:30 तपाईं तिनीहरूलाई मार्फत बाहेक जन्म गरिएका भनेर सम्झना. अनि त, तिनीहरूले पनि लागि गरेका तिनीहरूलाई फिर्ता दिन.
7:31 आफ्नो सबै प्राण संग, प्रभु डर, र पवित्र हुन आफ्नो पूजाहारीहरू विचार.
7:32 आफ्नो सबै शक्ति, तपाईं गरे जो उहाँलाई प्रेम, र तपाईं आफ्नो सेवक त्याग्न हुँदैन.
7:33 आफ्नो सारा प्राण देखि परमेश्वरको आदर, पुजारीहरूलाई मा सम्मान दिनु, र आफ्नो शक्ति आफैलाई शुद्ध जारी.
7:34 तिनीहरूको भाग दिन, यो तपाईं को आज्ञा गरिएको छ जस्तै, पहिलो-फल ले र purifications देखि. र आफ्नो नजान्ने अपराध लागि, सानो भेटी आफूलाई शुद्ध.
7:35 तपाईं प्रभु आफ्नो बल को उपहार प्रदान गर्नुपर्छ, र पवित्रीकरण को बलिदान, र पवित्र छ के को पहिलो-फल.
7:36 र गरिब आफ्नो हात पुग्न, त्यसैले आफ्नो प्रायश्चित्त र तपाईंको आशीर्वाद सिद्ध हुन सक्छ.
7:37 एक उपहार सबै जीवित को दृष्टि मा अनुग्रह छ, तर तपाईं मृत लागि अनुग्रह निषेध गर्नु हुँदैन.
7:38 तपाईंले ती जो रोइरहेका छन् कन्सोलमा असफल हुँदैन, न त ती हिंड्न जो दुःखमा छन्.
7:39 छैन आफैलाई बिरामी भ्रमण गर्न ढिलो होस् गर्छन्. यसरी लागि, तपाईं प्रेममा पुष्टि हुनेछ.
7:40 आफ्नो सबै काम मा, आफ्नो धेरै अन्त सम्झना, र त तपाईं पाप छैन, सदाको निम्ति.
8:1 तपाईं एक शक्तिशाली मानिस संग भ्कगडा हुँदैन, सायद नत्र तपाईं आफ्नो हातमा पर्न सक्छ.
8:2 तपाईं एक धनी मानिस संग contend हुँदैन, सायद नत्र उहाँले तपाईं विरुद्ध कार्य ल्याउन सक्छ.
8:3 सुन र चाँदीको लागि धेरै नष्ट गरेको छ, र राजाहरूको पनि हृदय पुग्यो र भ्रष्ट छन्.
8:4 तपाईं शब्दहरू भरिएको छ मानिस संग भ्कगडा हुँदैन, लागि आफ्नो आगो मा काठ डाली हुँदैन.
8:5 तपाईं एक नजान्ने मानिस मा पोख्न हुँदैन, उहाँले आफ्नो परिवारको बारेमा दुष्ट कुरा नत्र.
8:6 आफूलाई टाढा पापबाट उत्तेजित गर्दछ जसले तपाईंलाई एक मानिस नाइँनास्ति हुँदैन, न त यो उहाँको निन्दा गर्नेछन्. हामी सुधार गर्न सबै विषय हो कि सम्झना.
8:7 तपाईं आफ्नो बुढेसकालमा मानिसको spurn हुँदैन. हामी पुरानो बढ्दै सबै विषयको लागि.
8:8 आफ्नो शत्रु को मृत्यु रमाहट गर्न इच्छुक हुन छैन, हामी सबै मर्न भनेर थाह पाउँदा, र हामी अरूलाई हामीलाई आनन्दित चाहँदैनन्.
8:9 पुराना र बुद्धिमानी भएकाहरूलाई को भाषणले नाइँनास्ति हुँदैन; सट्टा, आफ्नो उपदेश चिन्तन.
8:10 तिनीहरूबाट लागि, तपाईं बुद्धि र बौद्धिक सिद्धान्त सिक्न हुनेछ, दोष बिना ठूलो मानिसहरू सेवा गर्न ताकि.
8:11 तपाईंको एल्डरहरूको भाषणले द्वारा पारित गर्न अनुमति छैन. तिनीहरूले आफ्नो पिता सिकेको.
8:12 र तिनीहरूलाई देखि, तपाईं समझ सिक्न हुनेछ, र तपाईं आवश्यकता को समय मा के प्रतिक्रिया दिन सिक्न हुनेछ.
8:13 तपाईं तिनीहरूलाई संग बहस गरेर पापी coals kindle हुँदैन. को ज्वाला तपाईंलाई झुलसे हुन सक्छ लागि आफ्नो पापको आगो देखि.
8:14 तपाईं एक contemptuous व्यक्तिको अनुहार विरुद्ध खडा हुँदैन, तपाईंको शब्द विरुद्ध लुकेर आक्रमण मा प्रतीक्षा भने अन्यथा त्यो तल बस्न सक्छ.
8:15 तपाईं बलियो हुन्छ मानिस को उधारो हुँदैन. तर यदि तपाईं उधारो गर्छन्, यो गुमाए विचार.
8:16 तपाईं आफ्नो क्षमता परे प्रतिज्ञा हुँदैन. तर यदि तपाईं प्रतिज्ञा गर्छन्, यसलाई कसरी पूरा गर्न विचार.
8:17 तपाईं एक न्यायाधीश विरुद्ध न्याय हुँदैन. लागि उहाँले के बस अनुसार न्यायाधीशहरूले.
8:18 तपाईं एक audacious मानिस संग बाटोमा निस्कनेछ हुँदैन, नत्र सायद उहाँले तपाईं आफ्नो दुष्कर्मलाई संग बोझ सक्छन्. लागि उसले आफ्नो इच्छा अनुसार अगाडी जान्छ, र तपाईं आफ्नो मूर्खता उहाँसँग नष्ट हुनेछ.
8:19 तपाईं एउटा क्रोधित मानिस संग एक संघर्ष सुरु गर्नुपर्छ, र तपाईं एउटा audacious मानिस संग मरुभूमि मा जानु पर्छ. रगत बगाउने लागि उहाँलाई केही छ, र एक ठाउँमा जहाँ तपाईं लागि कुनै मद्दत छ, उहाँले तपाईंलाई ढलाउनु हुनेछ.
8:20 तपाईं मूर्ख संग सल्लाह पकड हुँदैन. तिनीहरूले तिनीहरूलाई प्रसन्न के बाहेक केहि प्रेम गर्न सक्षम छन्.
8:21 तपाईं एक गुटदेखि बाहिरको व्यक्ति को दृष्टि मा सल्लाह लिनु हुँदैन. तपाईंलाई थाहा छैन लागि उहाँले अर्को के गर्नेछ.
8:22 तपाईं हरेक मानिस आफ्नो हृदय प्रकट हुँदैन, सायद नत्र उहाँले तपाईंलाई गलत दया प्रदान गर्न सक्छ, र त्यसपछि तपाईँले reproachfully बोल्न.
9:1 तपाईं आफ्नो Bosom को पत्नी को डाह हुनु हुँदैन, त्यो प्रकट नत्र, तिम्रो कारणले, एक दुष्ट पाठ को अरुको अहित गर्ने इच्छा.
9:2 तपाईं एक महिला आफ्नो प्राण भन्दा बढी अधिकार दिन हुँदैन, उनले आफ्नो शक्ति प्राप्त नत्र, र त तपाईं अलमल्ल हुनेछ.
9:3 तपाईं धेरै चाहना संग एक महिला मा अनुमोदन संग हेर्न हुँदैन, सायद नत्र तपाईं उनको जाल मा पर्न सक्छ.
9:4 तपाईं मनोरञ्जन खाँचो निरन्तर हुनु हुँदैन, न त यो द्वारा उक्साए गर्नुपर्छ, सायद नत्र तपाईं आफ्नो प्रभावकारिता द्वारा नष्ट हुन सक्छ.
9:5 तपाईं कुमारी मा ताक हुँदैन, सायद नत्र तपाईं उनको सौन्दर्य द्वारा scandalized हुन सक्छ.
9:6 तपाईं आफ्नो प्राण दिन हुँदैन, कुनै पनि तरिकामा, fornicators गर्न, तपाईं आफैलाई र आफ्नो उत्तराधिकार नष्ट नत्र.
9:7 शहरको सडकमा वरिपरि हेर्न चयन छैन, न त यसको thoroughfares साथ लक्षविना हिड्नु पर्छ.
9:8 एक अलंकृत महिला आफ्नो अनुहार हटाउनु, लागि अनौठो सुन्दरता मा हेर्न हुँदैन.
9:9 धेरै किनभने एक महिला को सौन्दर्य को perished छ; र यो द्वारा, इच्छा आगो जस्तै kindled छ.
9:10 एक व्यभिचारीले तल trampled गरिनेछ छ जो हरेक महिला, सडक मा मैला जस्तै.
9:11 धेरै, अर्को पत्नी को सौन्दर्य प्रशंसा द्वारा, बन्न reprobate छ. आगो जस्तै उनको चमक संग familiarity अप लागि.
9:12 तपाईं अर्को मानिसको पत्नी संग सबै तल बस्न हुँदैन, न त एक ओछ्यान मा उनको संग झुकन.
9:13 र तपाईं रक्सी भन्दा उनको साथ तर्क हुँदैन, सायद नत्र आफ्नो हृदय उनको तिर बारी, र आफ्नो भावना द्वारा, तपाईं perdition मा toppled हुनेछ.
9:14 तपाईं एक पुरानो साथी त्याग्न हुँदैन. लागि एउटा नयाँ उहाँजस्तै हुने छैन.
9:15 नयाँ मित्र नयाँ रक्सी जस्तै छ. यो पुरानो बढ्नेछ, र त तपाईं यसलाई पिउने पाउनेछन्.
9:16 तपाईं पापी महिमा र धन ईर्ष्या हुँदैन. लागि भविष्यमा आफ्नो अनडू गर्दै हुन सक्छ के थाहा छैन.
9:17 यस अन्यायपूर्ण को चोट तपाईं प्रसन्न हुँदैन, थाह छ कि, सम्म तिनीहरूले नरक मा हो, को impious खुसी छैन.
9:18 मार्न शक्ति भएको एक मानिस टाढा आफैलाई राख्न, र त तपाईं मृत्युको डर तिमी माथि निलम्बित हुनेछैन.
9:19 तर तपाईं भने उहाँलाई भेट्नुपर्छ, अपमान गर्न केही गर्न, सायद नत्र उहाँले आफ्नो जीवन लिन टाढा हुन सक्छ.
9:20 यो मृत्यु संग एक सहभागिता छ भनेर थाहा. तपाईं पासोहरू बीचमा प्रवेश हुनेछ लागि, र शोक को काखमा मा हिड्ने.
9:21 आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो छिमेकीलाई को सावधान हुन, र बुद्धिमानी र हुनेछ चतुर तिनलाई व्यवहार.
9:22 बस मानिसहरू आफ्नो साथीहरू होस्, र आफ्नो महिमा परमेश्वरको डर रहोस्.
9:23 र परमेश्वरको विचार आफ्नो मनमा होस्, र आफ्नो सबै भाषणले सबैभन्दा उच्च को आदेशहरू होऔं.
9:24 काम कलाकार को हात को लागि प्रशंसा हुनेछ, र मान्छे को एक नेता को उनको शब्दहरूको बुद्धिको लागि प्रशंसा हुनेछ, अझै साँच्चै, प्राचीनहरूको शब्द यसको समझ लागि प्रशंसा हुनेछ.
9:25 शब्दहरू पूर्ण मानिस आफ्नो शहर मा एक खूंखार छ, तर rashly बताइएको गर्ने एक आफ्नो शब्द को लागि घृणा गरिनेछ.
10:1 बुद्धिमान् न्यायाधीश आफ्नो इन्साफ गर्नुहुनेछ, र समझ मानिसको नेतृत्व स्थिर हुनेछ.
10:2 मान्छे को न्यायाधीश छ रूपमा, त्यसैले पनि आफ्नो सहायक हो. र मानिसको जो दयालु शहर शासक छ, यस्तो प्रकारको यो बस्ने ती पनि छन्.
10:3 मूर्ख राजाले आफ्नो मान्छे को खण्डहर हुनेछ. शहर शक्ति ती को समझ मार्फत Inhabited गरिनेछ लागि.
10:4 पृथ्वीमा शक्ति परमेश्वरको हात छ, र, समयमा, उहाँले पृथ्वीमा सहयोगी नेता माथि उठाउनु हुनेछ.
10:5 मानिसको समृद्धि परमेश्वरको हात छ, र उहाँले शास्त्राी को अनुहार माथि आफ्नो सम्मान राख्नेछ.
10:6 तपाईं आफ्नो छिमेकीलाई तपाईंलाई गरेका सबै चोट बिर्सन हुँदैन, र तपाईं चोट कामहरू बीचमा केही गर्नुपर्छ.
10:7 अहङ्कारको परमेश्वर र मानिसहरूको दृष्टि मा घृणित छ. र राष्ट्रका बीचमा सबै iniquity abominable छ.
10:8 एक राज्य किनभने अन्याय अर्को एक मान्छे देखि हस्तान्तरण गरिएको छ, र घाइते, र घृणा, र छल हरेक प्रकारको.
10:9 तर केही एक लोभी मानिस भन्दा बढी दुष्ट छ. पृथ्वी र खरानी छ जो कि किन घमण्डी हुनुपर्छ?
10:10 त्यहाँ केही पैसा प्रेम भन्दा बढी iniquitous छ. यस्तो लागि एक पनि आफ्नै प्राण बेचिएको छ. आफ्नो जीवनमा लागि, उहाँले आफ्नो भित्री जा तर्फ casts.
10:11 सबै शक्ति छोटो जीवन को छ. एक लामो समयसम्म रोग एक चिकित्सक गर्न गम्भीर चासो छ.
10:12 एक चिकित्सक गराउँछ एक रोग छोटो हुने. त्यसैले पनि, राजा यहाँ आज, र भोलि उहाँले मर्नेछन्.
10:13 एक मानिस मर्छ जब लागि, उहाँले serpents अधिकार पाउनेछन्, र जङ्गली जनावर, र कीडे.
10:14 मानिसको अहंकार को शुरुवात परमेश्वरको धर्मत्याग छ.
10:15 आफ्नो हृदय उहाँलाई गरे जो एक देखि फिर्ता लिया छ लागि. अहङ्कारको लागि सबै पाप को शुरुवात छ. जसले यसलाई धारण, दुष्ट शब्दहरू भरिएको हुनेछ, र यो अन्त मा उहाँलाई ढलाउनु हुनेछ.
10:16 किनभने यो, प्रभु खराब को जमघट dishonored छ, र उहाँले तिनीहरूलाई नष्ट भएको छ, पनि अन्त निम्ति.
10:17 भगवान घमण्डी नेताहरूको सिट नष्ट भएको छ, र उहाँले आफ्नो ठाउँमा विराजमान हुन नम्र कारण छ.
10:18 घमण्डी राष्ट्रका को जरा, भगवान माथि सुकेको छ, र यी जातिका बीच नम्र, उहाँले लगाए छ.
10:19 प्रभु अन्यजातिहरूको को मुलुकमा पतन भएको छ, र उहाँले तिनीहरूलाई utterly नष्ट भएको छ, पनि आफ्नो जग गर्न.
10:20 उहाँले तिनीहरूलाई केही माथि सुकेको छ, र उहाँले तिनीहरूलाई utterly नष्ट भएको छ, र उहाँ प्रस्थान गर्न आफ्नो स्मृति कारण छ.
10:21 परमेश्वरले घमण्डी को स्मृति निर्मूल छ, र उहाँले मनमा नम्र हुनेहरू मात्र स्मृति छोडेर छ.
10:22 अहङ्कारको मानिसहरू लागि सिर्जना भएको थियो, न त महिला लिङ्ग लागि सिर्जना गरिएको थियो एक क्रोधित स्वभाव.
10:23 मानिसहरूको सन्तान बीचमा परमेश्वरको डर गर्नेहरूलाई सम्मान गरिनेछ. तर जो प्रभुको आज्ञा बेवास्ता सन्तानका बीचमा ती dishonored गरिनेछ.
10:24 आफ्ना भाइहरूलाई बीचमा, शासक सम्मान छ. र प्रभु डर गर्नेहरूलाई उहाँको नजरमा सम्मान हुनेछ.
10:25 परमेश्वरको डर धनीमानीहरूले महिमा छ, को आदरणीय को र, गरिबहरूको र.
10:26 एक बस मानिस नाइँनास्ति गर्न छनौट छैन गरिब छ जो, र धनी छ जो एक पापी मानिस महिमा गर्न छनौट छैन.
10:27 ठूलो मानिस, र न्यायाधीश, र शक्तिशाली सम्मान छ. तर कुनै एक उहाँले परमेश्वरको डर भन्दा ठूलो छ.
10:28 मुक्त भएका ती समझ सेवक सेवा गर्नेछन्. र चतुर र disciplined मानिस सुधार मा गनगन छैन. तर एक नजान्ने मानिस छैन सम्मान गरिनेछ.
10:29 आफ्नो काम गरिरहेको आफूलाई महिमा गर्न छनौट छैन, र दुःखको समयमा अनुपजाऊ हुन छैन.
10:30 जसले काम गर्छ, र यति सबै कुरामा abounds, उहाँले जो दावा भन्दा राम्रो छ, र यति रोटी अभाव.
10:31 छोरा, नम्रता आफ्नो प्राण संरक्षण, र यसको गुण अनुसार यो सम्मान दिन.
10:32 जो एक सफाइ गर्ने आफ्नो प्राण मा पाप? र जो एक आदर गर्ने आफ्नो प्राण अनादर?
10:33 गरिब मानिसले आफ्नो अनुशासन र त्रसित महिमा छ. र वहाँ आफ्नो पदार्थ को सम्मान छ मानिस छ.
10:34 तर कसैले गरिबी मा महिमा छ भने, कसरी पदार्थ मा धेरै? र जसले पदार्थ मा महिमित छ, उहाँलाई गरिबी डर गरौं.
11:1 एक को बुद्धि नम्र उनको टाउको उच्च पार्नुहुनेछ छ जो, र ठूलो मानिसहरूको बीचमा तल बस्न उहाँलाई कारण हुनेछ.
11:2 तपाईं आफ्नो सौन्दर्य लागि एक मानिस प्रशंसा हुँदैन, र तपाईं आफ्नो प्रदर्शनमा लागि एक मानिस नाइँनास्ति हुँदैन.
11:3 यो मौरी उडान कुराहरु सानो छ, तर यसको फल मिठास को शिखर धारण.
11:4 तपाईं कुनै पनि समयमा भेषमा छैन महिमा गर्नुपर्छ, र तपाईं आफै आफ्नो सम्मान दिन मा extolled होस् हुँदैन. सबैभन्दा उच्च कामहरू लागि एक्लै चमत्कारिक छन्; र महिमित र लुकेका र नदेखिने आफ्नो कामहरू छन्.
11:5 धेरै tyrants एक सिंहासन मा बसे छ, र कुनै एक पराउँछु थियो एक diadem जसलाई पहने छ एक.
11:6 धेरै शक्तिशाली मानिसहरू शक्तिशाली तल फ्याँकिएको छ, र शानदार अरूको हातमा भन्दा हस्तान्तरण गरिएको छ.
11:7 तपाईं सोध्नु अघि, तपाईं जो कोहीले मा दोष राख्न हुँदैन; र जब तपाईं प्रश्न छ, justly सच्याउनुभयो.
11:8 तपाईं सुन्न अघि, तपाईं एक शब्द जवाफ हुँदैन; र तपाईं एक भाषणले को बीचमा अवरोध हुँदैन.
11:9 तपाईं एक विषयमा contend हुँदैन जो तपाईं चासोको विषय छैन, र तपाईं पापी साथ सँगै न्याय मा बस्न हुँदैन.
11:10 छोरा, तपाईं धेरै विषयमा संलग्न हुनुपर्छ. र तपाईं धनी बन्न यदि, तपाईं अपराधको मुक्त हुनेछैन. यदि तपाईं पछि लाग्न लागि, तपाईं पक्रनु छैन; र तपाईं अगाडी चलाउन भने, तपाईं उम्कन छैन.
11:11 त्यहाँ मेहनत गरिन् र हतारिंदै र grieves गर्ने एक impious मान्छे हो, तर सबै थप प्रशस्त बिना हुनेछ.
11:12 पुन: प्राप्ति को आवश्यकता मा एक debilitated मान्छे हो, जो बल घटी र गरिबी प्रशस्त.
11:13 अहिलेसम्म परमेश्वरको आँखा आफ्नो फाइदाको लागि उहाँमाथि पक्षमा संग देख्यो छ, र उहाँले आफ्नो अपमान देखि उसलाई उठाएर छ, र उहाँले आफ्नो टाउको उच्च छ. र धेरै उसलाई आश्चर्य छ, र तिनीहरूले परमेश्वरको सम्मान गरेको छ.
11:14 राम्रो कुरा र misfortune, जीवन र मृत्यु, गरिबी र धन, परमेश्वरको छन्.
11:15 बुद्धि, र अनुशासन, र व्यवस्थाको ज्ञान परमेश्वरको हो. प्रेम र असल कुराहरूको तरिका उसलाई छन्.
11:16 त्रुटि र अन्धकार पापी द्वारा सिर्जना गरिएको छ. र दुष्ट मा रमाउनेछ गर्नेहरूलाई, दुष्ट पुराना बढ्न.
11:17 परमेश्वरको उपहार को बस मानिस संग रहिरहन्छ, र आफ्नो प्रगति सदाको निम्ति सफलता हुनेछ.
11:18 त्यहाँ खण्डमा खर्च गरेर सार्थक भएको छ एक छ, र यो आफ्नो इनाम को हदसम्म छ.
11:19 यस्को बारेमा, उहाँ भन्नुहुन्छ: "म को लागि बाँकी फेला, र अब म एक्लै मेरो सामान खाने हुनेछ। "
11:20 तर उहाँले थाहा मृत्यु नजिकिंदै अघि पारित गर्नेछ कति समय छैन, त्यसपछि उहाँले सबै अरूलाई पछि छोडेर मर्न पर्छ.
11:21 तपाईंको करार छिटो खडा, र यो परिचित, र आफ्नो आज्ञा काममा पुरानो बढ्न.
11:22 तपाईं पापी काम मा समय खर्च हुँदैन. बरु, परमेश्वरको भरोसा र आफ्नो ठाउँमा रहन.
11:23 लागि सजिलो छ, परमेश्वरको नजरमा, एक pauper अचानक धनी बनाउन.
11:24 को बस मानिस इनाम दिन परमेश्वर हतारिंदै को आशिष्, र एक क्षणिक घण्टामा आफ्नो प्रगति फल फलाउँछ.
11:25 तपाईं भन्न हुँदैन: "म आवश्यक के?"वा, "कस्तो राम्रो यस मा मेरो लागि हुनेछ?"
11:26 तपाईं भन्न हुँदैन: "आफैलाई लागि म पर्याप्त छ,"वा, "यो भन्दा झन् खराब के हुन सक्छ?"
11:27 राम्रो कुरा को एक दिन मा, तपाईं misfortunes को बिर्सने हुँदैन. र misfortunes एक दिनमा, तपाईं असल कुराहरूको बिर्सने हुँदैन.
11:28 लागि सजिलो छ, परमेश्वरको नजरमा, मा कसैको बित्दै जाँदा को दिन, आफ्नो मार्ग अनुसार प्रत्येक एक चुक्ता गर्न.
11:29 एक घण्टा को कष्ट एक ठूलो Delights भूल गराउनुहुन्छ, र मानिसको अन्त मा आफ्नो काम को uncovering छ.
11:30 तपाईं मृत्यु अघि कुनै पनि मानिस प्रशंसा हुँदैन. एक मानिस लागि आफ्ना छोराछोरीलाई ज्ञात छ.
11:31 तपाईं आफ्नो घर मा हरेक मानिस ल्याउन हुँदैन. लागि धेरै छली को पासोहरू छन्.
11:32 खराब गन्ध संग एक पेट vomits रूपमा लागि, र एक partridge एक पिंजरे मा नेतृत्व छ रूपमा, र एक मृग जस्तै पासो मा नेतृत्व, त्यसैले पनि घमण्डी को हृदय. र यो आफ्नो छिमेकीलाई गिरावट हेर्दै एक दर्शक जस्तै छ.
11:33 यसलाई लुकेर मा निहित लागि, र त्यसपछि दुष्ट मा राम्रो उत्तेजित गर्दछ, र यो चुन्नु मा दोष राख्नेछ.
11:34 एक स्पार्क देखि, ठूलो आगो बढ्छ; र एक छली मानिसबाट, धेरै रगत बग्छ. तर धेरै पापी मानिस रगत लागि लुकेर मा निहित.
11:35 एक हानिकारक मानिस अघि आफैलाई नजिक ध्यान, लागि उहाँले दुष्कर्मलाई fabricates. अन्यथा, उहाँले एक whispered निन्दाले unceasingly तिमी माथि सक्छ.
11:36 आफैलाई पराई प्राप्त, र त्यो एक whirlwind तपाईंलाई ढलाउनु हुनेछ, र उहाँले तपाईँको आफ्नै छ के तपाईं अलग्याउने हुनेछ.
12:1 तपाईं राम्रो भने, तपाईं यसलाई के कसलाई थाहा, र तपाईंको राम्रो कामहरू लागि धेरै धन्यवाद हुनेछ.
12:2 के को बस राम्रो, र तपाईं ठूलो recompense पाउनुहुनेछ, र यदि छैन उहाँबाट, प्रभु देखि पक्कै.
12:3 लागि सधैं दुष्ट मा कब्जा भएको छ कसैले लागि कुनै राम्रो छ, वा जो alms दिन छैन. सबैभन्दा उच्च लागि पापी घृणा धारण, तर पश्चात्ताप मा दया लाग्छ.
12:4 यस दयालु दिन, र तपाईं पापी सहयोग हुँदैन. को impious र पापी लागि बदला मा प्रतिकार दिन तिनीहरूलाई लागि आयोजित भइरहेको संग उपकारको साटो तिरे हुनेछ.
12:5 राम्रो दिन, तर तपाईं पापी प्राप्त हुँदैन.
12:6 नम्र राम्रो के, तर तपाईं impious दिन हुँदैन; आफ्नो रोटी दिनुहुन्छ, उहाँलाई यो दिन छैन, अन्यथा त्यो तपाईंलाई overpower सक्छ.
12:7 के तपाईं उहाँलाई गरेका हुनेछ सबै राम्रो लागि दुई पटक खराब पाउनुहुनेछ लागि. सबैभन्दा उच्च लागि पनि पापी घृणा धारण, र त्यो impious गर्न बदला चुक्ता हुनेछ.
12:8 एक मित्र राम्रो समय छैन ज्ञात हुनेछ, र शत्रु छैन कठिनाइहरू लुकाइएको गरिनेछ.
12:9 मानिसको असल भाग्य द्वारा, आफ्ना शत्रुलाई दुःखित छन्; र आफ्नो misfortune द्वारा, एक मित्र प्रकट गरिएको छ.
12:10 तपाईं आफ्नो शत्रु कहिल्यै विश्वास गर्नुपर्छ. एक पीतल पट जस्तै आफ्नो दुष्टताको rusts लागि.
12:11 र उहाँले humbles र जान्छ भने ढोगे बारेमा, तपाईंको alertness वृद्धि र उसलाई आफूलाई रक्षा.
12:12 तपाईं उसलाई नजिकै कहीं तल बस्न हुँदैन, न त उसलाई आफ्नो दाहिने बस्न अनुमति गर्नुपर्छ, सायद नत्र उहाँले आफ्नो स्थान तिर बारी, र आफ्नो सीट खोजी, अनि तेस्पछि, धेरै अन्त मा, तिमी मेरो शब्दहरू बुझ्न हुनेछ र मेरो प्रवचन द्वारा stung गर्न.
12:13 जो एक सर्पले द्वारा प्रहार एक enchanter मा दया हुनेछ, वा कसैले मा जो जङ्गली जनावर गर्न नजिक? र त यो कम्पनी राख्छ एक iniquitous मानिस संग जो र आफ्नो पाप संलग्न छ एक छ.
12:14 एक घण्टा, उहाँले तपाईंलाई पालन गर्नेछ. तर तपाईं अलग खोल्न सुरु यदि, उहाँले यसलाई अनुमति छैन.
12:15 शत्रु उसको बोलीले संग sweetly बोल्छ, तर आफ्नो हृदय मा, उहाँले लुकेर मा पर्खन्छ, उहाँले एक खाडलमा तपाईं फेंक सक्छ भनेर.
12:16 शत्रु उहाँको नजरमा आँसु छ. तर उहाँले मौका पाता भने, उहाँले रगत सन्तुष्ट छैन.
12:17 र misfortunes तिमीहरूमा हुन भने, तपाईं पहिलो तिनलाई पाउनुहुनेछ.
12:18 शत्रु उहाँको नजरमा आँसु छ, तर तपाईंलाई मदत मानिरहेको बेला गर्न, उहाँले आफ्नो खुट्टा अन्तर्गत खन्नुहोस् हुनेछ.
12:19 उहाँले आफ्नो टाउको हल्लाउनु हुनेछ, र आफ्नो हात ताली, र धेरै लेकानेखुसीगर्छ, र आफ्नो अभिव्यक्ति परिवर्तन.
13:1 जसले छुन्छ पिच यसलाई द्वारा दूषित हुनेछ. र जसले यो घमण्डी संग संगत अहङ्कारको द्वारा ढाकिएको गरिनेछ.
13:2 जसले आफूलाई भन्दा बढी आदरणीय ती संग एसोसिएट्स एक आफूलाई मा बोझ सेट. अनि त, के तपाईं भन्दा wealthier छ जो कसैले कुनै सङ्गति गर्नुपर्छ.
13:3 के खड्कुँलासम्बन्धी को earthen पोत साधारण हुनेछ? र जब उनि आपसमा ठोक्किनु, एक भङ्ग हुनेछ.
13:4 धनी मानिस कुनै अन्याय सहनुपऱ्यो छ, र अझै त्यो वाफ. तर गरिब मानिस, उहाँले घाइते गरिएको छ यद्यपि, मौन रहने.
13:5 तपाईं उदार छन् भने, उहाँले तपाईं हुनेछ; र तपाईं केही हुँदा, उहाँले तपाईं अलग डाली हुनेछ.
13:6 तपाईं अधिकार भने, उहाँले तपाईंलाई भोजमा हुनेछ, र उहाँले तपाईंलाई खाली हुनेछ, र उहाँले तपाईंलाई भन्दा सन्ताप छैन.
13:7 उहाँले तपाईं को आवश्यकता छ भने, उहाँले तपाईंलाई धोका हुनेछ; र हँसिलो गर्दा, उहाँले तपाईँलाई आशा दिन्छ. उहाँले आनंद से तपाईंसँग Converse हुनेछ, र उहाँले भन्न हुनेछ: "तपाईं आवश्यक छ कि यो के हो?"
13:8 र उहाँले आफ्नो खाद्य पदार्थ तपाईंलाई प्रभावित हुनेछ, उहाँले तपाईं दुई वा तीन पटक भोकमरी नभएसम्म, र धेरै अन्त मा, उहाँले तपाईंलाई खिसी हुनेछ. र त्यसपछि, जब उहाँले तपाईंलाई देख्नुहुन्छ, उहाँले तपाईंलाई त्याग्न हुनेछ, र उहाँले तपाईं मा उनको टाउको हल्लाउनु हुनेछ.
13:9 परमेश्वरको सामु आफूलाई नम्र, र आफ्नो हात लागि प्रतीक्षा.
13:10 होस् गर. अन्यथा, मूर्खता मा आकर्षित गरिएको होने, तपाईं अपमानित गरिनेछ.
13:11 आफ्नो बुद्धि कम हुन चयन छैन, अन्यथा, कम ल्याएको गरिएको होने, तपाईं मूर्खता मा आकर्षित गरिनेछ.
13:12 तपाईं कसैलाई निमन्त्रण भने जो अधिक शक्तिशाली तपाईं भन्दा छ, तपाईं अस्वीकार गर्नुपर्छ. अन्यथा, उहाँले तपाईंलाई निमन्त्रणा हुनेछ सबै थप.
13:13 तपाईं उहाँलाई अशिष्ट हुन सक्दैन, तपाईं टाढा धक्का हुन नत्र. र तपाईं उहाँबाट टाढा आवारा सक्दैन, नत्र तपाईं भूल हुन.
13:14 तपाईं एक समान संग रूपमा उहाँसँग छलफल धान्न सक्दैन. तपाईं आफ्नो धेरै शब्दहरू भरोसा हुँदैन. धेरै कुरा गरेर लागि, उहाँले तपाईं जांच हुनेछ, र हँसिलो गर्दा, उहाँले आफ्नो रहस्य बारेमा प्रश्न हुनेछ.
13:15 आफ्नो क्रूर मन आफ्नो शब्दहरू माथि भण्डारण; र उहाँले कष्ट तपाईंले छोडूँगा, न त जेल बाट.
13:16 आफैलाई को सावधान हुन, र सुनिरहेका छन् के गर्न लगनशील भई उपस्थित. तपाईं आफ्नो विनाश तिर हिड्ने छन् लागि.
13:17 यद्यपि साँच्चै, यी कुराहरू सुनिरहेको बेला, यो सपना थिए भने यो विचार, र तपाईं जगाउन हुनेछ.
13:18 आफ्नो सम्पूर्ण जीवन परमेश्वरको प्रेम, र आफ्नो मुक्तिको लागि उहाँलाई पुकारा.
13:19 हरेक पशु यसको आफ्नै प्रकारको प्रेम; त्यसैले पनि हरेक मानिस आफूलाई ती घनिष्ठ प्रेम.
13:20 सबै प्राणी जो सहभागी हुनेछ नै समान छ, र हरेक मानिस जसलाई संगत हुनेछ आफूलाई समान छ.
13:21 एक ब्वाँसो कुनै पनि समयमा एक पाठो सङ्गति भने, त्यसैले पनि पापी को बस सङ्गति थियो.
13:22 के संगति पवित्र मानिस कुकुर संग छैन? वा के भाग गरिब संग धनी छैनन्?
13:23 मरुभूमिमा, जंगली गधा सिंहको को शिकार छ. त्यसैले पनि गरिब धनी को चरण हो.
13:24 र बस नम्रता रूपमा घमण्डी गर्न abomination छ, त्यसैले पनि धनी मानिस गरिब मानिस घृणा गर्छ.
13:25 जब एक धनी मानिस हल्लाइन्छ गरिएको छ, उहाँले आफ्नो मित्र अझ सुदृढ हुन्छ. तर जब एक नीच मानिस पतित छ, उहाँले राम्रो उहाँलाई चिन्नेहरू समेत बहिष्कार छ.
13:26 जब एक धनी मानिस धोका गरिएको छ, धेरै उहाँलाई पुनः प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ; उहाँले arrogantly बोली छ, तैपनि तिनीहरू उहाँलाई सफाइ.
13:27 जब एक गरिब मानिस धोका गरिएको छ, साथै उहाँले हप्काउनुभयो छ; उहाँले समझ संग बोली छ, र कुनै ठाउँ उहाँलाई दिइएको छ.
13:28 धनी मानिस बोली छ, र सबै मौन रहन, र तिनीहरूले आफ्नो शब्द दोहोर्याउन, पनि बादल गर्न.
13:29 गरिब मानिस बोली छ, र तिनीहरूले भन्न: "यो को हो?"अनि यदि उहाँले stumbles, तिनीहरूले उहाँलाई ढलाउनु हुनेछ.
13:30 पदार्थ आफ्नो अन्तस्करणले कुनै पाप छ जो उहाँको लागि राम्रो छ. र गरिबी को impious मुख द्वारा धेरै दुष्ट भनिन्छ.
13:31 मानिसको हृदयलाई अनुहार परिवर्तन, राम्रो वा खराब लागि या त.
13:32 तपाईं पाउनुहुनेछ, कठिनाई र धेरै श्रम संग, राम्रो हृदय चिन्ह र राम्रो अनुहार.
14:1 अनमोल आफ्नो मुखबाट किनभने शब्द को उतर छैन मानिस छ, र जो शोक द्वारा किनभने एक ठेस को stung गरिएको छैन.
14:2 खुसी उहाँले आफ्ना मनमा दुःख छैन छ, र आफ्नो आशा टाढा जो खसेको छैन.
14:3 पदार्थ एक लोभी र stingy मानिस लागि अर्थहीन छ. र एक द्घेष मानिस सुन के थियो?
14:4 जसले बेमनासिब प्राप्त, आफ्नै मन अनुसार, अरूको लागि बटोरता. अर्को लागि आलिशान आफ्नो सामान खर्च हुनेछ.
14:5 जसले आफूलाई गर्न दुष्ट छ, जसलाई उहाँले असल हुनेछ? उसले आफ्नो सामान मा आनन्दको हुनेछ लागि.
14:6 जसले आफूलाई तिर द्वेष छ, केही उहाँ भन्दा बढी बेकम्मा छ. तर यस्तो आफ्नो दुष्टताको इनाम छ.
14:7 र उहाँले राम्रो गर्छ भने, उहाँले ignorantly र इच्छा विपरित यसले गर्छ. र धेरै अन्त मा, उहाँले आफ्नै अरुको अहित गर्ने इच्छा बुझ्छ.
14:8 को द्घेष मानिसको आँखा दुष्ट छ, र उहाँले आफ्नो अनुहार averts र आफ्नै प्राण despises.
14:9 लोभी मानिसको आँखा iniquity आफ्नो भागमा insatiable छ. उसले आफ्नो प्राण खपत नभएसम्म उहाँले सन्तुष्ट छैन, दूर withering.
14:10 दुष्ट आँखा खराब कुराहरू निर्देशित छ. र उहाँले रोटी द्वारा सन्तुष्ट गरिनेछ; सट्टा, उहाँले खाँचोमा परेका र आफ्नै तालिका मा शोकाकुल हुनेछ.
14:11 छोरा, तपाईं केहि छ भने, आफैलाई राम्रो के, र परमेश्वरको योग्य oblations प्रस्ताव.
14:12 मृत्यु ढिलाइ छैन गरिएको सम्झना, र गम्भीर को करार तपाईं प्रकट गरिएको. यो संसारको करार लागि मृत्युको टाढा जानु हुनेछ.
14:13 तपाईं मर्न अघि आफ्नो मित्र राम्रो के. र आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो हात विस्तार र गरिब दिन.
14:14 राम्रो दिन बाहिर आफैलाई धोखा छैन, र सानो राम्रो उपहार द्वारा पारित गरौं गर्छन्.
14:15 तपाईं धेरै गरेर आफ्नो दुःखको र मेहनत विभाजन अरूलाई छोड हुँदैन?
14:16 दिनु, र प्राप्त, र आफ्नो प्राण सफाइ.
14:17 तपाईंको बित्दै जाँदा अघि, न्याय पूरा. मा मृत्यु को लागि, त्यहाँ फेला कुनै खाना.
14:18 सबै प्राणी घाँस जस्तै पुरानो बढ्छ, र हरियो रूख देखि निस्कने Springs कि पत्ते जस्तै.
14:19 केही वसन्त अप, र अरूलाई टाढा गिरावट. यस्तो मासु र रगतको पुस्ता छ. एक समाप्त छ, र अर्को जन्म हुन्छ.
14:20 हरेक corruptible काम अन्त मा असफल हुनेछ. र यसको कामदार यसलाई जानेछौं.
14:21 तर हरेक उत्कृष्ट काम जायज हुनेछ. र जसले यो द्वारा सम्मान गरिनेछ काम.
14:22 अनमोल बुद्धि मा पालन गर्ने मान्छे हो, र जो उनको धार्मिकता मनन गर्नेछ, र जो, आफ्नो मनमा, परमेश्वरको circumspection विचार गर्नेछौं.
14:23 उहाँले आफ्नो हृदयमा उनको तरिका ठान्नुहुन्छ, र उहाँले तिनलाई रहस्य मा समझ पाता. उहाँले एक अन्वेषक जस्तै उनको पछि जान्छ, र उहाँले तिनलाई तरिकामा स्थिर छ.
14:24 उहाँले उनको Windows मार्फत gazes, र उनको ढोकामा सुन्नुहुन्छ.
14:25 उनको घरमा अर्को खण्डमा, र, उनको पर्खालहरु मा एक किला बन्धन, उहाँले उनको हात आफ्नो घरेलु अप सेट. अनि त, समय बित्दै रूपमा राम्रो कुरा आफ्नो घरेलु मा विश्राम हुनेछ.
14:26 उनको पहिरन अन्तर्गत आफ्नो छोरा स्टेशन हुनेछ, र उहाँले तिनलाई शाखा अन्तर्गत पालन गर्नेछ.
14:27 उनको पहिरन सुरक्षित गरिनेछ गर्मी देखि, र उनको महिमा मा आराम हुनेछ.
15:1 जसले डर परमेश्वरको राम्रो गर्नेछ. र जसले न्याय गर्न धारण यसलाई प्राप्त गर्नेछन्.
15:2 र एक आदरणीय आमा जस्तै, उहाँलाई भेट्न हुनेछ, र कुमारी दुलही जस्तै, तिनले उसलाई प्राप्त हुनेछ.
15:3 त्यो जीवन र समझ को रोटी उहाँलाई चर्नेछन्. र तिनले उसलाई salvific बुद्धिको पानी देखि पिउन दिन. र त्यो उहाँमाथि पुष्टि हुनेछ, र उहाँले लहरना छैन.
15:4 र त्यो उहाँलाई पकड हुनेछ, र उहाँले हैरान गरिनेछ. र तिनले उसलाई उच्च पार्नुहुनेछ, उहाँलाई घनिष्ठ ती साथ.
15:5 र चर्च को बीचमा, त्यो आफ्नो मुख खोल्न हुनेछ, र त्यो बुद्धि र समझ आत्मा उहाँलाई भर्न हुनेछ, र त्यो महिमा को एक ओढ्ने उहाँलाई लुगा लगाउनु हुनेछ.
15:6 त्यो रमाहट र exultation एक खजाना उहाँलाई मा भण्डारण, र तिनले उसलाई एउटा अनन्त नाम हकदार हुन हुनेछ.
15:7 तर मूर्ख मानिसहरू उनको पकड लिन छैन. र हुनत बुझ्न मानिसहरू उनको पूरा हुनेछ, मूर्ख मानिसहरूले उनको दृष्टि बुझिएन हुनेछ. लागि त्यो अहङ्कारको र छल देखि टाढा छ.
15:8 झूट मानिसहरू उनको wary हुनेछ. तर सत्य बोल्ने मानिसहरू उनको फेला परेन गरिनेछ, र तिनीहरूले सफलता हुनेछ, हुँदा पनि परमेश्वरले जांच.
15:9 प्रशंसा पापी को मुख मा सुन्दर छैन.
15:10 बुद्धिको लागि परमेश्वरको पठाइएको थियो. र प्रशंसा परमेश्वरको बुद्धि खडा हुनेछ, र प्रशंसा विश्वासी को मुख मा प्रशस्त हुनेछ, र सार्वभौम प्रभु बुद्धि प्रशंसा दिनेछु.
15:11 तपाईं भन्न हुँदैन: "यो किनभने परमेश्वरको बुद्धि अनुपस्थित छ भन्ने छ।" ऊ detests के गर्नुपर्छ लागि.
15:12 तपाईं भन्न हुँदैन: "उहाँले मलाई हराउनु नेतृत्व गरेको छ।" उहाँलाई कुनै प्रयोग को impious छन् लागि.
15:13 प्रभु सबै abominable त्रुटि घृणा, र उसलाई डर गर्नेहरूलाई यस्ता कुराहरू प्रेम छैन.
15:14 परमेश्वरले सुरुदेखि मानिस स्थापित, र उसले आफ्नो सल्लाह को हात मा उहाँलाई बाँकी.
15:15 उहाँले आफ्नो आज्ञा र आदेशहरू थपियो.
15:16 तपाईं आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ भने, र यदि, तिनीहरूलाई चुनिएको भएको, तपाईं सदैव इमानदारी तिनीहरूलाई पूरा, तिनीहरूले तपाईंलाई सुरक्षित गर्नेछ.
15:17 उहाँले तपाईंलाई अघि पानी र आगो सेट छ. whichever एक तपाईँले चयन हुनेछ आफ्नो हात विस्तार.
15:18 मानिस जीवन र मृत्युको अघि, राम्रो र नराम्रो. Whichever उहाँले छनोट उहाँलाई दिइनेछ.
15:19 परमेश्वरको बुद्धिको लागि धेरै गुना छ. र उहाँले शक्ति बलियो छ, ceasing बिना सबै कुराहरू देखेर.
15:20 प्रभुको उहाँलाई डर गर्नेहरूलाई मा छन्, र उहाँले मानिसको काम प्रत्येक एक थाह.
15:21 उहाँले impiously कार्य गर्न कुनै एक आज्ञा छ, र उहाँले पाप गर्न कुनै एक अनुमति दिइएको छ.
15:22 उहाँले अविश्वासी र बेकारी छोराहरू एक भीड इच्छा छैन लागि.
16:1 तपाईं impious बच्चाहरु आनन्दित हुँदैन, तिनीहरूले सफल छन् भने; न त उनलाई आनन्द लिनुपर्छ, परमेश्वरको डर तिनीहरूलाई छैन भने.
16:2 तपाईं आफ्नो जीवन को अनुमोदन गर्नुपर्छ, न त आफ्नो मेहनत मा अनुमोदन संग हेर्न गर्नुपर्छ.
16:3 परमेश्वरको डर जो एक बच्चा लागि राम्रो भन्दा एक हजार impious छोराछोरीलाई छ.
16:4 र यो बच्चाहरु बिना मर्न राम्रो छ, impious बच्चाहरु पछि छोड्न भन्दा.
16:5 अर्थ द्वारा समझ एक व्यक्ति, देश Inhabited गरिनेछ. को impious कुलका उजाड हुनेछ.
16:6 मेरो आँखा देखेको छ धेरै यस्ता कुराहरू, र ठूलो कुरा यी भन्दा मेरो कान सुनेको छ.
16:7 पापी सभाघरमा, आगो निस्कने ब्लेज हुनेछ; र अर्कै धर्म मान्ने मानिसहरू बीच, क्रोध माथि चम्कने बस्तु हुनेछ.
16:8 प्राचीन को दिग्गज आफ्नो पापको लागि क्षमा प्राप्त गर्नुभएन; तिनीहरूले आफ्नै क्षमता भरोसा नाश थिए.
16:9 र उहाँले लूतको प्रवास को स्थान छोडूँगा थिएन, र उहाँले किनभने शब्दहरू आफ्नो को अहङ्कारको तिनीहरूलाई abhorred.
16:10 उहाँले तिनीहरूलाई मा दया लिएनन्, सम्पूर्ण मानिसहरूलाई जलाएर, जो पनि आफूलाई आफ्नो पाप विषयमा extolled.
16:11 र यो छ सय हजार मानिसहरूसँग त थियो, जसले हृदय कठोरता भेला थिए. र पनि एक हठी व्यक्ति unpunished बच थियो भने, यो एक आश्चर्य हुनेछ.
16:12 कृपा र क्रोध लागि उसलाई छन्. उहाँले क्षमा मा शक्तिशाली छ, र उहाँले क्रोध निस्कने खन्याइदिएकी.
16:13 रूपमा आफ्नो कृपा छ, त्यसैले पनि आफ्नो सुधार छ; उहाँले आफ्नो काम अनुसार एक मानिस न्यायाधीशहरूले.
16:14 पापी, आफ्नो उल्लंघन मा, उम्कन छैन; तर एक को धैर्य गर्ने देखाउँछ कृपा कम हुनेछैन.
16:15 हरेक कृपा प्रत्येक मानिस लागि ठाउँ बनाउन हुनेछ, आफ्नो काम को गुण अनुसार, र आफ्नो प्रवास को समझ अनुसार.
16:16 तपाईं भन्न हुँदैन: "म परमेश्वरको लुकेको छु,"वा, "कसले, उच्च देखि, मेरो टिप्पणी हुनेछ?"
16:17 वा, "मान्छे को एक महान नम्बर माझमा, म याद गरिनेछ. यस्ता एक विशाल सिर्जना बीच मेरो प्राण के हो?"
16:18 हेर: आकाश, र स्वर्गको स्वर्ग, पातालमा, र सम्पूर्ण पृथ्वी, र यी भित्र छन् कि कुरा, आफ्नो Gaze द्वारा हल्लाइन्छ गरिनेछ,
16:19 सँगै पहाड र पहाडलाई संग, र पृथ्वीको जगहरू. परमेश्वरले तिनीहरूलाई मा आफ्नो Gaze casts गर्दा, तिनीहरूले कामेको संग प्रहार हुनेछ.
16:20 र यी सबै कुराहरूको, हृदय समझ बिना छ; तर हरेक हृदय उहाँलाई बुझेका छ.
16:21 र आफ्नो मार्ग गर्ने बुझ्न, वा tempest, जो मानिस कुनै आँखा देख्ने?
16:22 आफ्नो काम धेरै लागि लुकाइन् छन्. तर आफ्नो न्याय को काम गर्ने घोषणा हुनेछ? वा तिनीहरूलाई जो रहिरहनेछन्? यस नियमको लागि केही व्यक्ति देखि टाढा छ, र प्रत्येक कुरा को परीक्षा यसको अन्त मा छ.
16:23 जसले हृदय diminishes, खाली विचार सोच्छ. लागि imprudent र erring मानिस माथि मूर्खता सोच्छ.
16:24 मलाई सुन्न, छोरा, र समझ अनुशासन सिक्न, र आफ्नो हृदयमा मेरो शब्दहरू उपस्थित.
16:25 र म अनुशासन बारेमा इक्विटी बोल्न हुनेछ, र म बुद्धि घोषणा गर्न प्रयास गर्नेछन्. त्यसैले आफ्नो हृदय मेरो शब्दहरू उपस्थित, र म आत्माको इक्विटी बोल्न हुनेछ, परमेश्वरले सुरुदेखि आफ्नो काम भित्र सेट छ कि सद्गुण बारेमा, र म सत्य आफ्नो ज्ञान घोषणा हुनेछ.
16:26 परमेश्वरको न्याय संग, आफ्नो काम सुरुदेखि गरेको छ; र आफ्नो संस्था बाट, उहाँले आफ्नो भागहरु प्रतिष्ठित र आफ्नो शुरुवात सेट, आफ्नो प्रकार मा.
16:27 उहाँले सदाको निम्ति आफ्नो काम beautified छ. तिनीहरूले न hungered छ, न त labored, र तिनीहरूले कामहरू देखि भएनन् छैन.
16:28 न त उनलाई कुनै पनि एक आफ्नो छिमेकीलाई गर्न वेदनामा कारण हुनेछ, सधैंभरि.
16:29 तपाईं आफ्नो शब्द मा बदगुमान हुँदैन.
16:30 त्यसपछि, परमेश्वरले पृथ्वीमा पक्षमा संग देख्यो, र उहाँले आफ्नो भलाइ यसलाई भरिएको.
16:31 हरेक जीवित प्राणीहरूको प्राण आफ्नो अनुहार अघि देखि शब्द ल्याए, र आफ्नो फिर्ती फेरि उहाँलाई छ.
17:1 परमेश्वरले पृथ्वीबाट मानिस सिर्जना, र उसले आफ्नो छवि अनुसार उहाँलाई गरे.
17:2 र त्यो फेरि उहाँलाई फिर्ता, र उहाँले अनुसार सद्गुण उहाँलाई ढाकिएको.
17:3 उसले त्यसलाई आफ्नो दिन को संख्या र समय दिनुभयो, र उहाँले पृथ्वीमा भएका सबै कुराहरू उसलाई अधिकार दिए.
17:4 उहाँले सबै प्राणी भन्दा उसलाई भय राखिएको, र उहाँले जङ्गली जनावर र उडान कुराहरू भन्दा डोमिनियन थियो.
17:5 उहाँले तिनलाई एक सहायक सिर्जना, आफूलाई समान. उहाँले तिनीहरूलाई सल्लाह दिए, र भाषा, र दृष्टि, र सुनेर, र एक हृदय, सोच्न क्रममा. र उहाँले समझ अनुशासन तिनीहरूलाई भरिएको.
17:6 उहाँले तिनीहरूलाई भित्र आत्माको ज्ञान सिर्जना. उहाँले समझ आफ्नो हृदय भरिएको, र उहाँले तिनीहरूलाई देखाए दुवै राम्रो र खराब.
17:7 उहाँले तिनीहरूको हृदय मा आफ्नो आँखा सेट, तिनीहरूलाई आफ्नो काम महानता प्रकट गर्न,
17:8 ताकि तिनीहरूले पवित्रीकरण नाम अत्यधिक प्रशंसा सक्छ, र आफ्नो विचित्रताहरू महिमा, तिनीहरूले आफ्नो काम महानता घोषणा सक्छ भनेर.
17:9 साथै, उहाँले तिनीहरूलाई अनुशासन र जीवनको व्यवस्था दिनुभयो, आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा.
17:10 उहाँले तिनीहरूलाई अनन्त करार स्थापित, र उहाँले आफ्नो न्याय र इन्साफ तिनीहरूलाई प्रकट.
17:11 र आफ्नो आँखा आफ्नो सम्मान को महानता देखे, र आफ्नो कान आफ्नो आवाजको सम्मान सुने, र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "सबै iniquity खबरदार।"
17:12 र उहाँले आफ्नो छिमेकीलाई विषयमा प्रत्येक एक आज्ञा.
17:13 आफ्नो तरिका आफ्नो दृष्टि मा सधैं हुन्; तिनीहरूले आफ्नो आँखा लुकेका छैनन्.
17:14 प्रत्येक मानिसहरूमाथि, उहाँले शासक नियुक्त गर्नुभएको छ.
17:15 र इस्राएलका परमेश्वरको प्रकट भाग हुन गरिएको थियो.
17:16 र परमेश्वरको दृष्टि मा, सबै आफ्नो काम सूर्य जस्तै हो. र आफ्नो आँखा, ceasing बिना, आफ्नो मार्ग निरीक्षण.
17:17 यो करार आफ्नो iniquity लुकाइएका छैनन्, र तिनीहरूका सबै iniquities परमेश्वरको दृष्टि हो.
17:18 मानिसको almsgiving उहाँमाथि एक छाप जस्तै छ, जो एक आँखा को छात्र जस्तै मानिसको अनुग्रह हेरचाह.
17:19 र त्यसपछि, यसलाई खडा र तिनीहरूलाई आफ्नो इनाम चुक्ता हुनेछ, आफ्नो शिरमा प्रत्येक एक, र यो पृथ्वीको लुकेका स्थानहरू फर्केर.
17:20 अब, पश्चात्ताप गर्न, उहाँले न्यायको बाटो दिइएको छ, र उहाँले ती धैर्य घटी बलियो छ, र उहाँले सत्यको भाग्य तिनीहरूलाई fastened छ.
17:21 परिवर्तित प्रभु गर्न, र आफ्नो पाप त्यागिन्.
17:22 प्रभुको अनुहार अघि supplication बनाउन, र आफ्नो अपराध बढ्छ.
17:23 प्रभु फर्कन, र आफ्नो अन्याय त्यागेर, र abomination लागि विशाल घृणा छ.
17:24 र justices र परमेश्वरको इन्साफ स्वीकार, र सबै भन्दा उच्च परमेश्वरको तपाईंले पहिले सेट परिस्थिति र प्रार्थनामा दृढ.
17:25 पवित्र पुस्ता छेउमा जाने, अर्डर बस्ने ती परमेश्वरको प्रशंसा दिन.
17:26 तपाईं impious को त्रुटि Linger हुँदैन; मृत्यु अघि स्वीकार. यसलाई केही थिए भने मरेका बाट स्वीकार perishes.
17:27 बाँचुन्जेल स्वीकार; तपाईं अझै पनि जीवित र स्वस्थ हुँदा तपाईं धन्यवाद दिनुपर्छ. र तपाईं आफ्नो दया मा परमेश्वर र महिमा प्रशंसा गर्नुपर्छ.
17:28 प्रभुको कृपा कसरी ठूलो छ, र आफ्नो क्षमा, उहाँलाई रूपान्तरण गर्नेहरूका लागि!
17:29 छैन लागि सबै कुराहरू मानिसहरू मा हुन सक्छ, मानिसको छोरा अमर छैन किनभने, र किनभने तिनीहरूले अरुको अहित गर्ने इच्छा को खालीपनको द्वारा खुसी छन्.
17:30 सूर्य भन्दा उज्जवल के हो? अहिलेसम्म यो असफल हुनेछ. वा के जो मासु र रगत आविष्कार भएको छ त्यो भन्दा बढी दुष्ट छ? र यो हप्काएका गरिनेछ.
17:31 उहाँ स्वर्गमा को हाइट्स शक्ति beholds. र सबै मानिसहरू पृथ्वी र खरानी हो.
18:1 सदाको बास गर्ने एक साथ सबै थोक सृष्टि. भगवान एक्लै जायज हुनेछ, र उहाँले सदाको लागि एक अजेय राजा रहिरहन्छ.
18:2 जो आफ्नो काम घोषणा गर्न सक्षम छ?
18:3 जो आफ्नो महानता जाँच्न सक्नुहुन्छ लागि?
18:4 र आफ्नो परिमाण शक्ति जो घोषणा हुनेछ? अथवा उहाँको कृपा वर्णन गर्न सक्षम हुनेछ?
18:5 कुनै diminishing छ, र कुनै वृद्धि, र कुनै खोजी छ, परमेश्वरको महानता.
18:6 जब मानिस अन्त पुगेको छ, त्यसपछि उहाँले सुरु हुनेछ. उहाँले ceases गर्दा र, उहाँले आवश्यकता हुनेछ.
18:7 मानिस के हो, र आफ्नो अनुग्रह के हो? र आफ्नो राम्रो के छ, वा आफ्नो दुष्ट के हो?
18:8 मानिसहरूको दिन को संख्या धेरै रूपमा सय वर्ष हो. सागर मा पानी को एक थोपा जस्तै, त्यसैले तिनीहरू हुन मानिन्छ. र किनारमा मा बालुवा को एक अन्न जस्तै, त्यसैले यी केही वर्ष सबै समय दिन तुलना गर्छन्.
18:9 यस कारण, परमेश्वरले तिनीहरूलाई संग रोगी छ, र उहाँले तिनीहरूमाथि निस्कने उहाँको दया खन्याइदिएकी.
18:10 उहाँले आफ्नो हृदयको अनुमान दुष्ट छ भनेर देखेको छ, र उहाँले आफ्नो rebelliousness दुष्ट छ भनेर थाह.
18:11 त्यसैले, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो क्षमा bestowed छ, र उहाँले इक्विटी बाटो तिनीहरूलाई प्रकट गरेको छ.
18:12 मानिसको दया उहाँलाई ती घनिष्ठ तिर छ. तर परमेश्वरको कृपा सबै प्राणी मा छ.
18:13 उहाँले दयालु छ, र उहाँले सिकाउँछ र सुधार्छ, आफ्नो बगालको संग गोठालो जस्तै.
18:14 उहाँले दया को सिद्धान्त स्वीकार गर्नेहरूलाई मा दया लाग्छ, र उहाँले द्रुत उहाँका इन्साफ लागू.
18:15 छोरा, आफ्नो राम्रो काम मा, तपाईं गुनासो हुँदैन, र केहि दिने, तपाईं दुष्ट शब्दहरू दुःख दिइरहनुभएको हुँदैन.
18:16 गर्मी शीत द्वारा ताजा छैन? त्यसैले पनि राम्रो शब्द एउटा उपहार भन्दा राम्रो छ.
18:17 हेर, एक उपहार भन्दा ठूलो शब्द हो? तर दुवै एक जायज मानिस हुनुहुन्छ.
18:18 को मूर्ख ठाउँ दोष जोडले. र undisciplined देखि एक उपहार असफल आँखा गराउँछ.
18:19 तपाईं न्यायाधीश अघि, आफैलाई भित्र क्रममा न्याय राख्नु, र तपाईंले बोल्ने अघि, सिक्न.
18:20 तपाईं बिरामी बन्न अघि, चिकित्सा प्राप्त. र तपाईं न्यायाधीश अघि, आफैलाई जाँच्न. र त तपाईं परमेश्वरको दृष्टि मा क्षमा पाउनुहुनेछ.
18:21 तपाईं कमजोर बन्न अघि, आफैलाई नम्र; अथवा अशक्तताले एक समय मा, आफ्नो जीवन को बाटो देखाउन.
18:22 केही सधैं प्रार्थना तपाईंले अवरोध खडा गरौं. र त तपाईं जायज गर्न भय छैन, पनि मृत्यु निम्ति. परमेश्वरको इनाम सदाको बास लागि.
18:23 तपाईं प्रार्थना अघि, आफ्नो प्राण तयार. र परमेश्वरको लोभ्याउँछ मानिस जस्तै हुन चयन छैन.
18:24 मा Consummation दिन हुनेछ क्रोध सम्झना, र प्रतिकार समय सम्झना, उहाँले आफ्नो अनुहार टाढा हुनेछ जब.
18:25 प्रशस्त समय मा गरिबी सम्झना, र धन को एक दिन मा गरिबीको कमी सम्झना.
18:26 बिहान देखि साँझ सम्म, समय परिवर्तन गरिनेछ, र यी सबै परमेश्वरको नजरमा तेज छन्.
18:27 बुद्धिमान् मानिस सबै कुरामा सतर्क हुनेछ, र धेरै अपराध को एक समयमा, उहाँले inaction विरुद्ध ध्यान हुनेछ.
18:28 चतुर छ जो कोहीले बुद्धि पहिचान, र उहाँले जो कोहीले स्वीकार गर्ने यो पाता.
18:29 पनि बुद्धिमानीपूर्वक आफूलाई हुन्थे छन् शब्दहरू समझ देखाउन गर्नेहरूलाई, र तिनीहरूले सत्य र न्यायको बुझे, र तिनीहरूले हितोपदेश र इन्साफ पूरा गरेका छन्.
18:30 तपाईं आफ्नो चाहना पछि जान गर्नुपर्छ; सट्टा, तपाईंको आफ्नै इच्छा त्यागेर.
18:31 तपाईं आफ्नो प्राण आफ्नो इच्छा प्रस्ताव भने, यो तपाईं आफ्नो शत्रुहरूलाई एक आनन्द बन्न गर्नाले.
18:32 disorderly जमघट कुनै आनन्द लिन, चाहे ठूलो वा सानो. अपराध को आफ्नो जिम्मेवारी unceasing छ लागि.
18:33 तपाईं ऋणबाट को contention द्वारा कम गर्नुपर्छ, पनि भने तपाईंको पर्स केही छ. तपाईं को लागि आफ्नो जीवन विरुद्ध contending हुनेछ.
19:1 एक inebriated कामदार धनी हुने छैन. र जसले littleness despises एक समयमा एक सानो पतन हुनेछ.
19:2 वाइन र महिला बुद्धिमानी मानिसहरू टाढा गिरावट हुन, र त्यसपछि तिनीहरूले जो बुझ्न ती विरुद्ध गुनासो हुनेछ.
19:3 र जसले fornicators आफूलाई मिलती दुष्ट हुनेछ. क्षय र कीडे उहाँलाई अधिकार पाउनेछन्, र त्यो ठूलो उदाहरण निन्दा गरिनेछ, र आफ्नो प्राण संख्या देखि कटौती गरिनेछ.
19:4 जसले विश्वास गर्न द्रुत एक तुच्छ हृदय छ र कम हुनेछ. र जसले आफ्नो प्राण विरुद्ध offends पनि कम हुनेछ.
19:5 जसले iniquity मा rejoices निन्दा गरिनेछ. र जसले सुधार घृणा जीवनमा कम हुनेछ. तर जसले अत्यधिक कुरा दुष्ट extinguishes घृणा.
19:6 जसले आफ्नै प्राण विरुद्ध पाप सजाय हुनेछ. र जसले अरुको अहित गर्ने इच्छा मा rejoices निन्दा गरिनेछ.
19:7 तपाईं एक दुष्ट र कठोर शब्द दोहोर्याउन हुँदैन, त्यसपछि तपाईं कम हुनेछ.
19:8 साथी वा foe आफ्नो मन प्रकट छैन. र यदि तपाईं भित्र पाप हो, यो खुलासा छैन.
19:9 लागि उहाँले तपाईंलाई सुन्न र हेर्न हुनेछ, र गर्दा आफ्नो पाप रक्षा मानिरहेको, उहाँले तपाईंलाई नाइँनास्ति हुनेछ, र यति उहाँले तपाईं संग छ जब हुनेछ.
19:10 तपाईं आफ्नो छिमेकीलाई विरुद्धमा शब्द सुनेका? यो तपाईं भित्र मर्न दिनुहोस्, यो तपाईं देखि अगाडी फुट्छ छैन भन्ने भरोसा.
19:11 शब्द को अनुहार अघि, मूर्ख मानिसले मेहनत, जस्तै त्यो रूपमा विलाप एक महिला एक बच्चा जन्माउँछ.
19:12 को जांघ को शरीरमा निश्चित एउटा तीर जस्तै, त्यसैले एक मूर्ख मानिसको हृदयमा शब्द छ.
19:13 एक मित्र ठीक, सायद त्यहाँ एक गलतफहमीले थियो हुनत, र उहाँले भन्न सक्छ, "म यो गरेन।" अथवा, उहाँले यो गर्नुभयो भने, उहाँलाई ठीक, त्यसैले त्यो फेरि के हुन सक्छ कि.
19:14 आफ्नो छिमेकीलाई ठीक, सायद लागि त्यो भन्न भएन. तर त्यो भन्न गर्नुभयो भने, उहाँलाई ठीक, उहाँले फेरि भन्न सक्छ भनेर छैन.
19:15 आफ्नो मित्र ठीक. एक दोष अक्सर लागि प्रतिबद्ध गरिएको छ.
19:16 र हरेक शब्द विश्वास छैन. उहाँको शब्द संग मुनाहरू गर्ने छ, तर आफ्नो हृदयले.
19:17 आफ्नो शब्द संग आहत छैन त्यहाँ जो छ? तपाईं उसलाई डांटनु अघि आफ्नो छिमेकीलाई ठीक.
19:18 र सबैभन्दा उच्च भय लागि ठाउँ बनाउन. सबै बुद्धिको लागि परमेश्वरको डर छ, र यो परमेश्वरको डर बुद्धिमानी हुन्छ, र सबै बुद्धि मा व्यवस्था व्यवस्थित स्वभाव छ.
19:19 तर दुष्टताको अनुशासन बुद्धि छैन. र पापी विचार कुनै प्रूडेंस छ.
19:20 त्यहाँ एक दुष्टताको छ, र यो त्यहाँ abomination छ. र त्यहाँ बुद्धि मा कम गरिएको छ जो एक मूर्ख मानिस छ.
19:21 राम्रो बुद्धि मा कम गरिएको छ जो आफ्नो मन असफल किनभने मानिस छ, तर परमेश्वरको डर संग, उहाँले भन्दा जो बुद्धि मा abounds, तर सबैभन्दा उच्च को व्यवस्था विरुद्ध अपराधको संग.
19:22 त्यहाँ एक निश्चित cleverness छ, र यो अन्यायपूर्ण छ.
19:23 र त्यहाँ एक होसियार शब्द utters गर्ने छ, सत्य टाढा व्याख्या. त्यहाँ wickedly आफूलाई humbles गर्ने छ, आफ्नो भित्री लागि छल भरिएको छ.
19:24 र एक ठूलो debasement संग आफूलाई बढ्तै lowers गर्ने एक छ. र त्यहाँ तल आफ्नो अनुहार inclines गर्ने छ, र pretends उहाँले ज्ञात बनाएको छ के छैन हेर्न भएन भने.
19:25 र उहाँले क्षमता को अभावमा पाप गर्नबाट छ भने, र त्यसपछि evildoing लागि मौका पाता, उहाँले दुष्ट गर्नेछ.
19:26 मानिस आफ्नो प्रदर्शनमा द्वारा मान्यता प्राप्त छ. तर जब तपाईं समझ मानिस पूरा, उहाँले आफ्नो अनुहार पहिचान छ.
19:27 शरीर को वस्त्र, र दाँत को हास्य, र एक मानिसको पैदल, उहाँको बारेमा एउटा रिपोर्ट दिन.
19:28 त्यहाँ एक contemptuous मानिसको रिसाएर एक झूट सुधार छ. र राम्रो साबित गर्दैन इन्साफ छ. तर त्यहाँ मौन छ जो एक छ, र नै बुद्धिमानी हो.
20:1 यो सच्याउनुभयो गर्न कति राम्रो छ, क्रोधित बन्न भन्दा, ताकि प्रार्थनामा स्वीकार गर्न सक्छ जसले उसलाई बाधा छैन.
20:2 एक नपुंसकको को कामवासना एक जवान प्रथम deflower हुनेछ;
20:3 यस्तै एउटा iniquitous न्याय दिन्छ हिंसा द्वारा जसले छ.
20:4 कसरी राम्रो यो छ, तपाईं सही गर्दा, contrition देखाउन! यसरी लागि, तपाईं जानबूझकर पाप उम्कन हुनेछ.
20:5 त्यहाँ एक छ जो, मौन बाँकी द्वारा, बुद्धिमानी हुन पाइन्छ. र त्यहाँ घृणित छ र जो जो अर्को बाहिर बोल्ने द्वारा provokes छ.
20:6 त्यहाँ एक छ जो, बोल्ने समझ भएको होइन, मौन रहन्छ. र त्यहाँ अर्को गर्ने मौन रह्छ छ, उचित समय थाह.
20:7 बुद्धिमान् मानिस उचित समय सम्म मौन रहने. तर एक अनियन्त्रित र imprudent व्यक्ति पटक पालन छैन.
20:8 जसले धेरै शब्दहरू प्रयोग आफ्नै प्राण घाउ हुनेछ. र जसले बेमनासिब आफूलाई मा अख्तियार घृणा गरिनेछ लिन्छ.
20:9 एक undisciplined मानिसको दुष्ट मा प्रगति छ, र त्यहाँ आफ्नो हानि गर्न उत्तेजित गर्दछ जो एक योजना छ.
20:10 छ जो उपयोगी वरदान हो, र त्यहाँ वरदान हो, जो लागि परिशोधन डबल.
20:11 त्यहाँ घमण्ड गराई खातिर एक हानि छ, र lowliness आफ्नो टाउको माथि उचाल्न गर्ने एक छ.
20:12 त्यहाँ एउटा सानो मूल्य लागि धेरै किन्छ गर्ने छ, र जो फिर्ता sevenfold यो दिन्छिन्.
20:13 शब्दमा बुद्धिमानी जो कोहीले आफूलाई प्रेम बनाउँछ. तर मूर्ख को गौरव टाढा हालिएको गरिनेछ.
20:14 को मूर्ख बाट उपहार तपाईं लाभ उठाउन छैन. आफ्नो Gaze लागि विभाजित छ, sevenfold.
20:15 उहाँले सानो दिनेछु, र निन्दाले धेरै. र आफ्नो मुख खोल्ने एक जल ज्वाला जस्तै छ.
20:16 त्यहाँ आज बढाउँछ जसले एक छ र भोलि परिशोधन माग. यस्तो यो रूपमा एक मानिस घृणित छ.
20:17 मूर्ख मानिसले एक मित्र हुनेछैन, र उहाँको राम्रो कामहरू लागि कुनै धन्यवाद हुनेछ.
20:18 आफ्नो रोटी खान गर्नेहरूका लागि गलत जिब्रो छ. अक्सर कसरी र कति ती उहाँलाई गर्ने खिसी गर्नेछन् छन्!
20:19 उहाँले possesses के को लागि, उहाँले सही समझ संग वितरण गर्दैन. र उहाँले अधिकार गर्छ के छैन संग पनि त्यस्तै कार्य.
20:20 गलत जिब्रो को भौचर फुटपाथ मा पतन व्यक्तिलाई जस्तै छ. दुष्ट चाँडै पुग्नु हुनेछ लागि यस्तो गिरावट.
20:21 एक disagreeable मानिस व्यर्थ छोटो कथा जस्तै छ; यो undisciplined को मुखमा निरन्तर हुनेछ.
20:22 एक मूर्ख को मुख बाट दृष्टान्त अस्वीकार गरिनेछ. उहाँले उचित समयमा यो कुरा गर्दैन लागि.
20:23 त्यहाँ गरिबी द्वारा पाप गर्नबाट छ जो एक छ, र आफ्नो बाँकी मा, उहाँले vexed गरिनेछ.
20:24 वहाँ नाटक को आफ्नै प्राण गुमाउन गर्ने छ, र उहाँले imprudence एउटा उदाहरण गरेर गुमाउनु हुनेछ. अर्को स्वीकृति खोजेर, उहाँले नाश.
20:25 त्यहाँ एक छ जो, के अन्य गरेको Think खातिर, मित्र एक प्रतिज्ञा, र त त्यो तिनलाई कुनै कारण लागि शत्रुको रूपमा कमाइहाले.
20:26 झूट एक मानिस एक दुष्ट निरादर छ, र अझै झूट अनुशासन बिना ती को मुख मा निरन्तर हुनेछ.
20:27 एक चोर निरन्तर निहित मानिस भन्दा राम्रो छ. तर ती दुवै perdition अधिकार पाउनेछन्.
20:28 झूट मानिसहरूको बानी सम्मान बिना छन्. र आफ्नो लाज ceasing बिना छ.
20:29 बुद्धिमान् मानिस आफ्नै शब्दहरू द्वारा आफूलाई फाइदा, र चतुर मानिस शक्तिशाली खुसी हुनेछ.
20:30 आफ्नो भूमि अन्नको एक भंडार उच्च उठाउनु हुनेछ जसले काम गर्छ. र जसले काम गर्छ न्याय आफूलाई उच्च खडा गरिनेछ. यद्यपि साँच्चै, जसले प्रसन्न शक्तिशाली अन्याय उपचार उम्कन हुनेछ.
20:31 प्रस्तुत र उपहार न्यायाधीशहरूले आँखा अन्धा, र उनको मुख चूप, तिनीहरूलाई अलग सुधार को आफ्नो कार्य देखि खोल्दै.
20:32 बुद्धि लुकेको, र नदेखिने कदर: के को प्रयोग यी त छ?
20:33 आफ्नो मूर्खता लुकाउँछ जसले आफ्नो बुद्धि लुकाउँछ मानिस भन्दा राम्रो छ.
21:1 छोरा, तपाईं पाप गरेका छन्? तिमी अगाडी पाप थप्न हुँदैन. त्यसपछि पनि, आफ्नो पूर्व पापको लागि, त्यसैले तिनीहरू तपाईं क्षमा हुन सक्छ कि प्रार्थना.
21:2 पाप भाग्न, सर्पको अनुहार देखि भने. तपाईंले तिनीहरूलाई भेट्नुपर्छ यदि लागि, तिनीहरूले तिमीहरू पकड हुनेछ.
21:3 आफ्नो दाँत सिंह को दाँत जस्तै हो, मानिसहरूको प्राण गर्न मृत्यु ल्याउन.
21:4 सबै iniquity दुई-edged भाला जस्तै छ; त्यहाँ आफ्नो घाउ कुनै निको छ.
21:5 निन्दाले र चोट स्रोतहरू बेकारी गर्नेछ. र अति धनी छ कि एक घर गर्व मार्फत शक्तिहीन हुनेछ. यसरी, को घमण्डी को स्रोतहरू eradicated गरिनेछ.
21:6 को pauper मुख बाट अन्तरबिन्तीले परमेश्वरको कान सबै तरिका पुग्नेछ, र न्याय छिटो उहाँलाई आउनेछ.
21:7 जसले सुधार घृणा पापी को चरणमा हिड्ने छ. तर जसले परमेश्वरको डर आफ्नो हृदय भित्र रूपान्तरण हुनेछ.
21:8 एक बोल्ड जिब्रो को माध्यम द्वारा शक्ति छ जसले टाढा बाट ज्ञात हुनेछ. तर समझ मानिस उहाँलाई गत पर्ची गर्न थाह.
21:9 जसले आफ्नो घर बनाउछ, अर्को द्वारा लागि भुक्तानी, हिउँदमा आफ्नो भवन पत्थर बटोरता गर्ने जस्तो छ.
21:10 stubble अप ढेर जस्तै पापी सभाघरमा छ; तिनीहरूलाई दुवै को अन्त को लागि एक बलिरहेको आगो छ.
21:11 पापी बाटो छापिएको र स्तर, र आफ्नो अन्त मा नरक र अन्धकार र punishments छ.
21:12 जसले न्याय बताउँछ यो समझ प्राप्त गर्नेछन्.
21:13 परमेश्वरको डर को Consummation बुद्धि र समझ छ.
21:14 एक होइन भलाइ निर्देशन स्वीकार्न छैन मा बुद्धिमानी गर्ने.
21:15 अब दुष्ट मा abounds जो एक बुद्धि छ. जहाँ तीता छ तर त्यहाँ कुनै समझ छ.
21:16 बुद्धिमानको को ज्ञान एक बाढी जस्तै वृद्धि हुनेछ, र आफ्नो सल्लाह जीवनको एक फोहरा जस्तै जारी हुनेछ.
21:17 को मूर्ख को दिल एक भाँचिएको पोत जस्तै छ, यसलाई कुनै पनि बुद्धि पकड छैन.
21:18 एक ज्ञान मानिस कुनै पनि बुद्धिमानी शब्द प्रशंसा हुनेछ उहाँले सुन्नुहुन्छ, र उहाँले यसलाई लागू हुनेछ. सेल्फ-indulgent मानिस यो सुने छ, र यो उहाँलाई दुःखी, र त त्यो यो आफ्नो फिर्ता पछि casts.
21:19 को मूर्ख को कुरा एक एक यात्रामा बोझ जस्तै छ. तर समझ को ओठ मा, अनुग्रह पाउन हुनेछ.
21:20 को चतुर मुख मण्डली मा खोजे छ, र तिनीहरूले हृदयमा आफ्नो शब्दहरू विचार गर्नेछौं.
21:21 विनाश गरिएको छ जो एक घर जस्तै, त्यसैले मूर्ख गर्न बुद्धि छ. र मूर्ख को ज्ञान अर्थहीन शब्द जस्तै छ.
21:22 को बेहोस गर्न सिद्धान्त खुट्टा मा fetters जस्तै छ, र दाहिने हात मा चेन जस्तै.
21:23 मूर्ख मानिसले हास्य मा आफ्नो स्वर लिफ्टहरु. तर बुद्धिमान् मानिसलाई छैन पनि चुपचाप आफैले हाँस्न हुनेछ.
21:24 सिद्धान्त एक सुन आभूषण जस्तै चतुर छ, र सही हात मा एक armband जस्तै.
21:25 सजिलै आफ्नो छिमेकीको घर मा मूर्ख कदम खुट्टा. तर एक अनुभवी मानिस शक्तिशाली उपस्थिति मा चिन्तित हुनेछ.
21:26 एक बेहोस मानिस घरमा एक विन्डो मार्फत हेर्न हुनेछ. तर राम्ररी सिकाइएको छ मानिस बाहिर खडा हुनेछ.
21:27 एक मानिस ढोका मार्फत सुन्न लागि यो मूर्खता हो. र चतुर मानिस यस निरादर मा दुखी हुनेछ.
21:28 को imprudent को ओठ बेहोस कुराहरू वर्णन गर्नेछ. तर चतुर शब्दहरू एक ब्यालेन्स मा वजन गरिनेछ.
21:29 को मूर्ख हृदय उनको मुख मा हो. तर बुद्धिमानी को मुख आफ्नो हृदयले छन्.
21:30 जब impious शैतानको सराप्न, तिनीहरूले आफ्नै प्राण सराप्न.
21:31 जो आरोप लेकानेखुसीगर्छ ती आफ्नै प्राण गंदा, र तिनीहरू सबै द्वारा घृणा गरिनेछ. र जसले तिनीहरूलाई abides घृणित हुनेछ. यो मौन र समझ मानिस सम्मान गरिनेछ.
22:1 अल्छे मानिस फोहोर पत्थर pelted छ, र सबै आफ्नो तिरस्कार बारेमा बोल्न हुनेछ.
22:2 अल्छे मानिस बैलों को गोबर संग pelted छ, र उसलाई स्पर्श गर्ने सबै आफ्नो हात बन्द माझ्छु हुनेछ.
22:3 एक undisciplined छोरा आफ्नो बुबाको लाज छ, तर एक undisciplined छोरी आफ्नो क्षरण हुनेछ.
22:4 चतुर छोरी पतिको गर्न उत्तराधिकार ल्याउँछ. तर त्यो जसले उहाँलाई लाज एक निरादर हुनेछ गराउँछ उनको गर्भधारण गर्ने.
22:5 बोल्ड छ जो त्यो उनको बुबा र पति shames, र त्यो impious कम आपत्तिजनक छैन. त्यो दुवै द्वारा अनादर मा आयोजित गरिनेछ लागि.
22:6 एक असामयिक व्याख्या शोक समय मा संगीत जस्तै छ. तर तेज सुधार र बुद्धि को सिद्धान्त कहिल्यै समसामयिक छन्.
22:7 जसले पनि मूर्ख सिकाउँछ जो एक भाँचिएको पट सँगै विरोधी जंग कसैले जस्तै छ.
22:8 जसले सुनिरहेको छ नगर्ने एक शब्द बताउँछन् अचानक एक गहिरो निद्राबाट एक सुत्ने व्यक्ति जगाउँछ व्यक्तिलाई जस्तै छ.
22:9 जसले पनि अर्थहीन गर्न बुद्धि बताउँछन् एक सुत्ने व्यक्ति बोल्दै जस्तै छ. र व्याख्या को अन्त मा, उहाँ भन्नुहुन्छ: "यो को हो?"
22:10 मरेका भन्दा रुन्छ, आफ्नो प्रकाश लागि असफल भएको छ. र मूर्ख भन्दा रुन्छ, उहाँको समझ लागि असफल भएको छ.
22:11 रुन्छ मरेका भन्दा मात्र एक सानो, लागि उहाँले बाँकी छ.
22:12 तर एक दुष्ट मूर्ख दुष्ट जीवन मृत्यु भन्दा पनि बदतर छ.
22:13 मरेका लागि शोक सात दिन छ; तर मूर्ख र impious लागि, यसलाई आफ्नो जीवनको सबै दिन छ.
22:14 तपाईं मूर्ख संग लम्बाइ मा कुरा हुँदैन, र तपाईं बेहोस जाने हुँदैन.
22:15 उहाँलाई आफूलाई राख्न, त्यसैले तपाईं समस्या नहुन सक्छ कि, र यति भनेर आफ्नो पाप द्वारा प्रदूषित गरिनेछ.
22:16 उहाँलाई त्यागेर, र तपाईं आराम पाउनुहुनेछ, र तपाईं आफ्नो मूर्खता द्वारा निरुत्साहित गरिनेछ.
22:17 नेतृत्व भन्दा भारी के हो? र उहाँले अरू के भनिन्छ तर मूर्ख गर्न सकिन्छ?
22:18 बालुवा, र नुन, र फलामको वजन एक imprudent मानिस भन्दा सहन प्रत्येक सजिलो हो, जो मूर्ख र impious दुवै छ.
22:19 एक भवन जग सँगै strapped काठ को एक बन्डल छैन loosened गरिनेछ. र यस्तै विचारशील सल्लाह बलियो गरिएको हृदय.
22:20 एक को विचार समझ डर कुनै पनि अवस्थामा छैन दूषित गर्ने छ हुन.
22:21 बस एक उच्च स्थानमा chaff रूपमा, वा पत्थर बिना मोर्टार को बनाइएको पर्खाल भित्र सेट, हावा को अनुहार विरुद्ध जारी छैन,
22:22 त्यसैले पनि काँतर हृदय, र बेहोस को विचार, डर को forcefulness सामना छैन.
22:23 एक कायर मुटु बावजुद, को मूर्ख को विचार कुनै पनि अवस्था छैन डर हुनेछ; अहिलेसम्म न इच्छा एक परमेश्वरको आदेशहरू मा सधैं जारी गर्ने.
22:24 एक आँखा jabs जसले आँसु उत्पादन. र हृदय jabs जसले समझ उत्पादन.
22:25 चरालाई ढुङ्गाले फेंकता जसले टाढा तिनीहरूलाई ड्राइव गर्नेछन्. त्यसैले पनि, आफ्नो मित्र accuses जसले मित्रता घुल.
22:26 तर तपाईं एक मित्र विरुद्ध तरवार आएको छ भने, तपाईं निराश छैन गर्नुपर्छ; त्यहाँ फिर्ता तरिका हुन सक्छ.
22:27 तपाईं एक मित्र विरुद्ध कठोर मुख खुलेको यदि, तपाईं डराउनु पर्दैन; त्यहाँ एक मेलमिलाप हुन सक्छ. तर, यदि त्यहाँ आरोप हो, वा दुरुपयोग, वा अहङ्कारको, वा रहस्य प्रकट, वा deceitfulness देखि एक घाउ, यी सबै अवस्थामा, एक मित्र टाढा भाग्नेछ.
22:28 आफ्नो गरिबी मा साथीसँग विश्वसनीयता होल्ड, तपाईं पनि आफ्नो समृद्धिको आनन्दित हुन सक्छ भनेर.
22:29 आफ्नो कष्ट समयमा, वफादार रहने, तपाईं पनि आफ्नो सम्पत्तिको उहाँसँग हकदार हुन सक्छ भनेर.
22:30 बस एक ओवन देखि बाफ रूपमा, वा आगो देखि धुवाँ, एक ज्वाला अघि अप rises, त्यसैले पनि curses र अपमान र धम्की रक्तपात अघि खडा गर्न.
22:31 म एक मित्र अभिवादन गर्न लज्जित छैन, न त म आफ्नो अनुहार देखि आफैलाई लुकाउन पर्छ. र misfortunes उहाँलाई किनभने मलाई अधीन यदि, म सहन हुनेछ.
22:32 यो सुन्नुहुन्छ जो कोहीले उहाँको वरिपरि wary हुनेछ.
22:33 मेरो मुख लागि keeper प्रदान गर्नेछ, र मेरो ओठ माथि विश्वसनीय छाप, म किनभने तिनीहरूलाई पतन सक्छ भनेर, र यति भनेर मेरो जिब्रो मलाई नष्ट गर्दैन?
23:1 प्रभु, बुबा र मेरो जीवनको शासक: तपाईं आफ्नो सल्लाह मलाई त्याग्न सक्छ, न त तिनीहरूलाई द्वारा गिरावट मलाई अनुमति.
23:2 तिनीहरूले मेरो विचार भन्दा मेरो हृदयमा बुद्धि अनुशासन भन्दा scourges आयातित थियो. र तिनीहरूले ignorances मलाई छोडूँगा छैन, न त तिनीहरूले आफ्नै अपराध स्पष्ट बन्न अनुमति हुनेछ.
23:3 र तिनीहरूले मेरो ignorances वृद्धि भनेर अभिप्राय, र मेरो अपराध गुणन गर्न, र मेरो पाप प्रशस्त. र त म मेरो विरोधीहरू को दृष्टि पर्नु हुनेछ, र मेरो शत्रु द्वारा रमाए गर्न.
23:4 प्रभु, बुबा र मेरो जीवन परमेश्वरको: तपाईं आफ्नो योजना मलाई त्याग्न सक्छ.
23:5 मेरो आँखाको haughtiness मलाई नछोड. र मलाई सबै इच्छा हटाउनु.
23:6 मलाई देखि शरीर को इच्छा लिन, र यौन इच्छा मेरो पकड लिन अनुमति छैन, र मलाई भित्र एउटा irreverent र बेहोस मन अनुमति छैन.
23:7 को ध्वनि: मेरो मुखको सिद्धान्त सुन्न. पालन ​​गर्ने यो ओठ द्वारा नष्ट छैन गर्नेहरूका लागि, न त दुष्ट कामहरू मा scandalized गर्न.
23:8 पापी आफ्नै खालीपनको द्वारा आयोजित छ. र घमण्डी र दुष्ट बोल्ने ती यी कुराहरू द्वारा scandalized गरिनेछ.
23:9 आफ्नो मुख शपथ ग्रहण अवसरहरूमा शपथ खाएको गर्न accustomed बन्न अनुमति छैन. यस लागि, त्यहाँ धेरै पासो हो.
23:10 साँच्चै, परमेश्वरको नामकरण आफ्नो मुख मा निरन्तर गर्न अनुमति छैन, र साधारण पवित्र जनहरूको नाम भने व्यवहार छैन. लागि तिनीहरूलाई द्वारा सजाय उम्कन छैन.
23:11 सिर्फ एक सेवक रूपमा, निरन्तर केरकार, एक चोट बिना हुनेछैन, त्यसैले अवसरहरूमा शपथ खाएको swears र परमेश्वरको नाम लिन्छ सबैलाई पापबाट सम्पूर्ण निःशुल्क हुनेछैन.
23:12 धेरै अवसरहरूमा शपथ खाएको swears मानिस iniquity भरिएको हुनेछ, र scourges आफ्नो घर देखि विदा छैन.
23:13 र यो पूरा गर्न उहाँले असफल भएमा, आफ्नो अपमान उसलाई हुनेछ, र उहाँले pretends यदि त्यो पूरा, उहाँले गुणा offends.
23:14 र उहाँले insincerely सपथमा swears यदि, उहाँले जायज हुनेछ. आफ्नो घर लागि उहाँलाई लागि प्रतिकार भरिएको हुनेछ.
23:15 मृत्युको जो कुरा अर्को प्रकारको अझै छ; गर्छन् यसलाई याकूबका उत्तराधिकार मा फेला.
23:16 यी सबै कुराहरू दयालु टाढा लगिनेछ लागि, र तिनीहरूले अपराध मा wallow छैन.
23:17 आफ्नो मुख undisciplined भाषण गर्न accustomed बन्न अनुमति छैन. यस लागि, त्यहाँ शब्दहरू पाप हो.
23:18 जब तपाईं ठूलो मानिसहरूको बीचमा बस्न, आफ्नो बाबु र आमा सम्झना.
23:19 अन्यथा, भगवान तपाईं भूल हुन सक्छ, तपाईं आफ्नो दृष्टि मा हुँदा, र त तपाईं बारम्बार हाँसो हुनेछ र निरादर ग्रस्त थियो, र तपाईं कहिल्यै जन्म भएको थियो भन्ने इच्छा हुन सक्छ, र तपाईं आफ्नो Nativity दिन सराप्न सक्छ.
23:20 निर्देशन स्वीकार्न छैन लज्जाजनक शब्दहरू accustomed छ मानिस, आफ्नो जीवनको सबै दिन.
23:21 व्यक्ति दुई प्रकारका पाप मा प्रशस्त, र तेस्रो क्रोध र perdition भन्छन्.
23:22 एक इच्छुक प्राण एक जल आगो जस्तै छ, यो निभाउन गरिनेछ, सम्म यो कुरा devours.
23:23 र आफ्नो शरीर को इच्छा दुष्ट छ मानिस उहाँले आगो kindled नभएसम्म desist छैन.
23:24 व्यभिचार एक मानिसलाई, सबै रोटी मिठो छ; उहाँले हुनेछ अपराधको को छैन टायर, धेरै अन्त गर्न.
23:25 आफ्नै ओछ्यानमा transgresses गर्ने हरेक मानिस आफ्नै प्राण लागि घृणा छ. र त त्यो भन्छ: "मलाई कसले देख्न सक्छ?
23:26 अन्धकार मलाई घेरने, र पर्खालको मलाई वरिपरि बार लाउनु, र कुनै एक मेरो दृष्टि परिहाल्छ. म जसलाई डर गर्नुपर्छ? सबैभन्दा उच्च मेरो अपराध सम्झना छैन। "
23:27 र तिनले परमेश्वरको आँखा सबै कुरा देख्नुहुन्छ भनेर बुझ्न छैन. यस्तो यो रूपमा एक मानिस भित्र डर लागि उहाँलाई दुवै परमेश्वरको डर र परमेश्वरको डर गर्नेहरूलाई मानिसहरूको आँखा बाट टाढा ड्राइव.
23:28 र उहाँले प्रभुको आँखा सूर्य भन्दा धेरै उज्जवल छन् कि छैन स्वीकार गर्दैन, हेर्ने मानिसहरूको सबै मार्गमा भन्दा राखन, पनि पातालमा को गहिराइमा गर्न, र मानिसहरूको हृदय मा नरहन, पनि सबैभन्दा लुकेको भागहरु गर्न.
23:29 सबै कुरा को लागि, पहिले तिनीहरूले सिर्जना, प्रभु परमेश्वरको चिनिन्थे. र पनि उनको पूरा गरेपछि, उहाँले सबै कुरा beholds.
23:30 यो मानिस शहर को सडकमा सजाय हुनेछ, र त्यो एक जवान घोडा जस्तै खेदे गरिनेछ. र एक ठाउँमा उहाँले शक गर्दैन, उहाँले कब्जा गरिनेछ.
23:31 र किनभने उहाँले प्रभुको डर बुझेनन्, उहाँले सबै मानिसहरूका सामु निरादर हुनेछ,
23:32 हरेक महिला हुनेछ, पनि, जो उनको पति त्याग्नुहुन्न र अर्को मानिसलाई विवाह गरेर एक उत्तराधिकार स्थापना.
23:33 पहिलो लागि, त्यो सबैभन्दा उच्च को व्यवस्था को विश्वास नगर्ने थियो. दोस्रो, त्यो उनको पति विरुद्ध आहत. तेस्रो, त्यो व्यभिचार द्वारा fornicated, र यति उनको बच्चाहरु अर्को मानिस द्वारा स्थापित.
23:34 यो महिला सम्मेलन मा नेतृत्व गरिनेछ, र त्यो उनको बच्चाहरु द्वारा मा stared गरिनेछ.
23:35 उनको बच्चाहरु मूल लिन छैन, र उनको शाखा फल उत्पादन छैन.
23:36 त्यो एक श्राप रूपमा उनको स्मृति पछि छोड्न हुनेछ, र उनको infamy टाढा छैन सखाप हुनेछ.
23:37 र त्यागेका छन् गर्नेहरूलाई त्यहाँ केही परमेश्वरको डर भन्दा राम्रो हो भनी स्वीकार गर्नेछ, र प्रभुको आज्ञा आदर गर्न भन्दा sweeter केही छ कि.
23:38 यो प्रभु पालना गर्न ठूलो महिमा छ. दिन को लम्बाइ लागि उहाँलाई प्राप्त हुनेछ.
24:1 बुद्धि आफ्नै मन प्रशंसा हुनेछ, र त्यो परमेश्वरले सम्मान गरिनेछ, र त्यो उनको मान्छे को बीचमा महिमा हुनेछ.
24:2 र त्यो सबैभन्दा उच्च को चर्चमा उनको मुख खोल्न हुनेछ, र त्यो आफ्नो सद्गुण को दृष्टि मा महिमा हुनेछ.
24:3 र आफ्नै मान्छे को बीचमा, त्यो उच्च गरिनेछ. र त्यो पवित्र विधानसभा द्वारा प्रशंसा हुनेछ.
24:4 र त्यो चुन्नु को भीड भित्र प्रशंसा हुनेछ. र त्यो अनमोल बीच आशिष् गरिनेछ. र त्यो भन्न हुनेछ:
24:5 "सबैभन्दा उच्च मुख बाट म गयो, पहिलो-जन्म सबै प्राणीहरू पहिले जस्तो.
24:6 म एक हर कदममा प्रकाश स्वर्गमा उत्पन्न गर्न कारण. र म एक क्लाउड जस्तै सबै पृथ्वी ढाकिएको.
24:7 म उच्चतम ठाउँमा बस्ने, र मेरो सिंहासन बादलले को खाँबो छ.
24:8 म एक्लै स्वर्ग को क्षेत्रीय encompassed छ, र पातालमा को गहिराइमा गर्न penetrated छ, र समुद्रको छालहरू मा हिंडे छ,
24:9 र सारा पृथ्वीमा उभिए छ. र हरेक मान्छे बीच,
24:10 र हरेक जातिलाई मा, म मुद्दहरुलाई आयोजित छन्.
24:11 र सद्गुण द्वारा, म सबै को मन मा tread छ, ठूलो र नीच. र म ती सबै मेरो बाँकी खोजे छन्. र म जारी हुनेछ, प्रभुको सम्पत्तिको रूपमा.
24:12 त्यसपछि सबै कुराको सृष्टिकर्ता निर्देशन र मलाई कुरा. र मलाई सिर्जना एक मेरो बासस्थान मा विश्राम.
24:13 अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो: 'आफ्नो बासस्थान याकूबसित होस्, र आफ्नो उत्तराधिकार इस्राएलको रहोस्, लागि मेरो चुन्नु बीच मूल लिन पर्छ। '
24:14 सुरुदेखि, र संसारको अघि, म सिर्जना गरिएको थियो. र पनि भविष्यमा संसारमा निम्ति, म अवस्थित गर्न रोकिंदैन हुनेछ. म पवित्र Habitation उहाँलाई अघि ministered छ लागि.
24:15 र यसरी, म सियोनमा मा स्थापित भएको थियो. र त्यसै, पवित्र शहर मा, म बाँकी फेला. र मेरो अधिकार यरूशलेममा थियो.
24:16 र म एक आदरणीय मान्छे बीच मूल लिए, मेरो परमेश्वरको भाग भित्र, आफ्नो सम्पत्तिको भित्र. र यति मेरो Abode को सन्तहरू को पूर्ण विधानसभा छ.
24:17 म लेबनानको एक देवदार जस्ता उच्च र सियोन डाँडामा एक सरू रुचि थियो.
24:18 म Kadesh र यरीहो मा एक गुलाब झाडी जस्तै ताडको रूख जस्तै उच्च थियो.
24:19 म फाँटमा एउटा सुन्दर जैतून रूख जस्तै उच्च थियो, र एक विस्तृत सडक साथ पानी छेउमा Sycamore रूख जस्तै.
24:20 म दालचिनी वा Balsam जस्तै एक खुशबूदार खुशबू बन्द दिनुभयो. म सबै भन्दा राम्रो myrrh जस्तै मीठो गन्ध उत्पादन.
24:21 र म मीठो गम मेरो बासस्थान सुगन्धित, र खुशबूदार राल, र फूल पत्रदल, र घ्यु, साथै लेबनान बाट उत्कृष्ट देवदार रूपमा. र मेरो खुशबू undiluted Balsam जस्तै छ.
24:22 म एक terebinth रूख जस्तै मेरो शाखा विस्तार गरेको छ, र मेरो शाखा सम्मान र अनुग्रहको छन्.
24:23 को दाखको बोट जस्तै, म एक मिठाई खुशबू को फल जन्म छन्. र मेरो फूल सम्मान र निष्ठा को फल हो.
24:24 म प्रेमको सौन्दर्य आमा हुँ, र भयका, र ज्ञान को, पवित्र आशा को र.
24:25 बाटो को र सत्य सबै अनुग्रह मलाई छ. जीवनको र सद्गुण सबै आशा मलाई छ.
24:26 मलाई तिर यात्रा, मलाई इच्छा सबै तपाईं, र मेरो बाली द्वारा भरिएको.
24:27 मेरो आत्मा लागि मह भन्दा sweeter छ, र मेरो उत्तराधिकार मह र महचाका भन्दा राम्रो छ.
24:28 मेरो स्मृति सबै उमेरका को पुस्तामा लागि हो.
24:29 जसले खपत मलाई भोक अझै पनि हुनेछ. र जसले मलाई पिउने अझै पनि तिर्खा हुनेछ.
24:30 मलाई हैरान छैन गर्न जसले सुन्छ. र जसले प्रेरित मलाई हुनेछ पाप.
24:31 जसले मलाई अनन्त जीवन हुनेछ elucidates। "
24:32 यो सबै जीवन को एउटा किताब छ, र सबैभन्दा उच्च एक करार, र सत्यको एक स्वीकृति.
24:33 मोशाले न्याय को आदेशहरू द्वारा व्यवस्था आज्ञा, र याकूबका घरमा एक उत्तराधिकार, र इस्राएललाई प्रतिज्ञा.
24:34 भगवान दाऊदले आफ्नो सेवक रूपमा नियुक्त, उहाँलाई सबैभन्दा शक्तिशाली राजा देखि जुटाउने क्रममा, जो सधैंभरि सम्मान को सिंहासन मा बस्थे.
24:35 यो बुद्धि पूरा गर्ने उहाँले छ, पहिलो दिनमा Phison नदी र दजला नदी जस्तै.
24:36 यो बुझाइ पूरा गर्ने उहाँले छ, नदी युफ्रेटिस जस्तै. यो बुझाइ वृद्धि गर्छ जसले छ, बाली काट्ने समयमा नदी जोर्डन जस्तै.
24:37 उहाँले प्रकाश जस्तै अनुशासन निस्कने पठाउँछ, र उहाँले पुराना समयमा नदी Gehon जस्तै निस्कने खडा.
24:38 उहाँले पहिलो उनको सिद्ध ज्ञान थियो, कमजोर एक उनको खोजी छैन लागि.
24:39 उनको विचार लागि समुद्र जस्तै प्रशस्त, र उनको योजना ठूलो पातालमा जस्तै प्रशस्त.
24:40 "म, बुद्धि, निस्कने नदी हालिएको छ.
24:41 म विशाल पानी नदी गर्न प्रमुख एक खोला जस्तै हुँ. म एक नदी देखि बगिरहेको च्यानल जस्तै हुँ. र म एक जलसेतु जस्तै प्रमोदवनमा देखि गयो.
24:42 मैले भने: म plantings मेरो बगैचा सिंचाइ गर्नु हुनेछ, र म राम्ररी मेरो क्षेत्र को फल पानी हुनेछ.
24:43 अनि हेर, मेरो खोला overflowing भयो, र मेरो नदी समुद्र नजिक.
24:44 म सबै सिद्धान्त उजाला लागि, पहिलो प्रकाश जस्तै. र म सिद्धान्त घोषणा हुनेछ, पनि ती जो टाढा छन्.
24:45 म पृथ्वीका सबै तल्लो भागहरु पुग्नेछ, र म जो सो सबै मा हेर्न हुनेछ, र म प्रभुमा आशा गर्ने सबै उजाला हुनेछ.
24:46 अहिले पनि, म भविष्यवाणी जस्तै सिद्धान्त निस्कने खन्याउन. र पनि अब, म बुद्धि खोज्नेहरूलाई गर्न सिद्धान्त bequeath. र म आफ्नो progeny देखि बन्द छैन, पनि पवित्र समय निम्ति.
24:47 म एक्लै आफैलाई लागि labored छ कसरी देख्न, तर सबै जो खोजिरहेका छन् सत्यको लागि!"
25:1 मेरो आत्मा तीन कुराहरू खुसी छ; यी परमेश्वर र मानिसहरूको दृष्टि मा स्वीकृत छन्:
25:2 भाइहरूको अनुरूप, र छिमेकी प्रेम, र एक पति र पत्नी सँगै राम्रो सहमत.
25:3 मेरो प्राण कुराहरू तीन प्रकारका घृणा; र म आफ्नो प्राण भन्दा निकै दुःखित छु:
25:4 एक घमण्डी pauper, एक धनी झूटो, एक मूर्ख र बेहोस प्राचीन.
25:5 तपाईं आफ्नो युवावस्थामा प्राप्त छैन भन्ने कुरा, तपाईं कसरी आफ्नो पुरानो युगमा तिनीहरूलाई पाउनुहुनेछ?
25:6 यो न्याय गर्न एक खैरो टाउको लागि कति सुन्दर छ, र को लागि एल्डरहरूले सल्लाह जान्न!
25:7 यो बुद्धि छ बर्ष निम्ति कति सुन्दर छ, र सम्मान गर्दै गर्नेहरूलाई समझ र सल्लाह गर्न को लागि!
25:8 ठूलो अनुभव वृद्ध मुकुट छ, र परमेश्वरको डर आफ्नो महिमा छ.
25:9 म नौ कुराहरू म्याग्निफाइन्ड छ, हृदय द्वारा अनदेखी; र एक दशौं, म मेरो जिब्रो संग मानिसहरूलाई घोषणा हुनेछ:
25:10 आफ्ना छोराछोरीलाई आनन्द पाता मानिस, र बसोबास गर्ने एक आफ्ना शत्रुलाई को अनडू गर्दै हेर्न.
25:11 अनमोल बुद्धिमानी पत्नी संग बसोबास गर्ने उहाँले छ, र उहाँले आफ्नो जिब्रो संग उतर छैन जो, र उहाँले गर्ने आफूलाई ती अयोग्य सेवा छैन.
25:12 अनमोल साँचो मित्र पाता जसले छ, र उहाँले गर्ने एक ध्यान कान न्याय वर्णन.
25:13 उहाँले बुद्धि र ज्ञान पाता गर्ने कसरी ठूलो छ! तर त्यहाँ प्रभु डर जो माथि कुनै छ.
25:14 परमेश्वरको डर सबै कुराहरू माथि नै सेट छ.
25:15 अनमोल जसलाई यो परमेश्वरको डर छ दिइएको छ मानिस छ. यसलाई धारण गर्ने उहाँले, जसलाई उहाँले तुलना गर्न सकिन्छ गर्न?
25:16 परमेश्वरको डर उहाँको प्रेम को शुरुवात छ; र विश्वास को शुरुवात नै गर्न नजिकबाट सामेल गरिएको छ.
25:17 हृदय को दुःख हरेक घाउ छ. र एक पत्नी दुष्टताको हरेक अरुको अहित गर्ने इच्छा छ.
25:18 र एक मानिस कुनै पनि घाउ चयन गर्नेछ, तर हृदयको घाउ,
25:19 र कुनै पनि दुष्टताको, तर एक पत्नी दुष्टताको,
25:20 र कुनै पनि अवरोध, तर ती को अवरोध गर्ने उहाँलाई घृणा,
25:21 र कुनै पनि vindication, तर आफ्नो शत्रुहरूको vindication.
25:22 त्यहाँ सर्पको टाउको भन्दा कुनै टाउको बुरा छ,
25:23 र एक पत्नी को रिस माथि कुनै रीस छ. यो एक सिंह वा ड्रागन संग पालन गर्न थप राजी हुनेछ, एक दुष्ट पत्नी संग बाँच्न भन्दा.
25:24 एक दुष्ट पत्नी उनको अनुहार परिवर्तन. र त्यो एक भालु जस्तै उनको countenance darkens. र लासको अगाडि उनले बोराका जस्तै देखाउने. उनको छिमेकी बीचमा,
25:25 पतिको कराहना, र यो सुनेर, उहाँले एक सानो sighs.
25:26 सबै अरुको अहित गर्ने इच्छा पत्नी को अरुको अहित गर्ने इच्छा तुलनामा छोटो छ. पापी भाग्य मा गिरावट गरौं उनको!
25:27 बालुवा माथि चढाई वृद्ध खुट्टा छ रूपमा, त्यसैले एक शान्त मानिस एउटा talkative पत्नी छ.
25:28 तपाईं एक महिलाको सौन्दर्य कृपा हुँदैन, र तपाईं उनको सौन्दर्य लागि पत्नी इच्छा हुँदैन.
25:29 को रिस र अनादर र पत्नी देखि लाज ठूलो हुन सक्छ.
25:30 पत्नी, त्यो मुद्दहरुलाई छ भने, पतिको विरुद्ध सेट गरिएको छ.
25:31 एक दुष्ट पत्नी हृदय debases, र अनुहार saddens, र घाउ हृदय.
25:32 पतिको खुसी नगर्ने एक पत्नी हातमा enfeebles र घुँडा कमजोर.
25:33 पाप को शुरुवात एक महिला आए; र उनको मार्फत, हामी सबै मर्न.
25:34 तपाईं आफ्नो पानी एउटा बाहिर निस्कन प्रदान गर्नुपर्छ, पनि एक सानो छैन; न त सीमा एक दुष्ट पत्नी लागि अनुमति दिनुपर्छ.
25:35 उनले आफ्नो हात मा हिंड्न हुनेछ भने, उनले आफ्नो शत्रुहरू को दृष्टि तपाईं confound हुनेछ.
25:36 उनको आफ्नो शरीर टाढा आंसू, त्यो निरन्तर तपाईं दुरुपयोग नत्र.
26:1 अनमोल असल पत्नी को पति हो. आफ्नो वर्ष को संख्या लागि दुगुना छ.
26:2 असल पत्नी पतिको रमाउनुहुन्छ, र त्यो शान्ति संग आफ्नो जीवनको वर्ष अप भर्न हुनेछ.
26:3 असल पत्नी राम्रो भाग हो. त्यो परमेश्वरको डर गर्नेहरूलाई को भाग दिइनेछ, एक मानिस जस्तै जो राम्रो कामहरू गरेको छ.
26:4 तर, धनी वा गरिब, राम्रो हृदयले, आफ्नो countenance सबै समय मा हँसिलो हुनेछ.
26:5 तीन कुराको, मेरो हृदय डर छ, र चौथो मा, मेरो अनुहार भय देखाइएको छ:
26:6 शहर गरेको एक अभियोग, र एक भीड भेला,
26:7 र एक छली गलत अभियोग. यी सबै मृत्यु भन्दा बढी Grievous छन्.
26:8 एक डाह पत्नी एक शोक र मनमा एक शोक छ.
26:9 एक जलन पत्नी मा, त्यहाँ जिब्रोको एक महामारीले छ, जो सबैको साथ संचार.
26:10 बैलों एक जुवा जस्तै सुनेपछि भइरहेको, त्यसैले पनि दुष्ट पत्नी छ. उनको पकड छ जसले एक बिच्छी को पकड लिएको छ जो जस्तो छ.
26:11 एक inebriated पत्नी ठूलो क्रोध छ. र उनको निरादर र indecency छैन ढाकिएको गरिनेछ.
26:12 एक पत्नी को व्यभिचार उनको आँखा को haughtiness द्वारा र उनको परेलिहरु ज्ञात हुनेछ.
26:13 त्यसैले उनको छोरी पनि टाढा बारी छैन भन्ने, एक सख्त हेर्ने राख्न; अन्यथा, मौका पाइएन भएको, त्यो आफु आनन्द सक्छ.
26:14 उनको आँखा को irreverence को wary हुन, र तपाईं त्यो तपाईं वेवास्ता सक्छ भने आश्चर्य हुँदैन.
26:15 एक तिर्खाएको यात्री जस्तै, त्यो फोहरा उनको मुख खोल्न हुनेछ, र त्यो नजिकैको हरेक पानी पिउन हुनेछ, र त्यो हरेक fencepost छेउमा बस्नेछ, र त्यो हरेक तीर उनको काँड राख्ने तरकस खुल्नेछ, सम्म त्यो मलिन हुन्छ.
26:16 एक ध्यान पत्नी अनुग्रह पतिको प्रसन्न हुनेछ, र उहाँको हड्डी fatten हुनेछ.
26:17 उनको अनुशासन परमेश्वरको वरदान हो.
26:18 यस्तो बुझाइ र शान्त पत्नी छ. त्यहाँ राम्ररी निर्देशन प्राण लागि कुनै प्रतिस्थापन छ लागि.
26:19 एक पवित्र र contrite पत्नी अनुग्रह मा अनुग्रह छ.
26:20 र पैसा को कुनै रकम आत्म-संयम एक प्राण को मूल्य बराबर छ.
26:21 सूर्य परमेश्वरको उच्च ठाउँमा दुनिया भर बढ्दो जस्तै, त्यसैले असल पत्नी को सौन्दर्य उनको घर को सिंगार छ.
26:22 एक पवित्र lampstand ऊपर चमक बत्ती जस्तै, त्यसैले जीवनको परिपक्व चरणमा एक अनुहार को सौन्दर्य छ.
26:23 चाँदी आधारमा मा सुनको स्तम्भ जस्तै, त्यसैले एक परिपक्व पत्नी को दृढ खुट्टा उनको खुट्टा को तलवों मा छन्.
26:24 एक ठोस चट्टान मा नींव अनन्त जस्तै, त्यसैले एक पवित्र पत्नी को हृदयमा परमेश्वरको आज्ञा हो.
26:25 दुई कुराहरू द्वारा, मेरो हृदय निकै saddened छ, र तेस्रो मा, रिस मलाई overwhelms:
26:26 किनभने दयनीय आवश्यकता को असफल युद्ध को एक मानिस, र समझ मानिस घृणा संग उपचार,
26:27 र जो न्याय देखि माथि पार जो कोहीले पाप गर्न. परमेश्वरले भाला लागि यस्तो एक तयार छ.
26:28 कुरा दुई प्रकारका कठिन र खतरनाक मलाई देखिन्थ्यो छ: व्यापारी सजिलै आफ्नो लापरवाही बाट मुक्त हुनेछन्, र एक पसलेलाई उहाँको ओठ पापको द्वारा जायज हुनेछ.
27:1 किनभने आवश्यकता को, धेरै पाप गरेका छन्. र जसले सार्थक हुन खोज्ने, आफ्नो आँखा averts.
27:2 adjoining पत्थर को बीचमा निश्चित एउटा पोस्ट जस्तै, त्यसैले पनि बिक्री र खरिद बीच wedged हुन पाप हुनेछ.
27:3 पाप एक जो पाप संग चोट गरिनेछ.
27:4 तपाईं प्रभुको डर गर्न steadfastly आफैलाई पकड छैन भने, आफ्नो घर चाँडै पतन हुनेछ.
27:5 एक चलनी जनाए गर्दा धूलो रहन्छ जसरी, त्यसैले मानिसको पक्कै आफ्नो विचार रहनेछ.
27:6 आगोको भट्टी को पटर गरेको जहाजहरु परीक्षण, र कष्ट को परीक्षण बस मानिसहरू परीक्षण.
27:7 एक रूख को छाँट्ने यसको फल प्रकट रूपमा, त्यसैले एक शब्द मानिसको हृदय मा विचार प्रकट गर्नुहुन्छ.
27:8 उहाँले बताइएको अघि तपाईंले एक मानिस प्रशंसा हुँदैन; यस्तो पुरुषहरु को परीक्षण छ.
27:9 तपाईं न्याय पछि लाग्न भने, तपाईं यसलाई प्राप्त गर्नेछन्. र तपाईं न्याय संग ढाकिएको गरिनेछ, सम्मान को एक लामो ओढ्ने संग रूपमा. र तपाईं न्याय रहनु हुनेछ. र न्याय तपाईं निरन्तर रक्षा गर्नेछ. र reckoning दिन, तपाईं बलियो जग पाउनुहुनेछ.
27:10 चरा आफ्नै प्रकारको गर्न बगालको. र सत्य यो अभ्यास गर्नेहरूलाई फर्केर.
27:11 सिंहको निरन्तर यसको शिकार लागि प्रतीक्षा मा निहित. त्यसैले पनि पाप काम iniquity गर्नेहरूका लागि पर्खाइ मा झूठ के.
27:12 एक पवित्र मानिस सूर्य जस्तै बुद्धि मा यथावत्. तर एक बेहोस मानिस चन्द्र जस्तै परिवर्तन.
27:13 को बेहोस बीचमा, उचित समय को लागि एक शब्द राख्ने. तर बीचमा निरन्तर हुन विचारशील भएकाहरूलाई.
27:14 पापी छलफलहरू घृणित छन्, र आफ्नो हँसी पाप आनन्द छ.
27:15 धेरै अवसरहरूमा शपथ खाएको swears कि बोली टाउको को कपाल सोझो खडा गर्नाले; र यसको irreverence कान कारण हुनेछ अवरुद्ध गर्न.
27:16 बगाउनुभएको रगतले यो घमण्डी को quarrels छ; र आफ्नो दुष्ट कुरा सुन्न Grievous छ.
27:17 जसले एक मित्र को गोप्य विश्वास खण्डन discloses; र उहाँले आफ्नो प्राण को लागि एक मित्र फेला हुनेछ.
27:18 आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम, र वफादार भई उहाँको एकताबद्ध हुन.
27:19 तर तपाईं आफ्नो रहस्य खुलासा भने, तपाईं उसलाई पछि जारी हुँदैन.
27:20 आफ्नो मित्र नष्ट मानिस जस्तै, त्यसैले पनि उहाँले आफ्नो छिमेकीलाई मित्रता नाश गर्ने छ.
27:21 र कसैले जस्तै आफ्नो हात बाट चरा जारी, तपाईं आफ्नो छिमेकीलाई छोडेर यति छ, र तपाईं उसलाई फेरि प्राप्त हुनेछ.
27:22 तपाईं उसलाई अब खोज्नुपर्छ, लागि उहाँले टाढा अब; उहाँले पासो देखि एक roe-मृग जस्तै भागे छ. आफ्नो प्राण लागि घाइते गरिएको छ.
27:23 तपाईं अब आफ्नो घाउ बाँध्न सक्षम हुनेछ. त्यहाँ सराप देखि एक मेलमिलाप हुन सक्छ.
27:24 तर एक मित्र को रहस्य खुलासा गर्न एक दुखी प्राण को आशाहीन कार्य हो.
27:25 आँखा संग winks गर्ने एक iniquity fabricates, र कुनै एक उहाँलाई अलग डाली हुनेछ.
27:26 आफ्नो आँखाको दृष्टि मा, उहाँले आफ्नो मुख sweeten हुनेछ, र उहाँले आफ्नो कुरा पराउँछु हुनेछ. तर धेरै अन्त मा, उहाँले आफ्नो मुख pervert हुनेछ, र उहाँले आफ्नै शब्दमा देखि एक घोटाले प्रस्ताव गर्नेछ.
27:27 म धेरै कुरा घृणा, तर म त्यो गरेको छ रूपमा गरेको छैन, र प्रभु उहाँलाई घृणा गर्नेछन्.
27:28 जसले सिधा माथि एउटा ढुङ्गा फेंकता यसलाई आफ्नै टाउको मा पतन कि पाउनुहुनेछ. र एक छली घाउ को छली घाउ फर्केर.
27:29 र जसले एक पिट digs यो फस्न हुनेछ. र जसले पदों आफ्नो छिमेकीलाई विरुद्ध पत्थर यो भन्दा चुक्छौं हुनेछ. र जसले कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग अर्को लागि पासो यसलाई द्वारा नष्ट हुनेछ.
27:30 एक दुष्ट योजना यो उसलाई फिर्ता रोल भनेर जसले गति मा सेट पाउनुहुनेछ, र उहाँले जो दिशा बाट यो पुग्नु हुनेछ थाहा छैन.
27:31 खिसी र खिसी गर्ने घमण्डी को हो, र बदला तिनीहरूलाई लागि प्रतीक्षा मा झूठ हुनेछ, सिंह जस्तै.
27:32 जसले यो पतनको बस पासो मा नष्ट हुनेछ उठाउँछ, तिनीहरूले मर्न अघि र शोक तिनीहरूलाई उपभोग गर्नेछ.
27:33 रिस र उतेजना दुवै abominable छन्, र पापी मानिस तिनीहरूलाई द्वारा आयोजित गरिनेछ.
28:1 जसले प्रभु देखि बदला पाउनुहुनेछ बदला लागि इच्छा, र उहाँले पक्कै पनि आफ्नो पाप गर्न ध्यान हुनेछ.
28:2 आफ्नो छिमेकीलाई क्षमा, उहाँले तपाईंलाई हानि छ भने, र प्रार्थना गर्दा त आफ्नो पापको तपाईं क्षमा गरिनेछ.
28:3 एक मानिस अर्को मानिसको विरुद्धमा क्रोध गर्ने धारण, र त्यो त परमेश्वरले उपाय खोज्न गर्छ?
28:4 उहाँले जस्तै मानिस कुनै कृपा छ, र त्यो त आफ्नै पापको लागि बिन्ती गर्छ?
28:5 शरीर तर छ जसले रिस गर्ने धारण, र त्यो त परमेश्वरको क्षमा अनुरोध गर्छ? कसले यसरी आफ्नो पापको लागि क्षमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
28:6 आफ्नो धेरै अन्त सम्झना, र द्वेषलाई बन्द हुनु गरौं.
28:7 भ्रष्टाचार र मृत्यु को लागि उहाँको आज्ञा भन्दा निलम्बित छन्.
28:8 परमेश्वरको डर सम्झना, र आफ्नो छिमेकीलाई रिसाए हुन छैन.
28:9 सबैभन्दा उच्च को करार सम्झना, र आफ्नो छिमेकीलाई को नजान्ने अपराध बेवास्ता.
28:10 कलह नगर्न, र तपाईं आफ्नो पाप बढ्छ हुनेछ.
28:11 को लागि एक बिरामी स्वभावका मानिस द्वन्द्व enflames, र एक पापी मानिसले आफ्नो मित्र समस्याहरूको, र उहाँले शान्ति गर्नेहरूलाई बीचमा मा वैमनस्यता casts.
28:12 आगो लागि वन को काठ अनुसार बल्छ. र एक मानिसको रिस मानिस को बल अनुसार बल्छ. र आफ्नो स्रोतहरू अनुसार, उहाँले आफ्नो क्रोध उच्च पार्नुहुनेछ.
28:13 हतार contention आगो kindles. र हतार भ्कगडा रगत शेड. र एक accusatory जिब्रो मृत्यु ल्याउँछ.
28:14 तपाईं एक स्पार्क मा झटका भने, यो आगो गर्न वृद्धि हुनेछ. तर तपाईं यसलाई मा थुक्नु यदि, यो निभाउँछ गरिनेछ. यी दुवै मुख बाट अगाडि बढ्न.
28:15 डबल-tongued Whisperer श्रापित छ. लागि उहाँले विचलित छ धेरै शान्ति थियो जो.
28:16 तेस्रो जिब्रो धेरै भड्काए छ, र राष्ट्र राष्ट्र तिनीहरूलाई छरिएका छ.
28:17 यो धनी पर्खालले घेरिएको शहर नष्ट भएको छ, र ठूलो को घरहरू फितलो बनाइदिएको छ.
28:18 यो मानिसहरूका को सद्गुण काट्नु छ, र बलियो राष्ट्रका भङ्ग गरेको छ.
28:19 तेस्रो जिब्रो virtuous महिला तल फ्याँकिएको छ, र आफ्नो मेहनत को तिनीहरूलाई deprived छ.
28:20 जसले यो बाँकी हुनेछैन एहसान, न त उहाँले शान्ति पाउन सक्छ जसलाई एक मित्र हुनेछ.
28:21 एक सचेतक को घाउ एक चोट को कारण, तर जिब्रोको घाउ को हड्डी नाश गर्नेछ.
28:22 धेरै तरवार मुख द्वारा खसेको छ, तर सकेसम्म धेरै छैन आफ्नै जिब्रो द्वारा perished छ.
28:23 अनमोल एक दुष्ट जिब्रो सुरक्षित छ जसले छ, यसको क्रोध गर्न भन्दा गएका छैन जो, र यसको जुवा झिकेर छैन, र यसको चेन बाँधिएका गरिएको छैन.
28:24 यसको जुवा लागि फलाम को एक जुवा हो. र यसको चेन पीतल को चेन छन्.
28:25 यसको मृत्यु एक भन्दा दुष्ट मृत्यु छ. र नरक बढी उपयोगी यो छ भन्दा छ.
28:26 यसको continuance स्थायी छैन, तर यो अन्यायपूर्ण को तरिका को पकड हुनेछ. र बस छैन यसको ज्वाला द्वारा जलाए गरिनेछ.
28:27 परमेश्वरको त्याग्न गर्नेहरूले द्वारा पतन हुनेछ, र यो तिनीहरूलाई भित्र बाल्न र निभाउन हुन. र यो तिनीहरूमाथि पठाइने, सिंह जस्तै, र यो तिनीहरूलाई चोट हुनेछ, चितुवा जस्तै.
28:28 thorns आफ्नो कान बचाव. एक दुष्ट जिब्रो सुन्न इच्छुक हुन छैन. र आफ्नो मुख लागि ढोका र बारहरू बनाउन.
28:29 तपाईंको सुन र आफ्नो चाँदी मेल्टतल. र एक मात्रा तपाईंको शब्दहरू लागि बनाउन, र आफ्नो मुख लागि सोझो लगाम कस्न.
28:30 र ध्यान हुनु, सायद नत्र तपाईं आफ्नो जिब्रो संग पर्ची सक्छ, र आफ्ना शत्रुहरूलाई को दृष्टि पर्नु, जसले तपाईंलाई प्रतीक्षा मा झूट छन्, र त्यसपछि आफ्नो गिरावट मृत्यु निम्ति जाती नहुने हुन सक्छ.
29:1 उहाँले आफ्नो छिमेकीलाई गर्न बढाउँछ जसले कृपा देखाउँछ, लागि उहाँले उसलाई बलियो गरी आज्ञा राख्छ.
29:2 आवश्यकता को आफ्नो समय मा आफ्नो छिमेकीलाई गर्न उधारो, र यो आफ्नो समय मा आफ्नो छिमेकीलाई फेरि प्राप्त.
29:3 तपाईंको शब्द राख्न, र उसलाई विश्वासीपूर्वक कार्य, त्यसपछि के तपाईं हरेक समय मा आवश्यक छ जो पाउनुहुनेछ.
29:4 धेरै फेला पैसा जस्तै ऋण उपचार छ, र तिनीहरूले मदत गर्ने ती समस्या प्रस्ताव.
29:5 सम्म तिनीहरूले प्राप्त, तिनीहरूले दिनेलाई हातमा चुम्बन, र तिनीहरूले प्रतिज्ञा आफ्नो आवाज नम्र.
29:6 तर परिशोधन को समयमा, तिनीहरूले थप समय माग्न, र तिनीहरूले कष्टप्रद र उजुरी शब्दहरू बोल्न हुनेछ, र तिनीहरूले समयको लागि बहाना बनाउन हुनेछ.
29:7 त्यसपछि, उहाँले चुक्ता गर्न सक्षम छ भने, उहाँले टाढा हुनेछ. उहाँले बल्लतल्ल एक आधा भुक्तानी गर्नेछ, उहाँले यो भेट्टाएको भने र त्यो विचार गर्नेछौं.
29:8 तर यदि, त्यसपछि उहाँले आफ्नो पैसा उहाँलाई ठग्न हुनेछ, र उहाँले विनाकारण शत्रु तिनलाई हुनेछ.
29:9 र उहाँले आरोप र curses उहाँलाई चुक्ता हुनेछ, र उहाँले घृणा उहाँलाई चुक्ता हुनेछ, बरु सम्मान र दयालु को.
29:10 धेरै उधारो गर्न अस्वीकार गरेका छन्, किनभने दुष्टताको, तर तिनीहरू भयभीत थिए किनभने विनाकारण धोखा गर्न.
29:11 यद्यपि साँच्चै, नम्र तिर थप स्थिर हुन, र तपाईं तिनीहरूलाई दया को प्रेरित ढिलाइ गर्नु हुँदैन.
29:12 किनभने आज्ञा को गरिब सहयोग. र तपाईं उसलाई दूर किनभने आफ्नो दयनीय आवश्यकता को खाली पठाउन हुँदैन.
29:13 आफ्नो भाइ र आफ्नो मित्र आफ्नो पैसा गुमाउनु. तपाईं एक पत्थर अन्तर्गत यो लुकाउन गर्नुपर्छ लागि नष्ट गर्न.
29:14 आफ्नो धन सबैभन्दा उच्च को आदेशहरू रहोस्, र यो तपाईं सुन भन्दा बढी फाइदा.
29:15 गरिब को हृदयमा आफ्नो alms भण्डारण, र यो सबै दुष्ट विरुद्ध लागि मद्दत प्राप्त गर्नेछन्.
29:16 ढाल वा एक शक्तिशाली मानिसको भाला देखिए भन्दा राम्रो,
29:17 यसलाई आफ्नो शत्रु विरुद्ध लागि लड्न हुनेछ.
29:18 असल मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई खातिर क्रेडिट प्रदान गर्दछ. तर आफूलाई उसलाई त्याग्नुहुन्न जो एक लाज मा नष्ट हुनेछ.
29:19 तपाईं आफ्नो उपकारक को दया बिर्सनु हुँदैन. उहाँले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो जीवन प्रस्ताव गरेको छ लागि.
29:20 पापी र अशुद्ध यस्तो प्रतिज्ञा भाग्न.
29:21 पापी आफूलाई आफ्नो ऋण को माल विशेषताहरू. र एक गुन नमान्ने मन उसलाई मुक्त छ जसले एक त्याग्न हुनेछ.
29:22 एक मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई गर्न क्रेडिट प्रदान गर्दछ. तर उहाँले हराएका आदर हुनेछ जब, उहाँलाई त्याग्न हुनेछ.
29:23 एक दुष्ट प्रतिज्ञा गर्ने राम्रो मनसाय थियो धेरै नष्ट भएको छ, र सागर मा एक लहर जस्तै तिनीहरूलाई फेंक छ.
29:24 यसलाई वरिपरि यात्रा गर्न शक्तिशाली मानिसहरू कारण छ, र तिनीहरूले विदेशी राष्ट्रका बीच यताउता बरालिएका छन्.
29:25 प्रभुको आज्ञा transgressing पापी एक दुष्ट प्रतिज्ञा फस्न हुनेछ. र उहाँले गर्ने undertakes धेरै कुराहरू न्याय फस्न हुनेछ.
29:26 आफ्नो छिमेकीलाई आफ्नो क्षमता अनुसार पुन: प्राप्त गर्न मदत, तर आफैलाई उपस्थित, तपाईं पनि गिरावट नत्र.
29:27 मानिसको जीवनमा प्राथमिक आवश्यकता पानी र रोटी छ, र वस्त्र, र एक घर नम्रता रक्षा गर्न.
29:28 बोर्डहरू एक छत मुनि एक pauper खाद्य घर देखि टाढा एक प्रवास मा एक भव्य भोज भन्दा राम्रो छ.
29:29 गर्छन् आफैलाई सानो संग सट्टा खुसी धेरै को हुन, र तपाईं घर देखि टाढा हुनुको निन्दाले सुन्नुहुने छैन.
29:30 यो एक अतिथि रूपमा घरघरमा जाने एक दुष्ट जीवन छ. उहाँले एक अतिथि छ जहाँ लागि, उहाँले निर्धक्क कार्य छैन, न त आफ्नो मुख खोल्न.
29:31 उहाँले मनोरंजन हुनेछ, र फिड, र गुन नमान्ने गर्न पेय दिन, र यो बाहिर, उहाँले तीतो शब्द सुन्न हुनेछ:
29:32 "जानुहोस्, मेरो अतिथि, र तालिका सेट, र अरूलाई तपाईं आफ्नो हातमा के खाने गरौं। "
29:33 "मेरो साथी को सम्मान अनुहार बाट आउट. यसको लागि बरु मेरो भाइ पाहुना मेरो घर लागि आवश्यक भएको छ। "
29:34 यी कुराहरू मानिसको भइरहेको बुझाइ गर्न Grievous छन्: एक घर फाइदा लिन, र निन्दाले एक ऋणदाता गर्न.
30:1 आफ्नो छोरा प्रेम जसले बारम्बार उसलाई chastise हुनेछ, उहाँले धेरै अन्त मा खुसी हुन सक्छ भनेर, र आफ्ना छिमेकी को ढोका लागि grope छैन.
30:2 जसले आफ्नो छोरा उहाँलाई उहाँलाई र इच्छा महिमा भन्दा प्रशंसा हुनेछ निर्देशन, आफ्नो घर को बीचमा.
30:3 आफ्नो छोरा सिकाउँछ जसले आफ्नो शत्रु डाह गर्नेछ, र आफ्ना मित्रहरूको बीचमा, उहाँले उसलाई महिमा.
30:4 जब उनको पिता मृत्यु भएको छ, उहाँले मरेको थिएनन् भने यो हुनेछ. उहाँले कसैले छोडेर हुनेछ लागि जो आफूलाई जस्तै छ.
30:5 आफ्नो जीवनमा, उहाँले उसलाई देखे र उहाँलाई आनन्दित. र आफ्नो बित्दै जाँदा मा, उहाँले उदास थियो, न त उहाँले आफ्ना शत्रुलाई को दृष्टि मा हैरान थियो.
30:6 लागि उसले आफूलाई पछि आफ्ना शत्रुहरूविरुद्ध आफ्नो घर को एक रक्षक बाँकी, र दयालु आफ्नो मित्र चुक्ता गर्ने कसैले.
30:7 आफ्नो छोराहरूको प्राण खातिर, उहाँले आफ्नो घाउ माथि बाँध्न हुनेछ, र हरेक आवाज मा, आफ्नो पेट भड्काए गरिनेछ.
30:8 एक untamed घोडा जिद्दी हुन्छ, र आफूलाई गर्न बाँकी एक बच्चा हेडस्ट्रोंग हुन्छ.
30:9 एक छोरा Coddle, र उहाँले तपाईंलाई भयभीत गर्नेछ. उहाँलाई खेल्न, र उहाँले तपाईं उदास गर्नेछ.
30:10 तपाईं उसलाई हाँस्न हुँदैन; अन्यथा तपाईं शोक हुन सक्छ, र अन्त मा, तपाईंको दाँत clenched गर्न.
30:11 तपाईं आफ्नो युवा उहाँलाई शक्ति दिन हुँदैन, तर तपाईं आफ्नो विचार नाइँनास्ति हुँदैन.
30:12 आफ्नो युवावस्थामा आफ्ना घाँटी दण्डवत्, उहाँले एक बच्चा हुँदा र आफ्नो पक्ष थप्पड, नत्र सायद उहाँले जिद्दी बन्न सक्छ, त्यसपछि उहाँले तपाईंलाई विश्वास छैन, र त त्यो आफ्नो प्राण गर्न शोक ल्याउनेछ.
30:13 आफ्नो छोरा निर्देशन, र उसलाई काम, तपाईं आफ्नो लज्जास्पद व्यवहार ठेस दिन नत्र.
30:14 राम्रो बलियो संविधान साथ एक स्वस्थ pauper छ, कमजोर र रोगव्याधि दुःख छ जो एक धनी मानिस भन्दा.
30:15 न्याय को शुद्धि संग एक स्वस्थ प्राण सबै सुन र चाँदी भन्दा राम्रो छ. र एक ध्वनि शरीर विशाल राजस्व भन्दा राम्रो छ.
30:16 त्यहाँ एक स्वस्थ शरीर को राजस्व माथि कुनै राजस्व छ. र आनन्दित हृदय माथि कुनै आनन्द छ.
30:17 मृत्यु एक तीतो जीवन भन्दा राम्रो छ. र अनन्त बाँकी नित्य रोग भन्दा राम्रो छ.
30:18 एउटा बन्द मुख लुकेका राम्रो कुरा गम्भीर वरिपरि राखिएको भोज मा सिट जस्तै हो.
30:19 के फाइदा मूर्तिको एउटा भेटी मा छ? यसको लागि गर्न सक्छन् न त खान, न त गन्ध.
30:20 त्यसैले प्रभु देखि भाग्छन् जसले छ, आफ्नो iniquity को ज्याला पूरा.
30:21 उहाँले आफ्नो आँखा र कराहना संग देख्नुहुन्छ, कुमारी र sighs गले गर्ने नपुंसकको जस्तै.
30:22 तपाईं दुःख आफ्नो प्राण दिन हुँदैन, र तपाईं आफ्नो सल्लाह आफैलाई दुर्व्यवहार र अन्याय सहनु हुँदैन.
30:23 हृदय को gladness एक मानिसको जीवन हो, र यो दोष बिना शुद्धि को एक धन. र एक मानिसको exultation जीवनको लम्बाइ छ.
30:24 मनपर्ने परमेश्वरले आफ्नो आफ्नै प्राण मा दया लिन, र आत्म-संयम देखाउन. आफ्नो शुद्धि आफ्नो हृदय भेला, र आफैलाई टाढा दुःख ड्राइव.
30:25 दुःख लागि धेरै मारिए छ, र त्यहाँ कुनै उपयोगिता छ.
30:26 ईर्ष्या र रिस आफ्नो दिन बढ्छ हुनेछ, र pensiveness यसको समय अघि पुरानो उमेर ल्याउनेछ.
30:27 खुसीसाथ र राम्रो हृदय भोज जस्तै छ. र यसको चाडहरूमा परिश्रम गरेर गठन गर्दै.
31:1 धन लागि हेर्ने शरीरका खपत, र यो बारेमा सोच टाढा निद्रामा लिन्छ.
31:2 विचार मा अघिबाटै जान्ने काम मन distracts, र एक Grievous अथवा अशक्तताले प्राण सचेत बनाउँछ.
31:3 धनी मानिस धन भेला मा labored छ, र आफ्नो बाँकी मा, उहाँले आफ्नो सामान भरिएको हुनेछ.
31:4 गरिब मानिसले आफ्नो नीच तरिकामा labored छ, र अन्त मा, उहाँले अझै पनि आवश्यकता हुन सक्छ.
31:5 जसले प्रेम सुन जायज हुनेछैन. र जसले pursues खपत यसलाई द्वारा खपत हुनेछ.
31:6 किनभने सुन पतन गर्न धेरै कारण छन्, र यो आफ्नो सौन्दर्य आफ्नो खण्डहर भयो.
31:7 सुन यसको लागि बलिदान गर्नेहरूलाई एक अवरोधलाई छ. उत्कट यसलाई पछि लाग्न गर्नेहरूलाई धिक्कार, सबै लागि imprudent यसलाई द्वारा नष्ट हुनेछ.
31:8 अनमोल दोष बिना हुन पाइन्छ जो धनी मानिस छ. र सुनको पछि परेका छैन जो अनमोल उहाँ, न त पैसा वा सम्पत्तिहरू आफ्नो आशा राखिएको.
31:9 उ को हो? हामी उहाँको प्रशंसा गर्नुपर्छ. लागि उहाँले आफ्नो जीवन मा अद्भुत कुराहरू गर्नुभएको छ.
31:10 उहाँले यो द्वारा परीक्षण गरिएको छ, र सिद्ध भएको छ; उहाँले अनन्त महिमा हुनेछ. उहाँले transgress गर्न सक्षम थियो, तर उहाँले transgressed छैन. उहाँले दुष्ट गर्न सक्षम थियो, तर उहाँले दुष्ट गरेको छैन.
31:11 त्यसैले, आफ्नो राम्रो कुरा प्रभु मा स्थापित छन्, र सन्तहरू को सम्पूर्ण चर्च आफ्नो almsgiving घोषणा हुनेछ.
31:12 ठूलो तालिका मा तपाईं विराजमान छन्? तपाईं पहिले भन्दा आफ्नो मुख खोल्न हुँदैन.
31:13 तपाईं यसरी बोल्न हुँदैन: "त्यहाँ यो मा छन् कि धेरै कुरा छन्।"
31:14 एक दुष्ट आँखा खराब छ कि सम्झना.
31:15 के आँखा भन्दा बढी दुष्ट गरिएको छ? त्यसैले, जब यो देख्नुहुन्छ, यो सम्पूर्ण अनुहार भन्दा आँसु बगाउन हुनेछ.
31:16 तपाईँ पहिला आफ्नो हात विस्तार हुँदैन, त्यसपछि लागि, ईर्ष्या दुषित भएको होने, तपाईं लज्जित हुनेछ.
31:17 तपाईं भोज मा अगाडी प्रेस हुँदैन.
31:18 आफ्नो छिमेकीको र आफ्नो आफ्नै छन् जो कुराहरू बुझ्न.
31:19 तपाईं राखिएका छन् कि कुरा को प्रयोग, बस एक frugal मानिस हुनेछ रूपमा. अन्यथा, तपाईं धेरै खान भने, तपाईं घृणा गरिनेछ.
31:20 पहिलो खाने बन्द, अनुशासन खातिर. र अतिरिक्त गर्न खान छैन, तपाईं अपमान नत्र.
31:21 र तपाईं धेरै बीचमा बस्न भने, तिनीहरूले के गर्नु अघि तपाईंले आफ्नो हात विस्तार हुँदैन, र तपाईं पहिलो पिउनका लागि सोध्नु हुँदैन.
31:22 राम्ररी सिकाइएको मानिस को लागि एक सानो रक्सी कसरी पर्याप्त छ! निद्रामा लागि, तपाईं भएकोले यो छैन श्रम, र तपाईं दुखाइ महसुस छैन.
31:23 चिन्ता, र रोग, र सास्ती एक intemperate मानिस हुनुहुन्छ.
31:24 एक स्वस्थ निद्रामा एक समशीतोष्ण मानिस छ. उहाँले बिहान सम्म सुत्न हुनेछ, र आफ्नो प्राण उसलाई प्रसन्न हुनेछ.
31:25 र तिमी पनि धेरै खाने मा coaxed गरिएको छ भने, उठेर, बाहिर जाउ, र उल्टी. र यो तपाईं ताजा हुनेछ, र तपाईं आफ्नो शरीर मा रोग ल्याउन छैन.
31:26 मलाई सुन्न, छोरा, लागि मलाई spurn हुँदैन. र धेरै अन्त मा, तिमी मेरो शब्दहरू पत्ता लगाउन हुनेछ.
31:27 आफ्नो सबै काम मा, शीघ्र हुन, र त्यसपछि कुनै अशक्तताले तपाईं आइपर्नेछन्.
31:28 धेरै को ओठ रोटी मा भव्य दिनुहुनेछ. आफ्नो सत्यता गवाहीलाई विश्वासयोग्य छ.
31:29 शहर रोटी मा दुष्ट विरुद्ध गनगन हुनेछ. आफ्नो दुष्टताको विरुद्ध गवाही साँचो छ.
31:30 रक्सी प्रेम गर्ने ती प्रकुपित गर्न छनौट छैन. रक्सी लागि धेरै नष्ट भएको छ.
31:31 आगो फलाम को कठोरता परीक्षण; यस्तै, खुमार गर्न रक्सी पिउने को घमण्डी हृदय हप्काउनुभयो हुनेछ.
31:32 sobriety मा रक्सी पिउने मानिसहरू एक contented जीवन दिन्छ. तपाईं ठिक्क यसलाई पिउन भने, तपाईं सचेत हुनेछ.
31:33 रक्सी द्वारा कम भएको छ उहाँलाई जीवन के हो?
31:34 आफ्नो जीवनको उहाँलाई के धोखा गर्न सक्नुहुन्छ? मृत्यु.
31:35 सुरुदेखि, रक्सी cheerfulness लागि सिर्जना गरिएको थियो, तर खुमार लागि.
31:36 ठिक्क लिएको वाइन मन र हृदय अप लिफ्टहरु.
31:37 सचेत पिउने मन र शरीर गर्न healthful छ.
31:38 अतिरिक्त लिइएका वाइन द्वन्द्व र रिस अप stirs, र खण्डहर धेरै ल्याउँछ.
31:39 अतिरिक्त लिइएका वाइन प्राण गर्न तीतो छ.
31:40 खुमार को प्रभाव imprudent एक अवरोधलाई छन्, बल diminishing र कारण घाउ.
31:41 तपाईं रक्सी को एक भोज समयमा आफ्नो छिमेकीसित तर्क हुँदैन. र तपाईं आफ्नो cheerfulness उहाँलाई spurn हुँदैन.
31:42 तपाईं उहाँलाई निन्दाले को शब्द बोल्न हुँदैन. र तपाईं बारम्बार अनुरोध उहाँलाई प्रेस हुँदैन.
32:1 तिनीहरूले एक नेता रूपमा नियुक्त गरेका छन्? extolled गर्न इच्छुक छैन. तिनीहरूलाई को रूपमा तिनीहरूमध्ये.
32:2 तिनीहरूलाई चासो छ, र तिनीहरूलाई तल बस्न यसरी, र तपाईं आफ्नो सबै चिन्ता बताए जब, फिर्ता बस्न.
32:3 त्यसपछि किनभने तिनीहरू आनन्दित हुन सक्छ, र तपाईं अनुग्रहको एक सिंगार रूपमा मुकुट प्राप्त हुन सक्छ, र त विधानसभा को मर्यादा प्राप्त.
32:4 बोल्न, जन्म द्वारा ठूलो हो जसले तपाईंलाई. लागि यो तपाईं को लागि उपयुक्त छ
32:5 होसियार ज्ञान संग पहिलो शब्द बोल्न. तर तपाईं संगीत बाधा हुँदैन.
32:6 जहाँ कुनै एक सुनिरहेको छ, तपाईं शब्दहरू पोखाउनुहोस् हुँदैन. र आफ्नो बुद्धिको लागि अनुचित extolled गर्न छनौट छैन.
32:7 गारनेट एक gemstone सुनको एउटा आभूषण बीच सेट गरिएको छ, र संगीत को एक कन्सर्ट रक्सी को एक भोज बीच सेट गरिएको छ.
32:8 Emerald एक मुहर सुनको काम बीच सेट गरिएको छ जसरी, त्यसैले रमणीय र मध्यम रक्सी बीच संगीत सेट एक माधुर्य छ.
32:9 मनमनै सुन्न, र आफ्नो श्रद्धाको लागि, राम्रो गौरव तपाईं थपिनेछ.
32:10 जवान पुरुष, अनिच्छा मात्र आफ्नो आफ्नै मामला बोल्न.
32:11 तपाईं दुई पटक आग्रह गरिएको छ भने, तपाईंको प्रतिक्रिया संक्षिप्त होस्.
32:12 धेरै विषयमा, तपाईं ज्ञान कमी भने हुन, र मनमनै सुन्न साथै उत्सुकतासाथ.
32:13 ठूलो मानिसहरूको बीचमा, तपाईं अहंकारी हुनु हुँदैन. र एल्डरहरूले जहाँ वर्तमान हो, तपाईं धेरै बोल्न हुँदैन.
32:14 बिजुली एक hailstorm अघि जान्छ, र अनुग्रह नम्रता अघि जान्छ. अनि त, आफ्नो श्रद्धाको लागि, राम्रो गौरव तपाईं थपिनेछ.
32:15 र बढ्दो लागि घण्टा मा, तपाईं LAX हुँदैन. पछि, अगाडि आफ्नो घरमा चलाउन पहिलो हुन, र त्यहाँ फिर्ता, र त्यहाँ आफ्नो सोख लिन.
32:16 र आफ्नो मनसाय अनुसार कार्य, तर पाप र घमण्डी भाषण मा.
32:17 र यी सबै कुराहरू लागि, प्रभु आशीर्वाद, जसले तपाईंलाई गरे, र सबै आफ्नो राम्रो कुराको overflowing तपाईं भरिन्छ.
32:18 जसले प्रभु आफ्नो सिद्धान्त स्वीकार गर्नेछ डर. र जसले उहाँलाई लगनशील भई आशिष् पाउनुहुनेछ लागि हेर्छ.
32:19 व्यवस्था देखि जसले व्यवस्था खोज्ने भरिएको हुनेछ. तर षड्यन्त्र गरेर जसले षड्यन्त्र संग कार्य scandalized गरिनेछ.
32:20 प्रभु डर गर्नेहरूलाई बस न्याय पाउनुहुनेछ, र तिनीहरूले ज्योति जस्तै न्याय kindle हुनेछ.
32:21 एक पापी मानिस सुधार त्याग्नुपर्छ हुनेछ, र उसले आफ्नो इच्छाबमोजिम मा एक rationalization पाउनुहुनेछ.
32:22 सल्लाह को एक मानिस समझ अस्वीकार छैन. एक अनौठो र घमण्डी मानिस त्रसित छैन विचलित गरिनेछ.
32:23 तथापि, उहाँले डर बाहिर र सल्लाह बिना काम गरेपछि, उसले आफ्नो आलोचना गरेर हप्काउनुभयो गरिनेछ.
32:24 छोरा, तपाईं सल्लाह बिना केही गर्नुपर्छ, त्यसपछि के तपाईं गरेका के पछुताउनु छैन.
32:25 तपाईं खण्डहर बाटो मा जान गर्नुपर्छ, र तपाईं त ढुङ्गामा ठक्कर छैन. तपाईं एक laborious तरिका आफैलाई प्रतिबद्ध हुँदैन; अन्यथा, तपाईं आफ्नो प्राण विरुद्ध घोटाले सेट अप सक्छ.
32:26 र आफ्नो छोरा विषयमा सतर्क हुन. र आफ्नो घर को ती ध्यान हुन.
32:27 आफ्नो काम सबै, विश्वास गर्न आफ्नो प्राण विश्वास. यो लागि आज्ञा को पालन गरेमा छ.
32:28 जसले परमेश्वरको विश्वास गर्छ आज्ञाहरू गर्न उपस्थित. र जसले उहाँलाई भरोसा छैन कम हुनेछ.
33:1 कुनै दुष्कर्मलाई एक प्रभु डर जो आइपर्नेछन्. बरु, भगवान प्रलोभनको समयमा उहाँलाई सुरक्षित गर्नेछ र दुष्कर्मलाई उहाँलाई मुक्त हुनेछ.
33:2 बुद्धिमान् मानिस आज्ञा र justices घृणा गर्दैन, र त त्यो बारेमा हिंसापुर्वक छैन हालियो गरिनेछ, एक तूफान मा एक जहाज जस्तै.
33:3 समझ को एक मानिस परमेश्वरको व्यवस्थामा विश्वास राख्दछ, र यति व्यवस्था वफादार छ.
33:4 जसले एक विवाद शब्द तयार हुनेछ समाधान हुनेछ, र त्यसैले, प्रार्थना होने, उहाँले सुने गरिनेछ. र उहाँले अनुशासन पालन गर्नेछ, त्यसपछि उहाँले प्रतिक्रिया हुनेछ.
33:5 एक मूर्ख को दिल एक गाडी को पाङ्ग्रा जस्तै छ. र आफ्नो विचार एक परिवर्तन एक्सल जस्तै हो.
33:6 एक Whisperer छ जो एक मित्र एक untamed घोडा जस्तै छ: उहाँले उहाँमाथि बस्छन जो कोहीले अन्तर्गत neighs.
33:7 किन दिन दिन पछि गर्दैन, र हल्का हल्का पछि, र वर्ष पछि वर्ष पालन, संग सूर्य अनुसार मा?
33:8 प्रभुको ज्ञान द्वारा, तिनीहरूले प्रबन्ध मिलाइयो, पछि सूर्य गरिएको थियो, आफ्नो आदेश संग राखन मा.
33:9 अनि त, को मौसम परिवर्तन, आफ्नो भोजमा दिन संग. र तिनीहरूलाई अनुसार, तिनीहरूले भोज दिन मनाइन्छ, आफ्नो घण्टामा.
33:10 तिनीहरूलाई केही, भगवान उच्च र महिमा. र केही तिनीहरूलाई को, उहाँले साधारण दिन बीच सेट. र सबै मानिसहरू भुइँमा छन्, र पृथ्वीबाट, जो देखि एडम सिर्जना गरिएको थियो.
33:11 विषयों को एक mulititude संग, प्रभु तिनीहरूलाई प्रतिष्ठित र आफ्नो तरिका विविध छ.
33:12 तिनीहरूलाई केही, उहाँले आशिष् र उच्च छ. र तिनीहरूलाई केही उहाँले पवित्र र आफूलाई नजिक राखिएको छ. र केही तिनीहरूलाई को, उहाँले श्राप र कम ल्याएको छ, र उहाँले आफ्नो स्टेसनबाट तिनीहरूलाई गरिएका छ.
33:13 माटोलाई को पटर हात छ जसरी, फारम र यसलाई कोर्न गर्न ताकि,
33:14 त्यसैले सबै आफ्नो आफ्नो प्रबन्धको संग अनुसार मा तरिकाहरू छन्, र यति उहाँलाई गरे जो एक को हात मा मान्छे हो. र उहाँले आफ्नो विवेकअनुसार उहाँलाई चुक्ता हुनेछ.
33:15 दुष्ट विरुद्ध राम्रो छ, र जीवन मृत्यु विरुद्ध छ; त्यसैले पनि बस मानिसको विरुद्धमा पापी छ. र त्यसैले तपाईंलाई सबैभन्दा उच्च सबै काम विचार गर्नुपर्छ: दुई र दुई, र अर्को विरुद्ध एक.
33:16 र म धेरै अन्त मा जागा, र म अङ्गुरको gatherers पछि अङ्गुर बटोरता गर्ने जस्तो थियो.
33:17 म, पनि, परमेश्वरको आशिष् आशा राखेको छु. र म अङ्गुर बटोरता गर्ने एक जस्तै कोलको भरिएको छ.
33:18 म एक्लै आफैलाई लागि labored छ कसरी छैन विचार, तर सबै जो खोजिरहेका छन् अनुशासन.
33:19 मलाई सुन्न, तपाईं ठूलो व्यक्तिहरूलाई, सबै मानिसहरूका साथ. र आफ्नो कान भ्कुकावट, तपाईं चर्च को शासकहरू.
33:20 तपाईं एक छोरा वा पत्नी आफैलाई अधिकार दिन हुँदैन, एक भाइ वा मित्र, तिम्रो जीवनमा. र तपाईं अर्को आफ्नो सम्पत्ति दिन हुँदैन, सायद नत्र तपाईं पछुताउनु सक्छ, र त तपाईं नै लागि भीख माँग थियो.
33:21 तपाईं अझै पनि जीवित र सास बेला, सबै प्राणी परिवर्तन बीचमा कुनै एक गरौं तपाईं.
33:22 यो राम्रो छ लागि आफ्नो बच्चाहरु तपाईं आवेदन यदि, यदि तपाईं आफ्नो बच्चाहरु को हात तिर हेर्न भन्दा.
33:23 आफ्नो सबै काम मा, पूर्व-महत हुन.
33:24 तपाईं आफ्नो महिमा मा एक दोष अनुमति हुँदैन. आफ्नो जीवनको दिन को Consummation दिन मा, तपाईंको बित्दै जाँदा को समयमा, आफ्नो उत्तराधिकार वितरण.
33:25 चारा र रड र एक बोझ एक गधा लागि हो; रोटी र अनुशासन र काम सेवक लागि हो.
33:26 उहाँले अनुशासन अन्तर्गत काम गर्दछ, र उहाँले बाँकी खोज्ने. आफ्नो हात निष्क्रिय गर्न अनुमति, र उहाँले स्वतन्त्रता खोज्ने.
33:27 जुवा र पट्टा एक कडा घाँटी मोड, र नित्य मेहनत सेवक मोड.
33:28 यातना र चेन एक द्रोही सेवक लागि हो; उहाँलाई काम गर्न पठाउन, ताकि उहाँले निष्क्रिय हुन सक्छ.
33:29 idleness लागि धेरै दुष्ट सिकाउनुभएको छ.
33:30 कार्य गर्न नियुक्त. यो उहाँलाई लागि उपयुक्त छ. र उहाँले आज्ञाकारी हुन भने छैन, चेन उहाँलाई मोड. तर तपाईं कुनै पनि शरीर सहन सक्छ भन्दा कुनै थप गर्नुपर्छ. साँच्चै, तपाईं न्याय बिना Grievous केही गर्नुपर्छ.
33:31 तपाईं एक विश्वासी सेवक छ भने, तपाईं आफ्नो आफ्नै प्राण उहाँलाई होस्. एक भाइ जस्तै उसलाई व्यवहार. तपाईं आफ्नो प्राण को रगत उसलाई प्राप्त छ लागि.
33:32 तपाईं बेमनासिब उहाँलाई हानि भने, उहाँले टाढा बारी र भाग्नेछ.
33:33 अनि तेस्पछि, उहाँले अप लिफ्टहरु र प्रस्थान गर्दा, तपाईं कसलाई सोध्नु थाहा छैन, वा कुन तरिकामा उहाँको खोजी गर्न.
34:1 एक बेहोस मानिसको आशा खाली र गलत हो; र सपना पनि imprudent महिमा.
34:2 एक छाया chases र हावा pursues गर्ने जस्तो, त्यसैले पनि झूट दर्शन गर्न ध्यान दिन्छिन् गर्ने छ.
34:3 सपना को दर्शनमा, एउटा कुरा अर्को प्रतिनिधित्व, रूपमा मास्क एक मानिसको अनुहार अघि हुँदा.
34:4 के अशुद्ध द्वारा शुद्ध गर्न सकिन्छ? र के सत्य झूट देखि बोली सकिन्छ?
34:5 गलत divinations र झूटा चिन्ह र evildoers को सपना खालीपनको छन्.
34:6 आफ्नो हृदय लागि कल्पना बाट पीडित, जस्तै एक महिला प्रसब मा पीडित. जबसम्म यो सबैभन्दा उच्च पठाइएको visitation छ, तपाईं यसलाई मा आफ्नो हृदय सेट हुँदैन.
34:7 सपना कारण लागि हराउनु जान धेरै, र तिनीहरूलाई आशा राखेको छु गर्नेहरूलाई टाढा खसेको छ.
34:8 व्यवस्था वचन झूट बिना पूरा हुनेछ, र बुद्धि विश्वासी को मुख मा सादा गरिनेछ.
34:9 परीक्षण गर्ने गरिएको छैन उहाँले, उहाँले के थाह? धेरै अनुभव संग एक मानिसले धेरै कुराहरू विचार गर्नेछौं. र जसले धेरै समझ संग व्याख्या गर्नेछ सिकेका छ.
34:10 कुनै अनुभव छ जसले सानो थाह. र धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ जसले धेरै गल्ती गरेको छ.
34:11 परीक्षण गर्ने गरिएको छैन उहाँले, उहाँले कुराहरू कस्तो थाहा गर्न सक्नुहुन्छ? धोका गरिएको छ जसले थप धूर्त हुनेछ.
34:12 म Wandering द्वारा धेरै देखेको छु, धेरै कुराहरू र भन्सार.
34:13 कहिलेकाहीं, म पनि किनभने यी कुराहरू मृत्युको खतरा छ, तर म परमेश्वरको अनुग्रहको द्वारा मुक्त थियो.
34:14 परमेश्वरको डर गर्नेहरूलाई आत्मा खोजे छ, र तिनीहरूले आफ्नो Providence आशिष् गरिनेछ.
34:15 आफ्नो आशा उहाँमा छ लागि जो तिनीहरूलाई बचाउँछ, र परमेश्वरको आँखा उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई छन्.
34:16 डर जो प्रभु केही मा डर हुनेछ ती, र तिनीहरूले आत्तिनुपर्ने हुनेछ. लागि उहाँले आफ्नो आशा छ.
34:17 प्रभु डर जो आत्मा अनमोल छ.
34:18 जसलाई उहाँले हेर्न गर्नुपर्छ गर्न, र आफ्नो शक्ति जो छ?
34:19 प्रभुको उहाँलाई डर गर्नेहरूलाई मा छन्. उहाँले एक शक्तिशाली संरक्षक हुनुहुन्छ, सद्गुण एक आकाश, गर्मी देखि एक आश्रय, र एक midday सूर्य देखि कवर,
34:20 अपराध एउटा अभिभावक, र एक सहयोगी झर्ने, जसले प्राण exalts र आँखा illuminates, र स्वास्थ्य र जीवन र आशिष् गर्ने दिन्छ.
34:21 iniquity एक immolation एक दाग लागेको oblation छ, र अन्यायपूर्ण को derisions छैन राम्रो प्रसन्न तुल्याउने.
34:22 प्रभु मात्र सत्य र न्यायको मार्गमा उहाँलाई लागि लागिरहन गर्नेहरूका लागि छ.
34:23 सबैभन्दा उच्च भएको iniquitous को उपहार को अनुमोदन गर्दैन. न त त्यो अन्यायपूर्ण को oblations लागि आदर गर्छ; न उहाँले किनभने आफ्नो बलिदान को भीड को आफ्नो पाप क्षमा हुनेछ.
34:24 जसले गरिब को पदार्थ देखि बलिदान प्रदान गर्दछ छोरा आफ्नो बुबाको दृष्टि मा बलिदान गर्ने जस्तो छ.
34:25 को indigent को रोटी गरिबहरूको जीवन छ. जसले यो तिनीहरूलाई Cheats रगतको एक मानिस छ.
34:26 जसले पसिना को रोटी टाढा लिन्छ आफ्नो छिमेकीलाई हत्या गर्ने जस्तो छ.
34:27 जसले रगत शेड, र उहाँले आफ्ना ज्याला बाहिर ज्यालादारी कामदारको Cheats, भाइहरू हो.
34:28 एक बनाउछ कहिले र अर्को नष्ट, के फाइदा तिनीहरूले श्रम देखि छ के?
34:29 जब एक प्रार्थना र अर्को curses, जसको आवाज परमेश्वरको ध्यान?
34:30 मरेका छोएर पछि आफूलाई माझ्छिन् जसले, त्यसपछि उहाँलाई फेरि छुन्छ, आफ्नो लुगा धुने फाइदाको के थियो?
34:31 त्यसैगरि, आफ्नो पापको लागि fasts मानिस, त्यसपछि नै फेरि गर्छ, आफ्नो आफूलाई humbling फाइदाको के थियो? जो आफ्नो प्रार्थना पालन गर्नेछ?
35:1 जसले व्यवस्था बताउँछ oblations वृद्धि गर्छ.
35:2 यो आज्ञा गर्न धाउन र सबै iniquity देखि फिर्ता गर्न एक salutary बलिदान छ.
35:3 र अन्याय बाट प्रस्थान गर्न अन्याय प्रायश्चितको बलिदान र पापको supplication प्रस्ताव छ.
35:4 जसले धन्यवाद दिन्छ, ठीक पीठो एक उपहार प्रदान गर्दछ, र जसले कृपा संग कार्य, बलिदान प्रदान गर्दछ.
35:5 iniquity देखि फिर्ता गर्न प्रभु राम्रो-खुसी छ. र अन्याय बाट झिक्न पापको supplication छ.
35:6 तपाईं प्रभुको दृष्टि अघि खाली देखा हुँदैन.
35:7 यी सबै कुराहरू गरिन छन् किनभने परमेश्वरको आज्ञा को.
35:8 को बस को oblation वेदी fattens, र सबैभन्दा उच्च को दृष्टि मा मिठास एक खुशबू छ.
35:9 को बस को बलिदान स्वीकार्य छ, र प्रभु कहिल्यै यो स्मारकका भूल हुनेछ.
35:10 राम्रो हृदयले परमेश्वरको महिमा प्रस्तुत. र तपाईं आफ्नो हात को पहिलो-फल कम हुँदैन.
35:11 हरेक उपहार संग, खुसीसाथ countenance छ, र exultation आफ्नो दशांश पवित्र.
35:12 तपाईं आफ्नो उपहार अनुसार सबैभन्दा उच्च दिन, र आफ्नो हात को सिर्जनाहरू तिर राम्रो आँखा कदम चाल्न.
35:13 प्रभु लागि recompense दिन्छ, र उहाँले तपाईं धेरै रूपमा सात पटक चुक्ता हुनेछ.
35:14 भ्रष्ट उपहार प्रदान गर्न इच्छुक छैन. लागि उहाँले तिनीहरूलाई स्वीकार छैन.
35:15 र एक अन्यायपूर्ण बलिदान विचार गर्न इच्छुक छैन. प्रभु लागि न्यायाधीश छ, र उसलाई त्यहाँ जो कोहीले तिर कुनै favoritism छ.
35:16 प्रभु गरिब विरुद्ध favoritism स्वीकार छैन, तर उहाँले हानि गरिएको छ जो एक को प्रार्थना पालन गर्नेछ.
35:17 उहाँले अनाथ प्रार्थना नाइँनास्ति छैन, विधवाको न त, त्यो एक lamenting उजुरी utters यदि.
35:18 एक विधवाको आँसु उनको गालामा तल चलान छैन? र उनको पुकारा आफ्नो पतन कारण छैन?
35:19 उनको गालामा देखि लागि, उनको आँसु पनि स्वर्ग चढ्नु. र प्रभु, सुन्नुहुन्छ गर्ने एक, तिनीहरूलाई आनन्द लिन छैन.
35:20 जसले आनन्द स्वीकार गरिनेछ परमेश्वरको adores, र आफ्नो प्रार्थना बादल पनि पुग्नेछ.
35:21 आफूलाई बादल पियर्स हुनेछ humbles गर्ने एक को प्रार्थना. र यो नजिक नगरेसम्म सान्त्वना गरिनेछ; र यो सबैभन्दा उच्च beholds सम्म झिक्न छैन.
35:22 र प्रभु ढिलो हुनेछ, र उनले निम्ति न्याय गर्नेछ, र उहाँले न्याय पूरा गर्नेछ. र सर्वशक्तिमान तिनीहरूलाई धैर्य हुनेछैन, उहाँले आफ्नो फिर्ता नाश हुन सक्छ भनेर.
35:23 र उहाँले अन्यजातिहरूको गर्न बदला चुक्ता हुनेछ, उहाँले घमण्डी को भीड लगिएको छ सम्म, र iniquitous को डण्डा भङ्ग,
35:24 उहाँले आफ्नो आफ्नो कामअनुसार मानिसहरू चढाएको नभएसम्म, र एडम को काम अनुसार, र आफ्नो धारणा अनुसार,
35:25 उहाँले आफ्नो मान्छे को न्याय न्याय नभएसम्म. र उहाँले आफ्नो कृपा संग बस प्रसन्न हुनेछ.
35:26 परमेश्वरको कृपा कष्ट समयमा सुन्दर छ, खडेरी को समय मा एक वर्षा बादल जस्तै.
36:1 हे सबै परमेश्वरको, हामीलाई दया लिन, र हामीलाई पक्षमा संग हेर्न, र हामीलाई आफ्नो दया ज्योति देखाउन.
36:2 र अन्यजातिहरूको मा डर पठाउन, जसले तपाईंलाई खोजे छैन, ताकि तिनीहरूले तपाईं बाहेक कुनै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्न सक्छ, र त्यसैले तिनीहरू आफ्नो ठूलो कामहरू घोषणा गर्न सक्छ भन्ने.
36:3 बेग्लै धर्म मान्ने राष्ट्रहरूमाथि आफ्नो हात माथि उचाल्न, तिनीहरूले आफ्नो शक्ति देख्न सक्छ भनेर.
36:4 जस्तै लागि, आफ्नो दृष्टि मा, तपाईं हामीलाई पवित्र छन्, त्यसैले पनि, हाम्रो दृष्टि मा, तपाईंले तिनीहरूलाई मा म्याग्निफाइन्ड गरिनेछ.
36:5 त्यसैले तिनीहरू तपाईंलाई थाहा हुन सक्छ, हामी पनि ज्ञात छ रूपमा. कुनै परमेश्वरले तपाईंलाई अलग्गै छ लागि, हे प्रभु.
36:6 तपाईंको संकेत नविकरण, र नयाँ चमत्कार काम.
36:7 आफ्नो हात र आफ्नो सही हात महिमा.
36:8 तपाईंको उतेजना अप हलचल, र आफ्नो क्रोध पोखाउनुहोस्.
36:9 हाम्रो शत्रु लिन टाढा, र हाम्रो शत्रु दुर्व्यवहार र अन्याय सहनु.
36:10 समय Hasten, र अन्त सम्झना, तिनीहरूले आफ्नो चमत्कार घोषणा हुन सक्छ भनेर.
36:11 गर्छन् जो उम्कन ती आगोको क्रोध द्वारा devoured गर्न. र आफ्नो मान्छे perdition फेला सताउन गर्नेहरूलाई गरौं.
36:12 शत्रुलाई नेताहरू को टाउको नाश, तिनीहरूले भन्न: "त्यहाँ हामीलाई छेउमा अन्य कुनै छ।"
36:13 याकूबका सबै कुल सँगै भेला, ताकि तिनीहरूले तपाईं बाहेक कुनै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्न सक्छ, र त्यसैले तिनीहरू आफ्नो ठूलो कामहरू घोषणा गर्न सक्छ भन्ने. र तपाईं तिनीहरूलाई अधिकार पाउनेछन्, सुरुदेखि रूपमा.
36:14 आफ्नो मान्छे मा दया लिन, जसलाई तपाइँको नाम बोलाइएको छ, र इजरायल मा, जसलाई तपाईं आफ्नो जेठो रूपमा उपचार छ.
36:15 यरूशलेम मा दया लिन, तपाईंको पवित्रीकरण शहर, आफ्नो बाँकी शहर.
36:16 तपाईंको ineffable सियोनमा भर्न, र आफ्नो महिमा आफ्नो मान्छे भर्न.
36:17 सुरुदेखि आफ्नो सिर्जनाहरू छन् गर्नेहरूलाई गवाही दिन, र पूर्व अगमवक्ताहरू आफ्नो नाम बोले जो भविष्यवाणीहरू उचाल.
36:18 तपाईं को लागि सहन गर्नेहरूलाई एक इनाम दिन, त्यसैले आफ्नो अगमवक्ताहरू विश्वासी हुन पाउन सकिन्छ कि. र आफ्नो सेवकहरूको प्रार्थना पालन,
36:19 आफ्नो मान्छे भन्दा हारूनको आशिष् संग अनुसार मा. र न्यायको मार्गमा हामीलाई निर्देशन, र पृथ्वी बसाबास गर्नु सबै तपाईं परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर थाहा, सबै उमेरका को Beholder.
36:20 को पेट कुनै पनि खाना निल्न सक्छ, अझै एक भोजन अर्को भन्दा राम्रो छ.
36:21 यो तालु जंगली जनावर को मासु परीक्षण, र समझ हृदय झूटो शब्द परीक्षण.
36:22 एक भ्रष्ट हृदय दुःख दिइरहनुभएको हुनेछ, र अनुभव को एक मानिस यसलाई प्रतिरोध हुनेछ.
36:23 एक महिला कुनै पनि पुरुष प्राप्त गर्न सक्छन्, अझै एक छोरी अर्को भन्दा राम्रो छ.
36:24 एक पत्नी चियर्स को सौन्दर्य पतिको अनुहार, र आफ्नो इच्छा माथि rises, मानिसको सबै इच्छा माथि.
36:25 यदि त्यो निको शब्दहरू प्रदान गर्दछ, त्यसपछि त्यो दुवै सुखसुविधा र कृपा देखाउँछ; र यति पतिको अन्य मानिसहरू रुचि छैन.
36:26 असल पत्नी गर्न धारण जसले एक सम्पत्तिको स्थापना. त्यो उसलाई सम्झौता एक सहायक छ, र त्यो बाँकी को खाँबो छ.
36:27 जहाँ कुनै भ्काडी छ, एक सम्पत्तिको trampled गरिनेछ. र जहाँ कुनै पत्नी छ, उहाँले उनको अभाव शोक हुनेछ.
36:28 जो कुनै गुँड छ जो एक भरोसा हुनेछ, र जो आफ्नो पाठ्यक्रम उहाँलाई लाग्न सक्छ जहाँ आफूलाई लुकाउँछ, राम्ररी सुसज्जित डाकू शहर देखि शहर पारित जस्तै?
37:1 हरेक मित्र भन्न हुनेछ: "म पनि नजिकको साथी हुँ।" तर त्यहाँ एक मित्र नाम छ जो एक मित्र मात्र. पनि मृत्यु निम्ति यो एक शोक छ?
37:2 तर एक साथी र मित्र शत्रु परिणत हुन सक्छ.
37:3 हे दुष्ट अनुमान! तपाईं आफ्नो अरुको अहित गर्ने इच्छा र deceitfulness संग सुक्खा भूमि कवर भनेर के तपाईं सिर्जना देखि?
37:4 एक साथी राम्रो समयमा आफ्ना साथीसँग आनन्दित हुन सक्छ, तर कष्ट को एक समय मा, उहाँले एक शत्रु हुनेछ.
37:5 त्यहाँ पेट खातिर साथीसँग commiserates गर्ने साथी छ, तर शत्रु देखि आफूलाई ढाल हुनेछ.
37:6 तपाईं आफ्नो प्राण आफ्नो मित्र बिर्सनु हुँदैन, र तपाईं आफ्नो धन उहाँलाई unmindful हुँदैन.
37:7 तपाईं को लागि लुकेर मा पर्खन्छ व्यक्तिलाई परामर्श गर्न छनौट छैन. र जसले तपाईंलाई प्रतिद्वन्द्वी ती तपाईंको सल्लाह लुकाउन.
37:8 हरेक सल्लाहकार सल्लाह प्रदान गर्दछ, तर केही मात्र आफूलाई लागि सल्लाहकार छन्.
37:9 एक सल्लाहकारले आफ्नो प्राण रक्षा. र आफ्नो चासो पहिल्यै के हो थाहा. लागि उसले आफ्नो प्राण देखि विचार गठन हुनेछ.
37:10 अन्यथा, उहाँले भुइँमा मा एक Signpost सेट हुन सक्छ, र उहाँ तिमीहरूका भन्लान्:
37:11 "तपाईंको आफ्नै तरिका राम्रो छ।" तर त्यसपछि उहाँले तपाईं आइपर्छ के हेर्न दूरी मा खडा हुनेछ.
37:12 एक नास्तिक मान्छे संग पवित्रता छलफल छैन, न त एक साथ न्याय गर्ने अन्यायपूर्ण छ. तपाईं एक प्रतिद्वन्द्वी छ जो उनको बारेमा एक महिला बोल्न हुँदैन, न त युद्ध बारे एउटा कायता संग, न त अत्युक्ति बारेमा व्यापारी संग, न त बिक्री बारेमा खरीदार संग, न त धन्यवाद दिने एक द्घेष मानिस संग,
37:13 न त piety बारेमा impious संग, न त इमानदारी बारेमा बेइमान संग, न त काम अन्य प्रकारका बारेमा क्षेत्र कामदार संग,
37:14 न त वर्ष को अन्त बारेमा वर्षको लागि भाडामा लिएको कामदारको संग, न त ठूलो काम बारे अल्छी सेवक संग. तपाईं सल्लाह को कुनै पनि कुरा यी व्यक्ति कुनै ध्यान तिर्न गर्नुपर्छ.
37:15 तर एक पवित्र मानिस संग निरन्तर हुन, कसैसँग जसलाई तपाईं परमेश्वरको डर पालन थाहा,
37:16 जसको प्राण तपाईंको आफ्नै प्राण संग सम्झौता छ, र जो, तपाईं अन्धकारमा falter गर्दा, आफ्नो दुःखको साझा हुनेछ.
37:17 र आफैलाई भित्र राम्रो सल्लाह को एक हृदय स्थापना. यो भन्दा तपाईंलाई ठूलो उपयोगिता को केहि पनि छैन को लागि.
37:18 कुनै पनि समयमा, पवित्र मानिसको प्राण एक उच्च स्थानमा बसेर सात सचेत watchmen भन्दा बढी सत्य घोषणा.
37:19 तर सबै कुराहरूको, सबैभन्दा उच्च प्रार्थना, उहाँले सत्य मा आफ्नो बाटो निर्देशन ताकि.
37:20 आफ्नो सबै काम मा, साँचो शब्द तपाईं लिनुअघि गरौं, हरेक काम अघि स्थिर सल्लाह.
37:21 एक दुष्ट शब्द हृदय परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ. कुरा को चार प्रकार उत्पन्न हृदय देखि: राम्रो र नराम्रो, जीवन र मृत्यु. र जिब्रो निरन्तर आफ्नो शासक छ. त्यहाँ धेरै को एक चतुर शिक्षक मानिस हो, र अझै यो आफ्नै प्राण गर्न बेकारी छ.
37:22 अनुभव को एक मानिसले धेरै सिकाउनुभएको छ, र यो आफ्नो प्राण गर्न सुखद छ.
37:23 जसले मात्र लफ्फाजी बताइएको घृणित छ; उहाँले हरेक कुरा मा धोका हुनेछ.
37:24 ग्रेस प्रभु तिनलाई दिइएको छैन. उहाँले सबै बुद्धिको deprived गरिएको छ लागि.
37:25 त्यहाँ आफ्नै प्राण भित्र बुद्धिमानी हो जो बुद्धिमान् मानिसलाई छ, र उहाँको समझ को फल प्रशंसनीय छ.
37:26 बुद्धिमान् मानिस आफ्नै मान्छे निर्देशन, र उहाँको समझ को फल विश्वासी छ.
37:27 बुद्धिमान् मानिस आशिषहरूले भरिएको हुनेछ, र जो हेर्न ती उहाँको प्रशंसा हुनेछ.
37:28 मानिसको जीवन दिन को संख्या मा छ. तर इस्राएलका दिन अनगिन्ती छन्.
37:29 बुद्धिमान् मानिस मान्छे बीच सम्मान पाउनेछन्, र आफ्नो नाम सदाको मा बस्नेछन्.
37:30 छोरा, आफ्नो जीवन मा आफ्नो आफ्नै मन परीक्षण, र यदि यो अभाव छ, तपाईं यसलाई अख्तियार दिन हुँदैन.
37:31 सबै कुरा सबै व्यक्तिका लागि फिटिङ छैन लागि, र कुरा गर्न हरेक प्रकारको हरेक प्राणी गर्न राजी छ.
37:32 कुनै पनि भोज समयमा उत्सुक हुन चयन छैन, र तपाईं कुनै पनि खाना तिर अतिरिक्त कदम चाल्न हुँदैन.
37:33 अत्यधिक खाने त्यहाँ अथवा अशक्तताले हुनेछ लागि, र gluttony पनि रोग निम्ति जारी हुनेछ.
37:34 अत्यधिक पिउने द्वारा, धेरै बितिसकेका छन्. तर abstains जसले आफ्नो जीवन थप्नेछ.
38:1 किनभने आवश्यकता को चिकित्सक आदर, र किनभने सबैभन्दा उच्च उहाँलाई सिर्जना.
38:2 सबै निको लागि परमेश्वरको हो, र त त्यो राजा देखि उपहार प्राप्त हुनेछ.
38:3 यस चिकित्सक को विशेषज्ञता उनको टाउको माथि हुनेछन्, र ठूलो मानिसहरूको दृष्टि मा, उहाँले प्रशंसा हुनेछ.
38:4 सबैभन्दा उच्च पृथ्वीबाट औषधि सिर्जना गरेको छ, र चतुर मानिस तिनीहरूलाई घृणा छैन.
38:5 छैन तीतो पानी काठ संग मिठो थियो?
38:6 यी कुराको लाभ मानिसहरू द्वारा मान्यता प्राप्त छ, र सबैभन्दा उच्च मानिसहरू यो ज्ञान दिइएको छ, ताकि उहाँले आफ्नो विचित्रताहरू मा सम्मान हुन सक्छ.
38:7 यी कुराहरू द्वारा, उहाँले निको पार्न वा तिनीहरूको दुःख mitigate हुनेछ, र फार्मासिस्ट सूथिंग nanodiamonds उपयोग गरदै गर्नेछ, र उहाँले औषधीको निको गठन हुनेछ, र त्यहाँ आफ्नो काम गर्न कुनै अन्त हुनेछ.
38:8 परमेश्वरको शान्ति लागि पृथ्वीको सतह मा छ.
38:9 छोरा, आफ्नो अशक्तताले मा, तपाईं आफैलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन, तर प्रभु प्रार्थना, र उहाँले तपाईंलाई निको पार्न हुनेछ.
38:10 बन्द टाढा पापबाट, र आफ्नो हात निर्देशन, र हरेक ठेस आफ्नो हृदय शुद्ध.
38:11 एक मिठाई भेटी दिन, र ठीक पीठो को एक स्मारक, र आफ्नो oblation fatten, तर पनि चिकित्सक एक स्थान दिन.
38:12 प्रभु लागि उहाँलाई सिर्जना. अनि त, उहाँलाई तपाईं प्रस्थान गरौं छैन, आफ्नो काम को लागि आवश्यक हो.
38:13 त्यहाँ एक समय छ लागि जब तपाईं आफ्नो हातमा पर्न सक्छ.
38:14 साँच्चै, तिनीहरूले प्रभु बिन्ती हुनेछ, उहाँले आफ्नो उपचार र उपायहरु निर्देशन ताकि, जीवन आफ्नो बाटो खातिर.
38:15 जसले उसलाई चिकित्सक को हातमा पतन हुनेछ गरे जो एक को दृष्टि मा पाप.
38:16 छोरा, मरेका भन्दा आँसु बगाउन, र रूनु सुरु, यदि तपाईं dreadfully भोगे थियो रूपमा. र न्याय अनुसार, आफ्नो शरीर ढाक्ने, र तपाईं आफ्नो दफन बेवास्ता गर्नु हुँदैन.
38:17 र तपाईं तीता मा तल डुब्नु हुनेछ हुनत, एक दिनको लागि आफ्नो शोक सहन, र त्यसपछि आफ्नो दुःख मा सान्त्वना हुन.
38:18 र आफ्नो शोक पूरा, आफ्नो गुण अनुसार, किनभने यो हानि को एक वा दुई दिनको लागि.
38:19 अहिलेसम्म दुःख मृत्यु hastens र बल overwhelms, र हृदयको दुःख घाँटी तल धनुष.
38:20 जब एक लगिएको छ, शोक रहलपहल. तर एक गरिब मानिस को स्रोतहरू आफ्नो हृदयमा पाइन्छ.
38:21 तपाईं दुःख आफ्नो हृदय भन्दा दिन हुँदैन, तर यो तपाईं टाढा धक्का. र धेरै अन्त सम्झना.
38:22 यो भूल गर्न इच्छुक हुन छैन; छ लागि कुनै फिर्ता खोल्दै. अन्यथा, यो तपाईं लाभ उठाउन छैन, र तपाईं आफै ठूलो हानि हुनेछ.
38:23 मेरो न्याय आपत्ति कल. त्यसैले यसलाई पनि लागि हुनेछ. हिजो मेरो हो, र आज तपाईंको हो.
38:24 जब मृतक बाँकी छ, आफ्नो स्मृति बाँकी गरौं. र आफ्नो आत्माको प्रस्थान मा उहाँलाई सांत्वना.
38:25 एक शास्त्राी को बुद्धि अवकाश आफ्नो समय मा पाइन्छ. त्यसैले जसले गर्न बुद्धि पाउन कम हुनेछ छ.
38:26 बुद्धि कसैले हलो धारण गर्ने भरिएको हुनेछ के संग, र अगाडी बैलों ड्राइव कि गाई ठेस को जो दावा, र यी मेहनत मा कब्जा छ, र जसको मात्र कुराकानी साँढेको को सन्तान बारेमा छ?
38:27 उहाँले furrows को पाराले जोतेर आफ्नो सोचाइमा दिनेछु, र गाई को fattening आफ्नो सतर्कता.
38:28 त्यसैगरि, हरेक शिल्पी र कालिगढ, जसले दिनमा रूपमा साथै रात शिल्प, जो graven छाप कुँदनुहुन्छ, र जो, आफ्नो परिश्रम द्वारा, छवि भिन्न, मूर्तिको स्वरूपमा आफ्नो सोचाइमा दिनेछु. र उहाँले आफ्नो सतर्कता गरेर काम पूरा गर्नेछौं.
38:29 को लोहार, आफ्नो लोहोराले चलाउने फलामको अचानु द्वारा बसिरहेका र फलाम को काम विचार, यस्तै छ. आगो देखि बाफ आफ्नो शरीर singes, र उहाँले आगोको भट्टी को गर्मी विरुद्ध संघर्ष.
38:30 हथौडा को आवाज उहाँका कान मा कहिल्यै छ, र आफ्नो आँखा पनि Ironwork को ढाँचा मा छ.
38:31 उहाँले आफ्नो काम पूरा गर्न आफ्नो हृदय दिन्छ, र आफ्नो सतर्कता पूर्णता यसलाई adorns.
38:32 को पटर, आफ्नो काम मा बसिरहेका र आफ्नो खुट्टा संग पाङ्ग्रा खोल्दै, यस्तै छ. उहाँले आफ्नो काम को लागि एक नित्य चासो मा बसे छ, र उसले गर्छ कि सबै मा एक ताल छ.
38:33 उहाँले आफ्नो हात संग माटो खेल्छ, र उहाँले आफ्नो खुट्टा माथि आफ्नो शक्ति bends.
38:34 उहाँले ग्लाजिंग को पूरा गर्न आफ्नो हृदय भन्दा दिनेछु, र आगोको भट्टी को सफाई गर्न आफ्नो सतर्कता.
38:35 यी सबै व्यक्ति आफ्नै हात भरोसा, र प्रत्येकले आफ्नै कला मा बुद्धिमानी हुन्छ.
38:36 यी व्यक्ति बिना, शहर बनाइएको छ.
38:37 तर तिनीहरूले न बसाबास गर्नु न त शहर मा वरिपरि हिंड्न हुनेछ. र तिनीहरूले चर्च गर्न मार्फत जाने.
38:38 तिनीहरूले न्यायकर्ताहरूको सिट मा बस्न छैन, र तिनीहरूले न्यायको एक उर्दी बुझ्न छैन. र तिनीहरूले स्पष्ट अनुशासन र न्याय बनाउन हुनेछ, र तिनीहरूले Parables बुझ्न फेला परेन गरिनेछ.
38:39 तर तिनीहरू संसारको राज्य बलियो हुनेछ, र आफ्नो प्रार्थना आफ्नो कलात्मक कामहरू हुनेछ, आफ्नो प्राण लागू, र सबैभन्दा उच्च को व्यवस्था खोजी.
39:1 बुद्धिमान् मानिस सबै प्राचीन को बुद्धि खोज्न हुनेछ, र उहाँले अगमवक्ताहरूलाई मा कब्जा गरिनेछ.
39:2 उहाँले प्रसिद्ध मानिसहरू शब्दहरू सुरक्षित गर्नेछ, र उहाँले Parables को subtleties तिनीहरूलाई साथ प्रविष्ट हुनेछ.
39:3 उहाँले उपदेश को लुकेका अर्थ खोजी हुनेछ, र उहाँले Parables को रहस्यहरुलाई परिचित हुनेछ.
39:4 उहाँले ठूलो मानिसहरूको बीचमा मन्त्री हुनेछ, र त्यो मुख्य नेता को दृष्टि देखिने.
39:5 उहाँले विदेशी राष्ट्रका देशमा पास हुनेछ. उहाँले मानिसहरूलाई असल र खराब परीक्षण गर्नेछ.
39:6 पहिलो प्रकाश मा, उहाँले उसलाई गरे जो प्रभुको जागा रहने सम्बन्धमा आफ्नो मन प्रस्ताव गर्नेछ, र त्यो सबैभन्दा उच्च को दृष्टि प्रार्थना हुनेछ.
39:7 उहाँले प्रार्थना आफ्नो मुख खोल्न हुनेछ, र उहाँले आफ्नो अपराध लागि supplication गर्नेछ.
39:8 यदि ठूलो प्रभु इच्छुक छ लागि, उहाँले समझ को आत्माले उहाँलाई भर्न हुनेछ.
39:9 र उहाँले निस्कने वर्षा वर्षा जस्तै आफ्नो बुद्धिको eloquence पठाउने, र आफ्नो प्रार्थनामा, उहाँले प्रभुको स्वीकार गर्नेछ.
39:10 र उहाँले आफ्नो सल्लाह र आफ्नो अनुशासन निर्देशन हुनेछ, र उहाँले आफ्नो रहस्यहरुलाई मनन गर्नेछ.
39:11 उहाँले आफ्नो सिद्धान्त स्पष्ट अनुशासन गर्नेछ, र उहाँले हुनेछ प्रभुको करारको व्यवस्थामा महिमा.
39:12 धेरै व्यक्ति मिलेर उहाँको बुद्धि प्रशंसा हुनेछ, र यो कहिल्यै निर्मूल हुनेछ, सबै उमेरका लागि.
39:13 उहाँलाई को स्मृति बिलाएर जान्छ छैन, र आफ्नो नाम खोजे गरिनेछ पुस्ता देखि पुस्ता गर्न.
39:14 यो मानिसहरूका आफ्नो बुद्धि घोषणा हुनेछ, र चर्च उहाँको प्रशंसा घोषणा हुनेछ.
39:15 जबकि त्यो रहिरहन्छ, उहाँले एक हजार भन्दा बढी नाम पछि छोड्दा, र उहाँले आराम हुनेछ जब, यसलाई आफ्नो लाभ हुनेछ.
39:16 म थप मनन गर्नेछ, म व्याख्या गर्न सक्छ भन्ने त. म एक आवेग भरिएको छ लागि.
39:17 एक स्वरमा, उहाँ भन्नुहुन्छ: मलाई सुन्न, ईश्वरीय फल. तपाईं फल फलाउन पर्छ, पानी को प्रवाह छेउमा लगाए गुलाब जस्तै.
39:18 तपाईं एक मिठाई खुशबू पाउनेछ, लेबनान को Cedars जस्तै.
39:19 फूल संग फूल, को लिली जस्तै, र एक खुशबू विस्तृत, र हाँगा अनुग्रह मा छोड्दा, र canticles संग प्रशंसा दिन, र आफ्नो काम मा प्रभु आशीर्वाद.
39:20 आफ्नो नाम वैभवशाली दिन, र आफ्नो ओठको आवाज र आफ्नो मुख को canticles संग stringed साधन संग र उहाँलाई स्वीकार. र उहाँलाई यति प्रशंसा, तपाईं स्वीकार गर्नेछ:
39:21 प्रभुको सबै काम धेरै राम्रो हो.
39:22 आफ्नो शब्द मा, पानी अझै पनि खडा, यदि सँगै ढेर रूपमा. र आफ्नो मुखको वचनहरू, पानी समावेश थिए, पानी basins मा भने.
39:23 यसलाई आफ्नो precept द्वारा खुसी बनाएको छ, र त्यहाँ आफ्नो मुक्ति कुनै कमी छ.
39:24 सबै शरीरका कामहरू आफ्नो दृष्टि हो, र आफ्नो आँखा लुकेका केही छ.
39:25 आफ्नो Gaze सदाको देखि सदाको छ, र केही आफ्नो दृष्टि मा एक आश्चर्य छ.
39:26 यो भने हुन गरौं: "यो के हो?"वा, "त्यो के हो?"सबै कुराको लागि आफ्नो समय मा मांग गरिनेछ.
39:27 उहाँको आशिष् नदी जस्तै overflowed छ.
39:28 एक बाढी सूखी भूमि inundates समान तरिकामा, त्यसैले पनि आफ्नो क्रोध उहाँलाई खोजे छैन कि मानिसहरूले पाउनेछन्.
39:29 यस्तै उहाँले सुक्खा भूमिमा पानी बन्द गर्ने, र पृथ्वी ड्राई गरे, र आफ्नो मार्ग आफ्नो यात्रा को लागि निर्देशित गरिएको छ जस्तै, त्यसैले पनि पापी आफ्नो क्रोध अघि चुक्छौं हुनेछ.
39:30 सुरुदेखि, राम्रो कुरा राम्रो निम्ति सिर्जना, र यस्तै, राम्रो र नराम्रो कुरा दुष्ट निम्ति हो.
39:31 मानिसहरूको जीवनको लागि आवश्यक मुख्य कुरा हो: पानी, आगो, र फलाम, नुन, दूध, र रोटी लागि आटे, र मह, र अङ्गुरको क्लस्टर, र तेल, र वस्त्र.
39:32 यी सबै कुराहरू पवित्र भएकाहरूलाई असल लागि प्रयोग गरिने, तर तिनीहरूले impious द्वारा र पापी द्वारा दुष्ट प्रयोग गर्न बन्द गरिने.
39:33 त्यहाँ बदला लागि सिर्जना गरिएका आत्माको हो, र तिनीहरूले उतेजना आफ्नो torments बलियो.
39:34 को Consummation समयमा, तिनीहरूले तिनीहरूको बल अगाडी खन्याउन हुनेछ. तिनीहरूले गरे जो एक को उतेजना शान्त गर्नु हुनेछ.
39:35 आगो, असिना, अनिकाल, र मृत्यु: सबै यी बदला लागि सिर्जना.
39:36 जङ्गली जनावर को दाँत, र बिच्छीको, र serpents, र भाला: यी सबै impious मा बदला लिन, बोल्न विनाश निम्ति.
39:37 आफ्नो आदेश मा, तिनीहरूले भोज हुनेछ. र तिनीहरूले पृथ्वीमा तिनीहरूले आवश्यक नभएसम्म तयार गरिनेछ. र आफ्नो समय मा, तिनीहरूले उहाँको वचन बेवास्ता छैन.
39:38 यस कारण, सुरुदेखि, म बलियो भयो, र म ध्यान लगाउँछु, र म विचार, र म लेखन यी कुराहरू राख्न छन्.
39:39 प्रभुको सबै काम राम्रो हो, र उहाँले आफ्नो घण्टामा प्रत्येक कामको लागि प्रदान गर्नेछ.
39:40 यो भने हुन गरौं: सबै कुरा आफ्नो समय मा परीक्षण गरिने लागि "यो भन्दा झन् खराब हुन्छ।".
39:41 र अब, सारा हृदय र मुखले, उहाँलाई प्रशंसा दिन, र प्रभुको नाम आशीर्वाद.
40:1 ठूलो पेशा सबै मानिसहरू लागि सिर्जना गरिएको थियो, र एक भारी जुवा आदम छोराहरू मा छ, आफ्नो आमाको गर्भबाट आफ्नो प्रस्थान को दिन देखि, पनि सम्म सबै को आमा मा आफ्नो दफन दिन:
40:2 आफ्नो विचार, र आफ्नो हृदयको डर, आफ्नो कल्पना आशा, र आफ्नो अन्त को दिन,
40:3 उहाँबाट जो एउटा भव्य सिंहासन मा बस्छन, पृथ्वी र खरानी पनि उहाँलाई जसले नम्र छ,
40:4 उहाँबाट जो जलकुंभी पहनता र मुकुट भालु, पनि उहाँलाई जो कुनै न कुनै सनी ढाकिएको छ: क्रोध, ईर्ष्या, खैलाबैला मच्चाए, restlessness, र मृत्युको डर, नित्य क्रोध र contention.
40:5 र आफ्नो ओछ्यानमा मा बाँकी समयमा, रात को निद्रामा आफ्नो ज्ञान परिवर्तन.
40:6 त्यहाँ सानो वा कुनै बाँकी छ, सो उहाँबाट लिएको छ, मा राखन हेरेको एक दिन भने.
40:7 उहाँले आफ्नो हृदयको एक दृष्टि द्वारा विचलित छ, उहाँले युद्धका एक दिनमा बच थियो भने. आफ्नो मुक्ति को समय मा, उहाँले उठेर कुनै डर थियो कि छक्क परे.
40:8 यो सबै प्राणी संग यति छ, मानिस देखि पनि गाई गर्न, तर पापी मा यो ठूलो रूपमा सात पटक हो.
40:9 यो थप्न: मृत्यु, रक्तपात, contention, र भाला, दमन, अनिकाल, र कष्ट, र scourges.
40:10 यी सबै कुराहरू किनभने iniquity को सिर्जना गरिएको छ, ठूलो बाढी गरिएको थियो कि र यो iniquity कारण छ.
40:11 पृथ्वीको छन् कि सबै कुरा पृथ्वीमा फर्कन पर्छ, र सबै पानी समुद्रमा फर्कन पर्छ.
40:12 सबै घूसखोरी र iniquity टाढा सखाप हुनेछ, तर विश्वास सधैंभरि खडा गर्नेछु.
40:13 यस अन्यायपूर्ण को पदार्थ नदी जस्तै माथि सुक्खामा हुनेछ, र एक बर्षा र आँधी मा ठूलो गर्जन जस्तै हल्ला संग टाढा जानु हुनेछ.
40:14 उहाँले आफ्नो हात खुल्छ जब, उहाँले आनन्दित हुनेछ. त्यसैले transgressors को Consummation मा दूर पारित हुनेछ.
40:15 को impious को descendents धेरै शाखा उत्पादन छैन, तिनीहरूले एक रक को किनारा मा फोहोर जरा तुलना हुन सक्छ.
40:16 सामा, जो हरेक पानी माथि र नदी को बैंकहरू छेउमा बढ्न, सबै घाँस अघि जरैसमेत उखेलिने गरिनेछ.
40:17 ग्रेस आशिष् को एक स्वर्ग जस्तै छ, र कृपा सदाको लागि जारी.
40:18 कामदारको जीवन, जब पर्याप्त छ के सामग्री, मीठो हुनेछ, र यो तपाईं एक खजाना पाउनुहुनेछ.
40:19 छोराहरू, र शहर को निर्माण, एउटा नाम स्थापना, तर एक बेदाग पत्नी यी कुराहरू माथि सब गरिनेछ.
40:20 वाइन र संगीत हृदय आनन्दित, तर बुद्धि प्रेम तिनीहरूलाई दुवै माथि छ.
40:21 को बांसुरी र psaltery एक मिठाई माधुर्य बनाउन, तर एक सुखद शब्द तिनीहरूलाई दुवै माथि छ.
40:22 आफ्नो आँखा भव्यता र सुन्दरता कामनाहरु, तर हरियो घाँसको चउर क्षेत्रहरू यी कुराहरू माथि छन्.
40:23 एक मित्र र साथी समयमा एक अर्को पूरा, तर तिनीहरूलाई दुवै माथि श्रीमान्सँगै एक पत्नी छ.
40:24 भाइहरूलाई कष्ट को समय मा एक मद्दत छन्, तर कृपा मुक्त गर्नु हुनेछ, थप तिनीहरूले हुनेछ भन्दा त.
40:25 सुन र चाँदीको खुट्टा लागि दृढ स्थिति प्रदान, तर राम्ररी बोलेका सल्लाह तिनीहरूलाई दुवै माथि छ.
40:26 क्षमता र शक्ति हृदय उचाली, तर प्रभुको डर यी कुराहरू माथि छ.
40:27 त्यहाँ प्रभुको डर कुनै हानि छ, र यो सहायताको लागि अनुरोध गर्न कुनै आवश्यकता छ.
40:28 प्रभुको डर आशिष् को एक स्वर्ग जस्तै छ, र तिनीहरू सबै महिमा माथि यो ढाकिएको छ.
40:29 छोरा, आफ्नो जीवनकालमा तपाईंले indigent हुँदैन, यो राम्रो छ लागि गरिब हुन भन्दा मर्न.
40:30 अर्को मानिसको तालिका देखिन्छ जसले उसलाई जीवन जीवन को एक तरिका रूपमा छैन लाग्यो गर्नुपर्छ. उहाँले अर्को मानिसको खाना आफ्नो जीवन फीड लागि.
40:31 तर एक disciplined र राम्रो-सिकाउनुभयो मानिस आफूलाई को हेरविचार गर्नेछन्.
40:32 Scarcity को imprudent मुख गर्न मीठा जस्तो हुनेछ, तर आगो आफ्नो पेट मा बाल्न हुनेछ.
41:1 हे मृत्यु, कसरी तीतो तपाईं को स्मृति छ: आफ्नो पदार्थ शान्ति छ मानिस गर्न,
41:2 एक शान्त मानिसलाई, र उसलाई जसको तरिका सबै कुरामा ठीक निर्देशित छन् गर्न, र जो अझै पनि पोषण लिन बल छ.
41:3 हे मृत्यु, तपाईंको न्याय को indigent मानिस राम्रो छ, र उसलाई जसको बल गर्न कम छ,
41:4 जो बुढेसकालमा कारण असफल भएको छ, र सबै कुरा बारे चिन्तित गर्ने छ, र विश्वास नगर्ने मानिसलाई गर्ने धैर्य गुमाएको छ.
41:5 मृत्युको न्याय भय गर्न छनौट छैन. तपाईंले पहिले भयो कि कुरा सम्झना, र कुरा तपाईं पछि हुनेछ कि. यो न्याय सबै प्राणी मा प्रभु हो.
41:6 र तपाईं के हुनेछ सबैभन्दा उच्च राम्रो-खुसी छ, दस मा कि, वा एक सय, वा एक हजार वर्ष.
41:7 मृत्यु लागि जीवनको कुनै दोषारोप छ.
41:8 पापी छोराहरू, र impious को घरहरू तरिका आफ्नो समय पास गर्नेहरूलाई, abominations छोराहरू बन्न.
41:9 पापी छोराहरू उत्तराधिकार नष्ट हुनेछ, र नित्य निरादर सन्तान जन्माएर हुनेछ.
41:10 एक impious बुबा छोराहरू गुनासो हुनेछ, तिनीहरूले उहाँलाई किनभने निरादर छन्.
41:11 तपाईं धिक्कार, impious मानिसहरू, जो सबैभन्दा उच्च प्रभु को व्यवस्था त्यागेर छ!
41:12 र जब तपाईं जन्म छन्, तपाईं एक श्राप मा पैदा हुनेछ; जब तपाईं मर्न र, आफ्नो भाग एक श्राप हुनेछ.
41:13 पृथ्वी छन् कि सबै कुरा पृथ्वीमा फर्कन पर्छ. त्यसैगरि, को impious perdition निम्ति एउटा श्राप बाट अगाडि बढ्न हुनेछ.
41:14 मानिसहरूको शोक गर्ने तरिकामा तिनीहरूको शरीर छ, तर impious नाम टाढा सखाप हुनेछ.
41:15 आफ्नो राम्रो नाम चासो छ. यो लागि जारी हुनेछ, थप त एक भन्दा हजार अनमोल र महान् सम्पत्तिहरू.
41:16 एक असल जीवन दिन को आफ्नो नम्बर छ, तर राम्रो नाम सधैंभरि जारी हुनेछ.
41:17 छोराहरू, अभ्यास अनुशासन शान्तिमा. के प्रयोगको लागि या त लुकाइन् बुद्धि मा छ, वा पता नलागेका धन?
41:18 राम्रो बुद्धि लुकाउँछ मानिस भन्दा आफ्नो मूर्खता लुकाउँछ मानिस छ.
41:19 यद्यपि साँच्चै, मेरो मुख बाट अगाडि बढ्न जो यी कुराहरू आदर छ.
41:20 यो हरेक श्रद्धाको पालन गर्न राम्रो छैन लागि. र सबै कुरा आफ्नो विश्वास सबै व्यक्ति खुसी छैन.
41:21 यी कुराहरू लाज छ: बुबा र आमा अघि व्यभिचारको, र झूट को पहिलो नेता र शक्तिशाली अघि,
41:22 शासक वा न्यायाधीश अघि अपराध, मण्डलीको वा मान्छे अघि iniquity को,
41:23 एक साथी वा मित्र अघि अन्याय को, तपाईं बाँचिरहेको स्थानको र,
41:24 चोरी को, परमेश्वरको सामु सत्य को र, करारको को र, को रोटी खान reclining, र दिने वा प्राप्त मा deceitfulness को,
41:25 मौन को जसले तपाईंलाई अभिवादन ती अघि, को व्यभिचार को एक महिला मा देख, र एक नातेदार आफ्नो अनुहार averting.
41:26 तपाईं आफ्नो छिमेकीलाई आफ्नो अनुहार हटाउनु हुँदैन, न त एक भाग लिनुपर्छ टाढा र पुनर्स्थापना छैन.
41:27 तपाईं अर्को मानिसको पत्नी मा ताक हुँदैन, र न त आफ्नो handmaid पछि लाग्न, न त उनको ओछ्यानमा दृष्टिकोण.
41:28 मित्र अघि धिक्रकार भाषण जोगिन, र तपाईं दिन जब, तपाईं दोष राख्न हुँदैन.
42:1 तपाईं एक लुकेका शब्द प्रकट सुनेको दावी दोहोरिन हुँदैन. अनि तेस्पछि, साँच्चै, तपाईं लाज बिना हुनेछ, र तपाईं सबै मानिसहरूको दृष्टि मा अनुमोदन पाउनुहुनेछ. तपाईं कसैलाई को प्रतिष्ठा स्वीकार गर्नुपर्छ, तपाईं पाप भनेर त, न त निम्न कुराहरू कुनै पनि हैरान गर्नुपर्छ:
42:2 सबैभन्दा उच्च र आफ्नो करारको व्यवस्थामा, वा न्याय दिने गरेर impious सफाइ;
42:3 साथीहरू र सँगी यात्री बीच एउटा शब्द, वा साथीहरूबाट को उत्तराधिकार वितरण;
42:4 मापनहरू र वजन को निष्पक्षता मा, वा धेरै वा थोरै प्राप्त;
42:5 खरीद र बातचीत को भ्रष्टाचार द्वारा, वा छोराछोरीको प्रशस्त अनुशासनमा, या रगत एउटा दुष्ट दास छेउमा पैदा मा.
42:6 एक छाप एक दुष्ट पत्नी भन्दा राम्रो छ.
42:7 जहाँ धेरै हात छन्, मुहर र नम्बर र वजन सबै कुराहरू छुटकारा; र साँच्चै, दिन र लेखन मा सबै प्राप्त.
42:8 तपाईं बेहोस सही मा लाज छैन गर्नुपर्छ, को मूर्ख, र ती युवाहरूले जसले प्राचीन न्याय हुनेछ. र त तपाईं सबै कुरामा राम्रो-निर्देशन र सबै जीवित को दृष्टि मा राम्रो-अनुमोदित हुनेछ.
42:9 आफ्नो छोरी को लागि एक पिता को सतर्कता लुकेको छ, र उनको लागि आफ्नो चासो आफ्नो निद्रामा दूर लिन्छ. लागि सायद, उनको किशोरावस्था मा, त्यो वयस्कता मा ल्याए हुन सक्छ. या त्यो श्रीमान्सँगै बसोबास गर्दा, त्यो घृणित बन्न सक्छ.
42:10 उनको virginity मा, त्यो defiled हुन सक्छ, त्यसपछि त्यो उनको बुबाको घरमा गर्भवती हुन पाउन सकिन्छ. अथवा, त्यो उनको पति संग बसोबास गर्दा, त्यो आवारा सक्छ, वा कम से कम बाँझो बन्न.
42:11 आत्म-indulgent छोरी भन्दा नजिकको हेर्ने राख्न. अन्यथा, केही समय, उनले आफ्नो शत्रुहरू अघि निरादर मा तपाईं ल्याउन सक्छ, र शहरमा disrepute मा, र मानिसहरूका बीचमा निन्दाले मा, र त त्यो तपाईं मान्छे को भीड अघि confound सक्छ.
42:12 त्यो हरेक मानिसको सुन्दरता मा हेर्न छनौट गर्न हुँदैन, र त्यो विवाहित महिलाहरु को बीचमा उनको समय खर्च गर्न छनौट हुँदैन.
42:13 एक किरा लागि लुगा देखि निस्कने जान्छ, र एक मानिस भन्दा iniquity एक महिला बाट निस्कने जान्छ.
42:14 अझै एक मानिस भन्दा iniquity एक विवाहित महिला यदि भन्दा उनको लागि राम्रो छ, उनको लाभ उठाउन खोजिरहेका, बरु भ्रम र निरादर मा उनको जान्छ.
42:15 र अब, म प्रभुको काम सम्झना हुनेछ, र म मैले देखेको के घोषणा हुनेछ. प्रभुको शब्दहरू आफ्नो काम मा हो.
42:16 सूर्य illuminates र सबै कुराहरू ठान्नुहुन्छ, र यसको काम प्रभुको महिमा पूर्णतामा देखाउँछ.
42:17 प्रभु आफ्ना सबै चमत्कार वर्णन गर्न पवित्र जनहरूलाई कारण छैन, जो शक्तिशाली प्रभु दृढ आफ्नो महिमा मा स्थापित छ?
42:18 उहाँले पातालमा र मानिसहरूको हृदय जांच छ. र उहाँले आफ्नो astuteness छलफल भएको छ.
42:19 प्रभु लागि सबै ज्ञान comprehends, र उहाँले पटक को संकेत मा gazed छ: विगतका कुराहरू घोषणा, साथै भविष्य कुराहरू रूपमा, र लुकेको कुरा को निशान प्रकट.
42:20 कुनै विचार उहाँलाई unnoticed द्वारा बित्दै, र कुनै शब्द उहाँबाट नै ढाकछोप गर्न सक्नुहुन्छ.
42:21 उहाँले आफ्नो बुद्धिको भव्य काम सजी छ. उहाँले सदाको अघि छ र पनि सदाको निम्ति. र केही थप गर्न सकिन्छ,
42:22 र केही लगिएको गर्न सकिन्छ. र उहाँले कुनै पनि सल्लाहकार कुनै आवश्यकता छ.
42:23 हे आफ्ना सबै काम कसरी मनमोहक छन्! र हामी विचार सबै एक स्पार्क तर छ.
42:24 यी सबै काम अवस्थित, र तिनीहरूले वर्तमान युगमा रहन, र तिनीहरू सबै हरेक उद्देश्य उहाँलाई पालन.
42:25 सबै कुरा दुई-गुना छन्, एक सामना अर्को, र उहाँले अभाव हुन केहि भएको छैन.
42:26 उहाँले राम्रो रूपमा प्रत्येक कुरा पुष्टि भएको छ. र जो हुनेछ उहाँको महिमा beholding को टायर?
43:1 उच्च मा आकाश आफ्नो सौन्दर्य छ; यो महिमा को एक दर्शनमा स्वर्गको सौन्दर्य छ.
43:2 सूर्य, यसको उपस्थिति मा, यसको यात्रा घोषणा; यो आश्चर्य को एक साधन हो, सबैभन्दा उच्च को काम.
43:3 midday मा, यो पृथ्वी scorches. र यसको गर्मी को उपस्थिति मा, जो सहन गर्न सक्षम हुनेछ? यो गर्मी को आफ्नो काम मा दन्किरहेको को Custodian जस्तै छ.
43:4 तीन तरिकामा, सूर्य प्रेरित: हिमालहरू scorching, आगोको रेज उत्सर्जन, र यसको बीम संग चमक आँखा अन्धा गर्न सक्ने.
43:5 ठूलो बनाइएको गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ, र उहाँको वचन मा, यसको यात्रामा यो हतारिंदै.
43:6 र चन्द्र, यसको सबै चरणहरु मा, को मौसम चिनो र समय को एक चिन्ह हुन गर्दछ.
43:7 चन्द्र देखि भोज दिन चिन्ह छ; यसलाई आफ्नो Consummation मा diminishes जो ज्योति हो.
43:8 एक महिना यसको चरणहरु अनुसार नाम, यसको culmination मा सुन्दर वृद्धि.
43:9 यसलाई उच्च मा सेनाले एक साधन हो, स्वर्गको आकाश मा gloriously चमक.
43:10 ताराहरू महिमा स्वर्गमा को सौन्दर्य छ; प्रभु उच्च मा विश्वको illuminates.
43:11 पवित्र शब्दहरू मा, तिनीहरूले न्यायको लागि खडा, र तिनीहरूले सतर्कता कहिल्यै असफल हुनेछ.
43:12 इन्द्रेणी विचार, र यो गरे जो एक आशीर्वाद; यसलाई आफ्नो शोभा धेरै सुन्दर छ.
43:13 यसलाई आफ्नो महिमा को सर्कल संग आकाश शामिल; सबैभन्दा उच्च हातमा यो देखा गरे.
43:14 आफ्नो आदेश द्वारा, उहाँले हिउँ hastens, र उहाँले आफ्नो न्याय व्यक्त गर्न बिजुली मा spurs.
43:15 जस्तै तरिका, आफ्नो storehouses खोलिएका छन्, र बादल चरा जस्तै बाहिर उड.
43:16 आफ्नो महानता द्वारा, उहाँले बादल अवस्थित छ, र hailstones भङ्ग गरिएको छ.
43:17 आफ्नो नजरमा, हिमालहरू हल्लाइन्छ गरिनेछ, र आफ्नो इच्छा द्वारा, दक्षिण हावा झटका हुनेछ.
43:18 आफ्नो गर्जन को आवाज पृथ्वीको मार्फत reverberate हुनेछ, उत्तरी देखि एक आँधी द्वारा, र whirlwind एक भेला.
43:19 र चरा जस्तै बगालको मा पृथ्वीमा लैंडिंग, उहाँले हिउँ तल पठाउँछ; र यसको उद्गम सलह एक दल को आगमन जस्तै छ.
43:20 आँखा यसको सफेदी को सौन्दर्य मा आश्चर्य छ, र हृदय यसको झर्ने मा चकित छ.
43:21 उहाँले पृथ्वीमा नुन जस्तै चिसो पोखाउनुहोस् हुनेछ. र यो freezes गर्दा, यो thistles को भन्दा माथि जस्तै हुनेछ.
43:22 चिसो उत्तरी हावा blows, र पानी क्रिस्टल मा freezes; यो पानी को हरेक सभा मा आराम हुनेछ, र यो एक छातीको पाता जस्तै पानी लुगा लगाउनु हुनेछ.
43:23 र यो पहाड निल्न हुनेछ, र उजाडस्थानमा बाल्न, र greenery बुझाने, आगो जस्तै.
43:24 सबै को लागि राहत बादलले को hurried आगमन छ. र नीच शीत गर्मी पूरा र यो overpower गर्न पुग्नु हुनेछ.
43:25 आफ्नो शब्द मा, हावा शान्त बढ्छ, र आफ्नो विचार गरेर, उहाँले पातालमा appeases, प्रभु लागि यो मा द्वीप लगाए छ.
43:26 समुद्र नेभिगेट गर्नेहरूलाई यसको perils वर्णन गरौं. र जब हामी यसलाई हाम्रो कान संग सुनेको छु, हामी आश्चर्य हुनेछ.
43:27 त्यहाँ शानदार र चमत्कारिक काम हो: जंगली जनावर को विभिन्न प्रकार, र गाई को सबै तरिका, र समुद्रको ठूलो प्राणीहरू.
43:28 उहाँमार्फत, आफ्नो यात्रा को अन्त पुष्टि, र उहाँको वचन द्वारा, सबै कुरा सँगै फिट.
43:29 हामी धेरै भन्न सक्छौं, र अझै अझै पनि शब्दहरूको लागि कमी. तर हाम्रो शब्दहरूको Consummation यो छ: उहाँले सबै कुरामा छ.
43:30 हामी के उहाँको महिमा गर्न के गर्न सक्षम हुनेछ? सर्वशक्तिमान लागि आफूलाई सबै माथि आफ्नै काम छ.
43:31 प्रभु भयानक छ, र अति ठूलो, र आफ्नो शक्ति अद्भुत छ.
43:32 प्रभु धेरै तपाईं सक्षम छन् रूपमा महिमा, अझै अझै पनि उहाँले टाढा यो भन्दा बढी हुनेछ. उहाँको वैभवशाली लागि आश्चर्य परे छ.
43:33 प्रभु आशीर्वाद र उहाँलाई उच्च पार्ने, रूपमा सक्षम छन् धेरै. तर उहाँले सबै प्रशंसा परे छ.
43:34 जब तपाईं उसलाई उच्च पार्ने, आफ्नो सबै क्षमता प्रयोग, र यो श्रम मा बन्द छैन. लागि उहाँलाई कहिल्यै पनि बुझ्न सक्छन्.
43:35 कसले उहाँलाई हेर्न र व्याख्या हुनेछ? र उसलाई जो महिमा हुनेछ, उहाँले सुरुदेखि छ रूपमा?
43:36 त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्, हामीलाई लुकेका, जो यी कुराहरू भन्दा ठूलो हो. हामी देखेको तर आफ्नो काम केही छन् लागि.
43:37 तर प्रभु सबै कुराहरू बनाएको छ, र उहाँले piety कदम चाल्न गर्नेहरूलाई बुद्धि दिनुभएको छ.
44:1 हामीलाई महिमा को मानिसहरू प्रशंसा गरौं, र आफ्नो पुस्ता हाम्रो पुर्खाहरूको.
44:2 प्रभु ठूलो महिमा गढा छ, आफ्नै वैभवशाली द्वारा, पुरातन समयका देखि.
44:3 त्यहाँ आफ्नो अधिकार शासन गर्नेहरू, ठूलो सद्गुण मानिसहरू, जो प्रूडेंस संग उपहार हो. त्यहाँ अगमवक्ताहरू बीच घोषणा गर्नेहरू, अगमवक्ताहरूको मर्यादा संग.
44:4 र वर्तमान पुस्ता शासन गर्नेहरूलाई छन्, प्रूडेंस को सद्गुण द्वारा, मानिसहरूको लागि धेरै पवित्र शब्दहरू.
44:5 त्यहाँ ती हुन् जो, आफ्नो कौशल द्वारा, सांगीतिक विषयवस्तुहरू रचना, संगीत धर्मशास्त्रको पद सेट ताकि.
44:6 त्यहाँ सद्गुण मा धनी मानिसहरू हो, जो सुन्दरता को एक अध्ययन बनाउन, जसले घरहरू मा peacefulness बस्ने.
44:7 आफ्नो पुस्ताहरू यी सबै प्राप्त महिमा, र तिनीहरूले दिनमा प्रशंसा भएको थियो.
44:8 तिनीहरूले जन्मिएको थिए गर्नेहरूका लागि एउटा नाम छोडेर, आफ्नो प्रशंसा वर्णन हुन सक्छ भनेर.
44:9 तर तिनीहरूलाई केही लागि, कुनै स्मारकको छ. तिनीहरूले अस्तित्व कहिल्यै थियो भने बितिसकेका छन्; र तिनीहरूले जन्म कहिल्यै थियो भने गरिएको भएका छन्, र तिनीहरूलाई साथ आफ्नो छोरा.
44:10 तर यी कृपा मानिसहरू थिए, जसको pious कामहरू असफल छैन.
44:11 राम्रो कुरा आफ्नो सन्तान जारी.
44:12 आफ्नो descendents पवित्र उत्तराधिकार छन्, र आफ्नो सन्तान को करार दह्रो.
44:13 र किनभने तिनीहरू, आफ्नो छोरा पनि सदाको निम्ति रहनेछ. आफ्नो सन्तान र आफ्नो महिमा छैन त्याग्ने गरिनेछ.
44:14 आफ्नो शरीर शान्ति मा गाडे थिए, र आफ्नो नाम मा बसोबास, पुस्ता देखि पुस्ता गर्न.
44:15 मानिसहरू आफ्नो बुद्धि घोषणा गरौं, र चर्च आफ्नो प्रशंसा घोषणा गरौं.
44:16 हनोक परमेश्वरको खुसी, र उहाँले प्रमोदवनमा हस्तान्तरण गरिएको थियो, उहाँले जातिहरूलाई पश्चात्ताप प्रस्ताव सक्छ भनेर.
44:17 नूह सिद्ध हुन फेला र बस थियो, र त्यसैले, क्रोधको समयमा, उहाँले एक मेलमिलाप थियो.
44:18 फलस्वरूप, त्यहाँ पृथ्वीको लागि बाँकी एक शेष थियो, ठूलो बाढी गरिएको थियो जब.
44:19 संसारको करार उसलाई राखिएको थियो, ताकि सबै प्राणी छैन ठूलो बाढी द्वारा दूर सखाप हुनेछ.
44:20 अब्राहाम राष्ट्रका असंख्य को ठूलो बुबा थियो, र कुनै एक महिमा उहाँलाई जस्तै हुन फेला परेन. उहाँले सबैभन्दा उच्च को व्यवस्था पालन, र उहाँसित करार गठन.
44:21 आफ्नो शरीरमा, उहाँले खडा गर्न करार कारण, र परीक्षण गर्दा, उहाँले विश्वासी हुन फेला परेन.
44:22 त्यसैले, सपथमा द्वारा, उहाँले आफ्नो मान्छे बीच उहाँलाई महिमा दिनुभयो, पृथ्वीको धूलो जस्तै उहाँलाई वृद्धि गर्न ताकि,
44:23 र तारा जस्तै आफ्नो सन्तानलाई उच्च पार्ने, र समुद्र समुद्र देखि तिनीहरूलाई एउटा उत्तराधिकार दिन, र नदी देखि पनि पृथ्वीको अन्त्य गर्न.
44:24 र उहाँले इसहाक तिर तरिका जस्तै काम, किनभने आफ्नो बुबा अब्राहाम.
44:25 प्रभु उहाँलाई सबै जातिका आशिष् दिनुभयो, र उहाँले याकूबका शिरमा आफ्नो करार पुष्टि.
44:26 उहाँले आफ्नो आशिष् उहाँलाई स्वीकार, र उहाँले तिनलाई एउटा उत्तराधिकार दिनुभयो, र उहाँले बाह्र कुल को भाग उहाँलाई वितरण.
44:27 र उहाँले तिनलाई कृपा मानिसहरू लागि संरक्षित, सबै शरीरका आँखा अघि अनुग्रह छ भेटिएन.
45:1 मोशाले परमेश्वर र मानिसहरू द्वारा प्रिय थियो. उहाँलाई को सम्झनामा एक आशिष् हो.
45:2 उहाँले महिमा मा पवित्र जनहरूलाई जस्तै उहाँलाई गरे, र उहाँले आफ्ना शत्रुलाई को डर उसलाई म्याग्निफाइन्ड, र उहाँले आफ्नो शब्द द्वारा ठूलो portents appeased.
45:3 उहाँले राजाहरूको दृष्टि उहाँलाई महिमा, र उहाँले आफ्नो मान्छे को दृष्टि मा उहाँलाई आज्ञा दिनुभयो, र उहाँले तिनलाई आफ्नो महिमा प्रकट.
45:4 उसले त्यसलाई आफ्नो विश्वास र नम्रता द्वारा पवित्र गरे, र उहाँले सबै प्राणी बीचबाट उहाँलाई छनौट.
45:5 उसलाई र आफ्नो आवाज उहाँले सुने लागि, र उहाँले बादलमा लगे.
45:6 र उहाँले आफ्नो उपस्थिति उहाँलाई आदेशहरू दिए, जीवन र अनुशासन को व्यवस्था संग, याकूबले आफ्नो करार र इस्राएलका उहाँका इन्साफ सिकाउन ताकि.
45:7 उहाँले आफ्नो भाइ हारून उच्च र लेवी कुलका उहाँलाई समान थिए ती.
45:8 उहाँले उसलाई अनन्त करार स्थापित, र तिनले मानिसहरूको पुजारीको दिनुभयो, र उहाँले उहाँलाई महिमा मा आशिष् गर्न कारण.
45:9 र उहाँले महिमित बेल्ट उहाँलाई encircled, र उहाँले महिमा को एक ओढ्ने उहाँलाई ढाकिएको, र उहाँले virtuous पोशाक उहाँलाई ताज पहनाया.
45:10 उहाँले खुट्टा एउटा लुगा उहाँमाथि राखिएको, र प्यान्ट, र एक ephod, र उहाँले सुनको धेरै सानो Bells संग वरिपरि उहाँलाई सबै र्याप,
45:11 उहाँको आगमन मा एक ध्वनि हुनेछ भनेर, र मन्दिरमा सुने हुनेछ भनेर एक हल्ला गर्न ताकि, आफ्नो मान्छे छोराहरू लागि सम्झनाको रूपमा.
45:12 उहाँले सुन र जलकुंभी र बैजनी एक पवित्र ओढ्ने उहाँलाई प्रदान, न्याय र सत्यको बुद्धिमान् मानिसलाई लागि बुना काम,
45:13 मुड लाल रंग को काम, एक कलाकार को काम, बहुमूल्य ढुङ्गा, कटौती र सुनको सेट, र एक जौहरी काम गरेर कुँदिएका, इस्राएलका कुल संख्या अनुसार एक सम्झनाको रूपमा.
45:14 उहाँले आफ्नो headdress मा सुनको मुकुट उहाँको प्रदान, जो मा पवित्रता को एक प्रतीक लेखिएको थियो, सम्मान को एक चिन्ह. यो सद्गुण को काम र यसको सौन्दर्य मा आँखा गर्न आनन्द थियो.
45:15 पूर्व उहाँलाई, त्यहाँ यस्तो सौन्दर्य कुनै एक थियो, पनि सुरुदेखि.
45:16 कुनै विदेशीले कहिल्यै यी कुराहरू संग ढाकिएको थियो, आफ्नो छोरा र आफ्नो descendents तर केवल एक्लै, सबै समय को लागि.
45:17 आफ्नो बलिदान दैनिक आगो द्वारा खपत थिए.
45:18 मोशाले आफ्नो हात भरिएको र पवित्र तेल उहाँलाई अभिषिक्त.
45:19 अनन्त करार गरिएको थियो, उसलाई र आफ्नो सन्तानलाई साथ, स्वर्गको दिन जस्तै, को पुजारीको को कार्यालय कार्यान्वयन गर्न, र प्रशंसा दिन र आफ्नो मान्छे महिमा गर्न, आफ्नो नाम मा.
45:20 उहाँले परमेश्वरको बलिदानको गर्न प्रस्ताव सबै जीवित मानिसहरूको बीचमा उहाँलाई छनौट, धूप, र एक मनपर्ने खुशबू, आफ्नो मान्छे को तर्फबाट appeasement एक सम्झनाको रूपमा.
45:21 र उहाँले आफ्नो आदेशहरू द्वारा अधिकार उहाँलाई दिनुभयो, उहाँका इन्साफ को करार मा, याकूबले आफ्नो करार सिकाउन, र इस्राएललाई आफ्नो व्यवस्था गरेर प्रकाश दिन.
45:22 त्यसपछि अपरिचित उहाँको विरुद्धमा उठे, र, किनभने ईर्ष्या को, जो Dathan र Abiram थिए मानिसहरू मरुभूमिमा उहाँलाई घेरे, कोरहका मण्डलीको साथ, आफ्नो रिस मा.
45:23 प्रभु परमेश्वरले यस देखे, र यो उहाँलाई प्रसन्न भएन, र त्यसैले तिनीहरू आफ्नो क्रोध को शक्ति द्वारा खपत थिए.
45:24 उहाँले तिनीहरूलाई बीच ठूलो portents गढा, र उहाँले आगो को एक ज्वाला तिनीहरूलाई खपत.
45:25 र उहाँले हारून महिमा थपियो, र उहाँले तिनलाई एउटा उत्तराधिकार दिनुभयो, र उहाँले तिनलाई छुट्याइयो पृथ्वीको पहिलो-फल.
45:26 उहाँले तिनीहरूलाई लागि उत्कृष्ट रोटी पूर्णतामा निम्ति तयार. र तिनीहरूले पनि प्रभुको बलिदान बाट खानु पर्छ, जो उसलाई र आफ्नो सन्तानलाई दिनुभयो.
45:27 र अझै त्यो भूमि मानिसहरूका बीचमा एउटा उत्तराधिकार हुनेछैन, र त्यो मान्छे बीच कुनै भाग छ. प्रभु लागि आफूलाई आफ्नो भाग र आफ्नो सम्पत्तिको छ.
45:28 पीनहासले, एलाजार छोरा, महिमा मा तेस्रो छ, प्रभुको डर उहाँलाई अनुकरण गर्दै.
45:29 र त्यो मान्छे को shamefulness विरुद्ध उठे. को भलाइ र आफ्नो प्राण को उत्तरदायित्व द्वारा, उहाँले इस्राएलका तर्फबाट परमेश्वरको appeased.
45:30 यस कारण, उहाँले उसलाई शान्ति एक करार गरे, बासस्थान र उहाँको मानिसहरूको नेता, को पुजारीको को मर्यादा उसलाई र सदाको निम्ति आफ्नो सन्तानलाई साथ रहने थियो भनेर.
45:31 र उहाँले राजा दाऊदले एउटा करारमा गरे, यहूदा कुलका देखि यिशैको छोरा, उहाँलाई लागि र आफ्नो सन्तानको लागि उत्तराधिकार, उहाँले हाम्रो हृदय लागि बुद्धि प्रदान गर्न सक्छ भनेर, न्याय आफ्नो मान्छे न्याय ताकि, आफ्नो राम्रो कुरा नत्र निर्मूल गर्न. र उहाँले आफ्नो राष्ट्र भित्र आफ्नो महिमा अनन्त हुन कारण.
46:1 यहोशू, नन छोरा, युद्धमा साहसी थियो; उहाँले अगमवक्ताहरूलाई बीच मोशाको उत्तराधिकारी थियो. उहाँले आफ्नो नामको अनुसार ठूलो थियो,
46:2 धेरै महान बचत परमेश्वरको चुन्नु मा. उहाँले insurgent शत्रुहरूविरुद्ध लडेका, उहाँले इस्राएलका लागि उत्तराधिकार प्राप्त हुन सक्छ भनेर.
46:3 उहाँले कुन महान् महिमा सुरक्षित, आफ्नो हात माथि उठाने र शहर विरुद्ध आफ्नो भाला फेंक द्वारा!
46:4 उहाँलाई यति दृढ उभिए छ अघि जो? प्रभु लागि आफूलाई शत्रुलाई अगाडि नेतृत्व.
46:5 छैन सूर्य आफ्नो क्रोध द्वारा रोकिनेछ थियो, र एक दिन गरे भने दुई रूपमा?
46:6 उहाँले सबैभन्दा उच्च पावर आह्वान, शत्रुलाई हरेक पक्षमा उहाँलाई assailed गर्दा. र ठूलो र पवित्र परमेश्वरको अति ठूलो शक्ति को hailstones उहाँलाई जवाफ दिए.
46:7 उहाँले एक शत्रुतापूर्ण राष्ट्र विरुद्ध हिंसात्मक आक्रमण गरे, र आफ्नो वंश मा, उहाँले आफ्नो विरोधीहरू नष्ट,
46:8 ताकि राष्ट्रहरूलाई आफ्नो शक्ति स्वीकार हुनेछ: यो परमेश्वरको विरुद्धमा लड्न सजिलो छैन भनेर. र त्यो सर्वशक्तिमान पछि.
46:9 र मोशाको दिनमा, उहाँले कृपा को काम पूरा. उहाँले र कालेबले, Jephuneh छोरा, शत्रु विरुद्ध उभिए, र पाप देखि मान्छे निषेध, र आफ्नो दुष्ट गनगन भङ्ग.
46:10 र यी दुई, भइरहेको नियुक्त गरिएको, peril मुक्त थिए, नम्बर छ सय हजार खुट्टा सैनिकहरु देखि, आफ्नो उत्तराधिकार तिनीहरूलाई नेतृत्व गर्न ताकि, दूध र मह संग बगिरहेको भूमि मा.
46:11 र प्रभु पनि कालेबले गर्न बल दियो, र आफ्नो शक्ति पनि आफ्नो बुढेसकालमा बाँकी, ताकि उहाँले देशमा उच्च स्थानहरू जानुभन्दा, र आफ्नो सन्तानलाई एक सम्पत्तिको रूपमा यसलाई प्राप्त.
46:12 यो इस्राएलका सबै छोराहरूलाई यो पवित्र परमेश्वरको आज्ञा राम्रो छ भनेर हेर्न भनेर त थियो.
46:13 त्यसपछि न्यायाधीशहरूले थिए, नाम भनिन्छ प्रत्येक एक, जसको हृदय भ्रष्ट थिएन. तिनीहरूले प्रभु त्यागेर थिएन,
46:14 आफ्नो स्मृति आशिष् हुन सक्छ भनेर, र आफ्नो हड्डी आफ्नो ठाउँबाट निस्कने वसन्त सक्छ,
46:15 र आफ्नो नाम सधैंभरि रहने सक्छ, आफ्नो छोरा मा जारी, महिमा को पवित्र मानिसहरू.
46:16 शमूएल, प्रभुको अगमवक्ता, प्रभु आफ्नो परमेश्वरले प्रिय, नयाँ सरकार स्थापना, र उहाँले आफ्नो मान्छे भन्दा नेताहरूले अभिषिक्त.
46:17 प्रभुको कानून द्वारा, उहाँले मण्डलीको न्याय, र याकूबका परमेश्वर देखे, र त्यसैले, आफ्नो निष्ठा द्वारा, उहाँले अगमवक्ता हुन सिद्ध थियो.
46:18 र उहाँले आफ्नो शब्दमा विश्वासी हुन ज्ञात थियो. उहाँले लागि हल्का परमेश्वर देखे.
46:19 र जब शत्रुहरू विरुद्ध लडिरहेका, हरेक पक्षमा जो उहाँको विरुद्धमा उभिए, उहाँले सर्वशक्तिमान प्रभु को नाम आह्वान, एक inviolate पाठो एक भेटी संग.
46:20 र प्रभु स्वर्गबाट ​​thundered, र एक ठूलो हल्ला संग, उहाँले सुने गर्न आफ्नो आवाज गरे.
46:21 र Tyrians नेताहरू उहाँले चोट, र सबै पलिश्तीहरू को कमान्डरहरु.
46:22 र संसारमा आफ्नो जीवनको अन्त समय अघि, उहाँले प्रभुको दृष्टि र उहाँका ख्रीष्टको गवाही प्रस्ताव, उहाँले कुनै पनि शरीर देखि घूस लिएको थियो कि, छैन पनि त एक जुत्ता धेरै, र कुनै मानिस उहाँको विरुद्धमा एउटा अभियोग गरे.
46:23 र यो पछि, उहाँले सुत्थ्यौं. र उहाँले राजा प्रकट गरेको र उहाँलाई आफ्नो जीवन अन्त प्रकट. र उहाँले भविष्यवाणी मा पृथ्वीबाट माथि आफ्नो आवाज उठाएर, मान्छे को impiety उठाउन् गर्न.
47:1 यी कुराहरू गरेपछि, नाथन अगमवक्ता खडा, दाऊदको दिनमा.
47:2 र बोसो मासु अलग छ जस्तै, त्यसैले दाऊदले इस्राएलका छोराहरू अलग थियो.
47:3 उहाँले सिंह संग प्ले, पाठाहरूलाई संग भने, र उहाँले भालू संग पनि त्यस्तै हुन्थे, यदि तिनीहरूले बगालका पाठाहरूलाई थिए, आफ्नो युवावस्थामा.
47:4 उहाँले विशाल मार्न थिएन, र आफ्नो मान्छे देखि निन्दाले लिन टाढा?
47:5 आफ्नो हात माथि उठाने द्वारा, एक गोफन मा एक पत्थर, उहाँले गोल्यतलाई को घमण्ड गराई तल फाले.
47:6 उहाँले सर्वशक्तिमान प्रभु आह्वान लागि, र उहाँले लिन टाढा युद्ध को शक्तिशाली मानिसले आफ्नो दायाँ हातले कसम खाएँ, र आफ्नो मान्छे को सिङ उच्च पार्ने.
47:7 त्यसैले तिनले बीच दस हजार उहाँलाई महिमा, र उहाँले प्रभुको आशिष् उहाँलाई प्रशंसा, उहाँलाई महिमाको मुकुट भेटी द्वारा.
47:8 उहाँले हरेक पक्ष मा शत्रुहरू चोट लागि, र उहाँले आफ्नो विरोधीहरू eradicated, पलिश्तीहरूले, यस दिन गर्न. उहाँले आफ्नो सिङ भङ्ग, पनि सबै समय को लागि.
47:9 आफ्ना सबै काम मा, उहाँले पवित्र धन्यवाद दिनुभयो, सबैभन्दा उच्च गर्न, महिमा को शब्द संग.
47:10 आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले, उहाँले प्रभु प्रशंसा र परमेश्वरको प्रेम, जो उसलाई गरे र जो आफ्ना शत्रुहरूविरुद्ध उहाँलाई शक्ति दिनुभयो.
47:11 र त्यो वेदी विपरीत खडा गायक नियुक्त, र आफ्नो आवाज द्वारा उहाँले मीठो संगीत प्रदान.
47:12 र त्यो उत्सव लागि सौन्दर्य प्रदान, र उहाँले पटक गर्न दिनुभयो, पनि आफ्नो जीवनको अन्त सम्म, तिनीहरूले प्रभुको पवित्र नाम प्रशंसा हुनेछ भनेर, र परमेश्वरको शुद्धि महिमा, प्रारम्भिक बिहान देखि.
47:13 प्रभु आफ्नो पाप पर्ज, र उहाँले सधैंभरि आफ्नो सिङ उच्च. र तिनले राज्यको करार दिए, र इस्राएलका महिमा को एक सिंहासन.
47:14 उसलाई पछि, समझ छोरा उठेर. र उहाँको हालतमा, उहाँले शत्रुहरूको सबै शक्ति तल फ्याँकिएको.
47:15 सुलेमान शान्ति दिनमा शासन, र परमेश्वरले उहाँलाई आफ्नो सबै शत्रुलाई subjected, उहाँले आफ्नो नाम मा एक घर निर्माण हुन सक्छ भनेर, र सबै समय को लागि एक पवित्र मन्दिरमा तयार. हे तपाईं आफ्नो युवा थिए राम्ररी सिकाउनुभयो कसरी!
47:16 र तपाईं एक नदी जस्तै बुद्धि भरिएको थियो, र आफ्नो मन संसारको उजागर.
47:17 र तपाईं Parables को माध्यम द्वारा रहस्यहरुलाई बताए. तपाईंको नाम सम्म बन्द द्वीप थाह भयो, र तपाईं आफ्नो शान्ति लागि प्रिय थिए.
47:18 पृथ्वी आफ्नो canticles भन्दा आश्चर्य थियो, र उपदेश, र Parables, र व्याख्याहरु,
47:19 र प्रभु परमेश्वरको नाम भन्दा, जो इस्राएलका परमेश्वरको रूपमा जानिन्छ.
47:20 तपाईं तामा जस्तै सुन जम्मा, र तपाईं नेतृत्व जस्तै चाँदी गुणन.
47:21 तर तपाईं महिलाहरु आफ्नो जांघ बाङ्गो, र तपाईं आफ्नो शरीर को शक्ति द्वारा आयोजित थिए.
47:22 तपाईं आफ्नो महिमा मा एक दाग ल्याए, र तपाईं आफ्नो बीउ profaned, छोराछोरीलाई मा क्रोध ल्याउन रूपमा यति, र आफ्नो मूर्खता उत्तेजित गर्न,
47:23 तपाईं राज्य कारण थियो भनेर विभाजित गर्न, र एक हठी राज्य एप्रैम देखि शासन गर्न.
47:24 तर परमेश्वरले आफ्नो दया त्याग्न छैन, न त आफ्नै काम उठाउन् उहाँले भ्रष्ट हुनेछ वा. र उहाँले आफ्नो चुन्नु को descendents को स्टक नष्ट छैन. र उहाँले प्रभु प्रेम जो सन्तानका नाश हुनेछ.
47:25 त्यसैले, उहाँले याकूबको लागि र दाउदको एक शेष छोडेर, एउटै स्टक देखि.
47:26 र सुलेमानले आफ्ना पिता आफ्नो अन्त भएको थियो.
47:27 र उहाँले आफ्नो सन्तानलाई केही आफूलाई छोडेर, राष्ट्रलाई को मूर्खता रूपमा:
47:28 रहबामले दुवै, जो सानो प्रूडेंस थियो, र जो मानिसहरू आफ्नो सल्लाह द्वारा दूर गर्यो,
47:29 र यारोबाम, Nebat छोरा, जो इस्राएलका पाप गर्न कारण, र जो एप्रैम गर्न पापको तरिका प्रदान. र आफ्नो पाप अति गुणन थिए.
47:30 तिनीहरूले राम्ररी आफ्नै भूमि टाढा तिनीहरूलाई गरिएका.
47:31 र तिनीहरूले दुष्टताको हरेक प्रकारको खोजे, सजाय तिनीहरूलाई बढ्तै पनि सम्म, र पापको हरेक प्रकारको तिनीहरूलाई छुटकारा.
48:1 अनि अगमवक्ता एलिया आगो जस्तै उठ्दा, र उहाँको वचन एक टर्च आगोजस्तै.
48:2 उहाँले तिनीहरूमाथि अनिकाल ल्याए, र आफ्नो डाह उहाँलाई सुनेपछि गर्नेहरूलाई केही भयो. तिनीहरूले प्रभुको आदेशहरू सहन सकेन.
48:3 प्रभुको वचन द्वारा, उहाँले आकाश बन्द, र उहाँले तल तीन पटक स्वर्गबाट ​​आगो ल्याए.
48:4 यसरी, एलियाले आफ्नो चमत्कारिक काम मा म्याग्निफाइन्ड थियो. त्यसैले जसले महिमा तपाईं समान छ भनेर भन्न सकिन्छ?
48:5 उहाँले गम्भीर देखि एक मृत मानिस खडा, मृत्यु को भाग्य देखि, प्रभु परमेश्वरको वचन द्वारा.
48:6 उहाँले perdition निम्ति राजा तल फाले, र उहाँले सजिलै आफ्नो शक्ति भताभुंग र आफ्नो ओछ्यानमा देखि घमण्ड.
48:7 उहाँले सीनै पर्वतमा न्याय पालन, र Horeb मा सजाय को न्यायलाई.
48:8 उहाँले पश्चात्ताप निम्ति राजा अभिषिक्त, र उहाँले तिनलाई पछि गर्ने अगमवक्ताहरूलाई छनौट.
48:9 उहाँले आगो को एक whirlwind मा प्राप्त भएको थियो, आगोको घोडा संग एक तेज रथ मा.
48:10 उहाँले पटक को इन्साफ मा लेखिएको छ, प्रभुको क्रोध कम गर्न ताकि, छोरा गर्न बुबाको हृदय मिलाप गर्न, र याकूबका कुल पुनर्स्थापना.
48:11 जसले तपाईंलाई देखे ती धन्य हुन्, र जो आफ्नो मित्रताको साथ सजी थिए.
48:12 हामी हाम्रो जीवनमा मात्र बाँच्न, र मृत्यु पछि, हाम्रो नाम नै छैन.
48:13 पक्कै पनि, एलिया whirlwind द्वारा कवर थियो, र आफ्नो आत्मा एलीशाले मा पूरा भएको थियो. आफ्नो दिनमा, उहाँले शासक को डरलाग्दो थियो, र कुनै शक्ति उसलाई पराजित.
48:14 कुनै शब्द उसलाई बढ्तै, र मृत्यु पछि, आफ्नो शरीर भविष्यवाणी.
48:15 आफ्नो जीवनमा, उहाँले ठूलो portents दिनुभयो, र मृत्युको, उहाँले चमत्कार गढा.
48:16 यी सबै कुरामा, मानिसहरूले पश्चात्ताप गरेनन्, र तिनीहरूले पाप फिर्ता गरेनन्, पनि सम्म तिनीहरूले भूमि को फ्याँकिएको थियो, र सबै पृथ्वी भर dispersed थिए.
48:17 र त्यहाँ एक मान्छे पछि नम्बर मा धेरै केही बाँकी थियो, तर दाऊदको घर मा एक नेता संग.
48:18 यी केही परमेश्वरको खुसी के गरे. तर अरूलाई धेरै पाप.
48:19 हिजकियाहले आफ्नो शहर सुदृढ, र उहाँले आफ्नो बीचमा पानी ल्याए, र उहाँले फलाम संग रक मा dug, र उहाँले पानी को लागि एक राम्रो निर्माण.
48:20 आफ्नो दिनमा, सनहेरीबले उठेर, र उहाँले Rabshakeh पठाइएको, र उहाँले तिनीहरूलाई विरुद्ध आफ्ना हात उठाएर, र उहाँले सियोन विरुद्ध आफ्नो हात विस्तार, र उहाँले आफ्नो शक्ति मा घमण्डी भयो.
48:21 त्यसपछि तिनीहरूको हृदय र हात हल्लाउँदै. र तिनीहरूले दुखाइ थिए, जन्म दिने महिला जस्तै.
48:22 र तिनीहरूले दयालु प्रभु आह्वान. र तिनीहरूले आफ्नो हात फैलाउन र स्वर्ग तिनीहरूलाई उठाएर. र पवित्र परमेश्वरले चाँडै आफ्नो आवाज पालन.
48:23 उहाँले आफ्नो पापको mindful थिएन, र उहाँले आफ्नो शत्रुहरूलाई उनलाई दिनुभएन. बरु, उहाँले यशैया हात तिनीहरूलाई purified, पवित्र अगमवक्ता.
48:24 उहाँले अश्शूरीहरूले को सेना तल फाले, र प्रभुको दूतलाई तिनीहरूलाई चोट.
48:25 हिजकियाहले गरे के परमेश्वरले खुसी, र उहाँले दाऊदले आफ्नो बुबा बाटो मा fortitude गए, उहाँले यशैया द्वारा आज्ञा गरिएको थियो जस्तै, एक अगमवक्ता परमेश्वरको दृष्टि ठूलो र विश्वासी.
48:26 आफ्नो दिनमा, सूर्य पछिल्तिर गए, र उहाँले राजाको जीवन थपियो.
48:27 ठूलो आत्माको उहाँले अन्तिम कुराहरू देखे. र उहाँले सियोन मा mourners सान्त्वना.
48:28 उहाँले भविष्यमा प्रकट, पनि टाढा भविष्य, र तिनीहरूले भयो अघि लुकेको कुरा.
49:1 योशियाहको स्मृति एक perfumer काम गरेर बनेको सुगंध को एक मिश्रण जस्तै छ.
49:2 आफ्नो सम्झनामा हरेक मुखमा मह जस्तै मीठो हुनेछ, र रक्सी को एक भोज मा संगीत जस्तै.
49:3 उहाँले ईश्वर राष्ट्रलाई को पश्चात्ताप निर्देशित थियो, र उहाँले impiety को abominations टाढा लिए.
49:4 र उहाँले प्रभु तिर आफ्नो हृदय निर्देशित. र पापी दिनमा, उहाँले piety बलियो.
49:5 दाऊदले भन्दा अन्य, र हिजकियाहले, र योशियाहले, सबैलाई प्रतिबद्ध पाप.
49:6 यहूदाका राजा लागि सबैभन्दा उच्च को व्यवस्था त्यागेर, र तिनीहरूले परमेश्वरको डर लागि घृणा आयोजित.
49:7 तिनीहरूले विदेशीहरू आफ्नो राज्य दिनुभयो लागि, र एक अनौठो मान्छे आफ्नो महिमा.
49:8 तिनीहरूले शुद्धि को चुनिएको शहर आगो सेट, र उनि आफ्नो सडकमा सुनसान बनेको, यर्मियाको हातले अनुसार मा.
49:9 तिनीहरूले wickedly उहाँलाई उपचार को लागि, उहाँले आफ्नो आमाको गर्भबाट अगमवक्ताको रूपमा consecrated थियो हुनत: ढलाउनु गर्न, र बाहिर उखेल्ने गर्न, र नष्ट गर्न, र पुनर्निर्माण गर्न पनि र नविकरण गर्न.
49:10 यो महिमा को एक दर्शन देखे जो इजकिएल थियो, जो Cherubim को रथ उहाँलाई प्रकट भएको थियो.
49:11 यसलाई वर्षा को आंकडा अन्तर्गत शत्रुहरू आपत्ति गर्न भनिन्छ लागि, सोझो मानिसको तरिकामा प्रकट गरेका ती राम्रो गर्न.
49:12 र बाह्र अगमवक्ताहरूको हड्डी आफ्नो स्थान देखि वसन्त सक्छ. तिनीहरूले याकूबको बलियो, र तिनीहरूले एउटा virtuous विश्वास आफूलाई उद्धार.
49:13 हामी बडा हाकिम यरूबाबेलले कसरी महिमा हुनेछ? उहाँले लागि, पनि, सही हात मा एक मुहर जस्तै थियो.
49:14 त्यसैले पनि येशू, Jozadak छोरा, जसले दिनमा घर निर्माण, र प्रभु गर्न एक पवित्र मन्दिर खडा, अनन्त महिमा को लागि एक तैयारी रूपमा.
49:15 र नहेम्याह एक लामो समय को लागि सम्झना हुन सक्छ. भताभुङ्ग भएको थियो कि पर्खालहरु उहाँले हाम्रो लागि खडा. र त्यो ढोकाहरू र बारहरू फर्म गरे. उहाँले हाम्रो घरहरू खडा.
49:16 कुनै एक हनोक जस्तै पृथ्वीमा जन्म गरिएको छ. र त्यो पनि पृथ्वीबाट माथि लगियो.
49:17 र त्यहाँ यूसुफ जस्तै कुनै एक थियो, मानिस आफ्ना भाइहरूलाई बीचमा मुख्य हुन जन्म भएको थियो, आफ्नो कुल को आकाश, आफ्नो भाइहरू एउटा पुस्तिका, आफ्नो मान्छे को MainStay.
49:18 र उहाँको हड्डी भ्रमण थिए, र मृत्यु पछि, तिनीहरूले भविष्यवाणी.
49:19 शेम र सेत मानिसहरूलाई महिमा प्राप्त. र हरेक प्राणी माथि, धेरै सुरुमा, आदम थियो.
50:1 सिमोन, प्रधान पुजारीलाई, Onias को छोरा: आफ्नो जीवनमा, उहाँले घर अप propped, र आफ्नो दिनमा, उहाँले मन्दिरमा बलियो.
50:2 पनि मन्दिरको उचाइ उहाँलाई द्वारा स्थापित भएको थियो: डबल भवन र मन्दिरको उच्च पर्खाल.
50:3 आफ्नो दिनमा, पानी को वेल्स देखि बाहिर बग्ने, र यी उपाय परे पूर्ण थिए, समुद्र जस्तै.
50:4 उहाँले आफ्नो राष्ट्रको हेरचाह, र उहाँले perdition देखि यो स्वतन्त्र.
50:5 उहाँले प्रबल, शहर विस्तार गर्न ताकि. र त्यो मान्छे बीच आफ्नो व्यवहार महिमा प्राप्त. र त्यो घर को र Atrium को प्रवेश बढेको.
50:6 उहाँले बादलमा बीचमा मार्फत बिहान तारा जस्तै आफ्नो दिनमा shined, र पूर्ण चन्द्र जस्तै.
50:7 र उहाँले यस तरिका परमेश्वरको मन्दिरमा निस्कने shined: सूर्य जस्तै यो झन्झन् चमकता गर्दा,
50:8 र एक इन्द्रेणी जस्तै महिमा को बादल बीच चमक, र जस्तै वसन्त को दिन मा गुलाब फूल, पानीको किनारा साथ र जस्तै लिली, र जस्तै मीठो गर्मी को दिन मा frankincense गन्ध,
50:9 आगो झन्झन् चमक जस्तै, र जस्तै frankincense आगो भित्र जल,
50:10 ठोस सुनको भाँडो जस्तै, हरेक बहुमूल्य पत्थर सजी,
50:11 एक जैतून तन्तु रूख उत्पादन जस्तै, र एक सरू रूख जस्तै उच्च मा नै उठाने, उहाँले महिमा को ओढ्ने प्राप्त र सद्गुण को Consummation संग निहित थियो.
50:12 उहाँले शुद्धि को vestment महिमा दिनुभयो, उहाँले पवित्र वेदी जानुभन्दा गर्दा.
50:13 त्यसपछि, उहाँले पूजाहारीहरूको हातमा देखि अंश प्राप्त गर्दा, उहाँले वेदी अर्को उभिए. र उहाँको वरिपरि आफ्नो भाइहरू को मुकुट थियो, लेबनान को पहाडी मा लगाए एक देवदार जस्तै.
50:14 र तिनीहरूले पाम शाखा जस्तै उहाँको वरिपरि उभिए, र सबै आफ्नो महिमा मा हारूनको छोराहरू थिए.
50:15 त्यसपछि प्रभुको oblation आफ्नो हातमा थियो, इस्राएलका सम्पूर्ण सभाघरमा को दृष्टि मा. र वेदी मा आफ्नो सेवा पूरा, सबैभन्दा उच्च राजा गर्न भेटी महिमा गर्न ताकि,
50:16 उहाँले एक libation बनाउन आफ्नो हात विस्तार, र उहाँले अंगूर को रगत बाट प्रस्ताव.
50:17 वेदी को आधार मा, उहाँले सबैभन्दा उच्च राजकुमार एउटा ईश्वरीय खुशबू खन्याइएको.
50:18 त्यसपछि हारूनका छोराहरू चिच्याए; तिनीहरूले सूक्ष्मता बनाएको तुरही सुनिन्थ्यो, र तिनीहरूले एउटा ठूलो हल्ला गरे, परमेश्वरको दृष्टि मा एक सम्झनाको रूपमा.
50:19 त्यसपछि एकैचोटि सबै मानिसहरू अगाडि hurried, र तिनीहरूले आफ्नो अनुहार मा भुइँमा खसे, प्रभु परमेश्वरले पुजा गर्नु गर्न, र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सबैभन्दा उच्च प्रार्थना चढाउन.
50:20 र भजनको गायक आफ्नो आवाज उठाएको, र पूर्ण मीठो ध्वनि ठूलो घर मा वृद्धि.
50:21 र मान्छे प्रार्थनामा सबैभन्दा उच्च प्रभु बिन्ती, प्रभुको आदर पूरा भएको थियो सम्म पनि, र तिनीहरूले उपहार भेटी समाप्त.
50:22 त्यसपछि, घट्दो, उहाँले इस्राएलका छोराहरू सम्पूर्ण मण्डलीको आफ्ना हात विस्तार, आफ्नो ओठ बाट परमेश्वरको महिमा दिन, र आफ्नो नाम मा महिमा गर्न.
50:23 र उहाँले आफ्नो प्रार्थना बारम्बार, परमेश्वरको सद्गुण प्रकट गर्न चाहने.
50:24 र अब, सबै परमेश्वर प्रार्थना, सबै पृथ्वीमा ठूलो कुरा पूरा भएको छ, जो हाम्रो दिन हाम्रो आमाको गर्भबाट बढेको छ, र जो आफ्नो कृपा संग अनुसार हामीलाई तिर गर्नुभएको छ.
50:25 उहाँले हामीलाई हृदयमा joyfulness दिन सक्छ, र त्यहाँ हाम्रो दिनमा शान्ति हुन सक्छ, इस्राएलका अनंत दिनको लागि,
50:26 हाम्रो साथ हुन इस्राएलका परमेश्वरको कृपा विश्वास ताकि, अर्डर हामीलाई आफ्नो दिन मा मुक्त गर्न.
50:27 दुई राष्ट्रका मेरो प्राण घृणा, र तेस्रो, जो म घृणा, एक राष्ट्र हो:
50:28 मा माउन्ट Seir बस्न गर्नेहरूलाई, र पलिश्तीहरूलाई, र शेकेममा बस्ने भएको मूर्ख मान्छे.
50:29 येशूले, Sirach छोरा, यरूशलेमको, जो आफ्नो मनले बुद्धि नवीकरण, यस पुस्तकमा बुद्धि र अनुशासन को सिद्धान्त लेखे.
50:30 अनमोल यी असल कुराहरू द्वारा बसोबास गर्ने उहाँले छ. जसले आफ्नो हृदय यी कुराहरू स्थानहरूलाई कहिल्यै बुद्धिमानी हुनेछ.
50:31 लागि भने उहाँले यी कुराहरू गर्छ, उहाँले सबै कुरामा छाउनेछ. परमेश्वरको ज्योति लागि उहाँको पाइला मा छ.
51:1 येशूको प्रार्थना, Sirach छोरा: म तिमीहरूलाई स्वीकार गर्नेछ, हे प्रभु र राजा, र म तपाईंलाई प्रशंसा दिन हुनेछ, हे परमेश्वर मेरो मुक्तिदाता.
51:2 म आफ्नो नाम स्वीकार गर्नेछ. तिमी मेरो सहयोगी र संरक्षक भएको लागि.
51:3 र तपाईं perdition मेरो शरीर स्वतन्त्र छन्, को iniquitous जिब्रो पासोमा देखि, र जो झूट गाँस्न ती को ओठ बाट. र तपाईं नजिकैको उभिए गर्नेहरूलाई को दृष्टि मेरो सहयोगी भएको.
51:4 र तपाईं आफ्नो नाम को कृपा को भीड अनुसार मलाई स्वतन्त्र छन्: र roared गर्नेहरूलाई निल्न तयार बाट,
51:5 मेरो जीवन खोजे गर्नेहरूलाई हातमा देखि, र कष्ट को फाटक देखि मलाई घेरिएको,
51:6 मलाई घेरिएको कि flames को दमन देखि, र त म आगो को बीचमा जलाइएको थियो,
51:7 नरक को bowels को गहिराइमा देखि, र defiled जिब्रो बाट, र शब्दहरू झूट, एक iniquitous राजा देखि, र एक अन्यायपूर्ण जिब्रो बाट.
51:8 मेरो प्राण प्रभु प्रशंसा गर्नेछु, पनि मृत्यु निम्ति.
51:9 मेरो जीवनको लागि तलको नरक नजिक चित्रकला थियो.
51:10 र तिनीहरूले हरेक पक्ष मलाई घेरिएको. र मलाई सहयोग गर्ने कुनै एक थियो. म मानिसहरूको सहायताको लागि वरिपरि हेरे, र त्यहाँ कुनै पनि थियो.
51:11 त्यसपछि म आफ्नो कृपा सम्झना, हे प्रभु, र आफ्नो काम, जो धेरै सुरुदेखि छन्.
51:12 के तपाईं लागि लागिरहन गर्नेहरूलाई उद्धार लागि, हे प्रभु, र तपाईं अन्यजातिहरूको को हात बाट तिनीहरूलाई मुक्त.
51:13 तपाईं पृथ्वीमा मेरो Habitation उच्च, र म मृत्यु दूर पारित भनेर supplication गरे.
51:14 म प्रभु आह्वान, मेरो प्रभु बुबा, उहाँले मलाई मेरो कष्ट दिनमा त्याग्न थियो भनेर छैन, न त सहायता बिना अहङ्कारको समयमा.
51:15 म unceasingly आफ्नो नाम प्रशंसा हुनेछ, र म धन्यवाद यसलाई प्रशंसा हुनेछ, मेरो प्रार्थना पालन थियो.
51:16 र तपाईं perdition मलाई छुटकारा, र तपाईं iniquity समय मलाई उद्धार.
51:17 किनभने यो, म तपाईंलाई धन्यवाद र प्रशंसा दिनेछु, र म प्रभुको नाम दिनुहुनेछ.
51:18 जब म अझै पनि जवान थिए, म हराउनु अलमलिएको अघि, म मेरो प्रार्थनामा खुल्लमखुल्ला बुद्धि खोजे.
51:19 म मन्दिर अघि उनको लागि आग्रह, र पनि धेरै अन्त गर्न, म उनको पछि सोध्नु हुनेछ. र त्यो एक नव-ripened अंगूर जस्तै फस्टाए.
51:20 मेरो हृदय उनको आनन्दित. मेरो खुट्टा सही मार्गमा हिंडे. मेरो युवा देखि, म उनको अपनाए.
51:21 म मेरो कान अलि बाङ्गो र उनको स्वीकार.
51:22 म भित्र धेरै बुद्धि फेला, र म उनको निकै लाभ.
51:23 म मलाई बुद्धि दिनुहुने उहाँलाई महिमा हुनेछ.
51:24 लागि म बुद्धि अनुसार कार्य गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौं. म राम्रो छ के को लागि जोसिलो भएको, र त म छैन हैरान गरिनेछ.
51:25 मेरो प्राण बुद्धिको लागि संघर्ष छ, र यसो, म पुष्टि गरिएको छ.
51:26 म उच्च मा मेरो हात विस्तार, र म उनको मेरो अज्ञानता शोकाकुल.
51:27 म उनको तिर मेरो प्राण निर्देशित, र म ज्ञान भित्र उनको फेला.
51:28 सुरुदेखि, म बुद्धि मेरो हृदय आयोजित. किनभने यो, म त्याग्ने गरिनेछ.
51:29 मेरो पेट उनको खोजिरहेका बेला भड्काए थियो. उनको कारणले, म एक राम्रो सम्पत्तिको पकड हुनेछ.
51:30 प्रभु मेरो इनाम रूपमा जिब्रो दिइएको छ, र म यो उहाँको प्रशंसा हुनेछ.
51:31 मलाई नजिक, untaught छन् जसले तपाईंलाई, र अनुशासन को घरमा आफूलाई भेला.
51:32 तिमी किन हिचकिचाउने? र के तपाईं यी कुराहरू बारे भन्न छैनन्? आफ्नो प्राण अति तिर्खा लागेको छ!
51:33 म मेरो मुख खुलेको, र म बोलेको छु. चाँदी बिना आफूलाई लागि बुद्धि किन्न,
51:34 र उनको जुवा आफ्नो घाँटी अधीनमा, र आफ्नो प्राण उनको अनुशासन स्वीकार गरौं. त्यो नजिक छ लागि पर्याप्त फेला गर्न.
51:35 म मात्र एक सानो labored छ कसरी आफ्नो आफ्नै आँखाले हेर्न, र आफैलाई लागि धेरै बाँकी फेला.
51:36 अनुशासन लाग्न, यो मुद्रा को एक महान योगफल थिए भने, र सुनको एउटा प्रशस्त अधिकार उनको.
51:37 आफ्नो प्राण आफ्नो कृपा आनन्दित गरौं. तपाईं आफ्नो प्रशंसा द्वारा हैरान गरिनेछ लागि.
51:38 समय अघि आफ्नो काम पूरा. र उहाँले आफ्नो समयमा आफ्नो इनाम तपाईं दिनेछु.